San Htun's Diary: 2017
ဂျီစီ ခရီးကြမ်း - ၁၃
ဟေ ... နိုင်ငံခြားမှာ ပိုက်ဆံအကုန်ခံ အပင်ပန်းခံပြီး ပညာသင်ခဲ့တာ ပြည်တွင်းမှာနေတဲ့သူထက်တော့ ပိုပေးရမှပေါ့။ ဟင့်အင်း ... ဗီယက်နမ်မှာတော့ နိုင်ငံခြားမှာ အလုပ်မရလို့ပြန်လာတာ။ နင့်ဘာသာ နိုင်ငံခြားမှာ ဘယ်လောက်ရရ ပြည်တွင်းမှာဆိုရင် ပြည်တွင်းဈေးပဲ။ နိုင်ငံခြားဈေးရချင်ရင် နိုင်ငံခြားနေမှာနေ ပြည်တွင်းကို မလာတဲ့။ ဝိုင်းနဲ့ ကိုယ် ငြင်းကြခုန်ကြရင်း နောက်ဆုံးတော့ သဘောပေါက်သွားကြတယ်။ ဗီယက်နမ်မှာ နိုင်ငံခြားထွက် ပညာသင်တဲ့သူ များတာကိုး။ လူတိုင်းနီးပါး နိုင်ငံခြားထွက် ပညာသင်ကြတယ်။ ကိုယ်တို့ နိုင်ငံမှာတော့ နိုင်ငံခြားထွက် ပညာသင်ကြတဲ့သူနည်းတော့ နိုင်ငံခြားပြန်တွေ ဈေးကောင်းတယ်ထင်ပါ့။ အလုပ်အသစ်က H1B transfer ပဲ လုပ်ပေးတယ် ဂရင်းကဒ်စပွန်ဆာ မပေးဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေက ဂရင်းကဒ်စပွန်ဆာပေးတဲ့ အလုပ်ကို စောင့်ပါလားတဲ့။ ဂရင်းကဒ်စပွန်ဆာပေးတဲ့ အလုပ်က ဘယ်တော့ရမယ်မှန်းမသိ။ ဒီလောက် ကြပ်နေတဲ့အချိန် အော်ဖာပေးတာယူ H1B နဲ့ ဆက်လုပ် နောက်မှမီးစင်ကြည့်ကမယ်။ အဝေးကြီး မစဉ်းစားဘူး နောက် ၂ နှစ်အတွက်ပဲ စဉ်းစားမယ်။ တတိယအဆင့် I-485 က ငါးလရှိနေပြီ ဘာသတင်းမှ မကြားဘူး။ အလုပ်ရှင်က cancel လိုက်ပြီလားမသိ ကိုယ်လည်း ဘာမှလုပ်လို့ မရ။ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာက ဘုရားမှာ ဆုတောင်းတာပဲ လုပ်နိုင်တော့တယ်။ နေ့ လည်ထမင်းစားပြီးလို့လမ်းလျှောက်ထွက်ရင် ဝေါစတိလမ်းနားက Lady of Victory ၊ Trinity Church သွားပြီး ဂရင်းကဒ် အမြန်ဆုံးရပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်။ စတိတ်မှာ ကျောင်းလာတက်သူ အများစုက အဆိုင်လမ်လျှောက်ကြတယ် နင်က ဘာလို့ မလျှောက်တာလဲ။
အဆိုင်လမ်လျှောက်ဖို့လုံးဝစိတ်မကူးဘူး စင်္ကာပူမှာကျောင်းတက် အလုပ်လုပ် ဟောင်ကောင်၊ မကာအို သွားလည်သွားတာတွေ ပတ်စ်ပို့ မှာ ရှိနေတယ်။ ဖိနှိပ်ခံရလို့အဆိုင်လမ်လျှောက်ပါတယ်ဆိုရင် ဘယ်သူက ယုံမလဲနော် ကိုယ့်ဟာကို တွေးကြည့်တာပါ။ ဂရင်းကဒ်ဝယ်မလားလို့ တော့ စိတ်ကူးမိတယ် ဟန်ဆောင်လက်ထပ်တာကိုပြောတာ။ အစတုန်းကတော့ တရားရုံးမှာ လက်မှတ်ထိုးရင် ဒေါ်လာ ၂ သောင်း ကွာရှင်းပြတ်ဆဲပြီးရင် ဒေါ်လာ ၁ သောင်း စုစုပေါင်း ၃ သောင်းကုန်ရင် ဂရင်းကဒ်ရတယ် လုပ်မလားလို့အသိအစ်မက ပြောဖူးတယ်။ ဂရင်းကဒ်လျှောက်တာ ၃ သောင်းလောက် ကုန်နေပြီ ပလုံပြီလားမသိ။ ဂရင်းကဒ်ဝယ်တာကမှ ဟုတ်ဦးမယ် ဝယ်မယ်ဆိုရော ဂဃနဏ ဘယ်သူမှမသိဘူး ကြားဖူးတာပဲရှိတယ်။ တချို့ တွေက ကွဲရှင်းပြတ်ဆဲပေးစေချင်ရင် ပိုက်ဆံထပ်ညစ်ကြတာတွေလည်း ရှိတယ်တဲ့။ နယ်ကလူတွေက ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ က မိန်းမအရမ်းလိုချင်နေကြတဲ့သူတွေဆိုတော့ ကွာရှင်းမပေးမှ ဒုက္ခ သွားမလုပ်လေနဲ့ ဆိုလို့ရယ်လိုက်ရတာ။ ဝိုင်းနဲ့ ဖေ့ဘွတ်မှာ မိတ်ဆွေဖြစ်နေတဲ့ တောင်ဗီယက်နမ်က ညီအစ်မ ၂ ယောက်က အဲဒီလိုဟန်ဆောင်လက်ထပ်ပြီး ဂရင်းကဒ်ကို ဝယ်တာတဲ့။ ညီမအငယ်ကတော့ ဟန်ဆောင်လက်ထပ်ရာကနေ တကယ်ချစ်ကြိုက်သွားလို့လက်ထပ်သွားကြတယ်။ နင်လည်း အဲဒီလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ဘယ်သူပြောနိုင်သလဲလို့နောက်နေလို့မပြုံးဘဲဝါးလုံးကွဲ ရယ်လိုက်ကြတာ။ ဂျူလိုင်လကုန်မှာ USCIS ကနေ RFE (Request For Evidence) တောင်းတဲ့စာ ရှေ့ နေ့ ဆီကို ရောက်တယ်။ မနှစ်က ဆေးစစ်တဲ့ဖောင်မှာ Gonorrhea စစ်တာမပါလို့ထပ်စစ်ခိုင်း၊ မွေးစာရင်း ထပ်တောင်းတာ။ ရှေ့ နေ့ က တော်သေးတယ် စန်းစန်းရေ ကိုယ့်ဖက်က ပေးနိုင်တာတွေမို့ လို့အလုပ်ရှင်ဆီက တောင်းတဲ့ဟာဆိုရင်တော့ သေပြီပဲ။
H1B transfer approved မဖြစ်ခင် မြန်မြန်တင်ရအောင် H1B approved ဖြစ်သွားရင် ဂရင်းကဒ်အတွက် ခက်သွားလိမ့်မယ်။ ဆေးခန်းတွေကို မေးကြည့်တော့ ဆေးစစ်ခက ၃၀၀ - ၅၀၀ ကြား အလုပ်ဝင်ခါစ ၆ လမပြည့်သေးတော့ ကျန်းမာရေးအာမခံ မရှိသေးဘူး။ ကျန်းမာရေးအာမခံရှိလည်း အဲဒီစစ်ဆေးတာတွေက အကျုံးမဝင်လို့ကိုယ့်ဘာသာပေးရတယ်။ အရင်စစ်ခဲ့တဲ့ဆေးခန်းကို သွားမေးတော့ မနှစ်ကစစ်ပြီးသား မနှစ်ကဖောင်မှာ မပါလို့ မဖြည့်တာ ဖောင်အသစ်ကို ဖြည့်ပေးမယ် ပိုက်ဆံတပြားမှ ထပ်ပေးစရာမလိုဘူးတဲ့။ နယ်မှာ အရပ်လက်သည်နဲ့မွေးခဲ့လို့ကိုယ့်မှာ မွေးစာရင်းမရှိဘူး။ ကျမ်းကျိန်လွှာကို နိုထရီလုပ်ထားတာပဲရှိတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကို မေးကြည့်တော့ သူတို့ က ရန်ကုန်သူတွေ ဂျမန်ခနာဆေးရုံမှာ မွေးခဲ့တာ မွေးစာရင်းသွားတောင်းတော့ ထုတ်ပေးတယ်တဲ့။ စတိတ်ကို အလည်ရောက်နေတဲ့ အဖေက ဟိုင်းကြီးက သူ့ သူငယ်ချင်းကိုဖုန်းခေါ်ပြီး ဟိုင်းကြီးတိုက်နယ်ဆေးရုံက ဆရာဝန်ကို မွေးစာရင်းထုတ်ပေးဖို့ ပြောတော့ သူမွေးပေးတာ မဟုတ်လို့မထုတ်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့။ ငပုတောမြို့ နယ်က တိုက်နယ်ဆရာဝန်ကြီးကတော့ ထုတ်ပေးနိုင်မယ်ထင်တယ်တဲ့။ အဖေနဲ့တိုက်နယ်ဆရာဝန်က အင်မတန်ခင်ကြပေမဲ့ မွေးစာရင်းကိစ္စကိုတော့ မကူညီပေးနိုင်ဘူး။ နယူးယောက်က မြန်မာရှေ့ နေ့ ကို မွေးစာရင်းထုတ်ပေးနိုင်မလား မေးကြည့်တော့ ရန်ကုန်မှာမွေးခဲ့ရင် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှာ မှတ်ပုံတင်၊ သန်းခေါင်စာရင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်မဟုတ်လည်း သွားထုတ်လို့ ရတယ်။ နယ်မှာမွေးခဲ့ရင်တော့ မြို့ နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှာ သွားထုတ်ရမယ်တဲ့။
ဝတုတ်နေလို့အမေနဲ့ မကြီးကတောင် မမှတ်မိတဲ့ စန်းထွန်း၊ သဲသဲ၊ တရုတ်မယန်း၊ ဝိုင်း၊ ဂျူးဂျူး
SariPraPhai Thai Restaurant, Woodside, NY. Oct 14, 2017.
အရင်တုန်းက ဟိုင်းကြီးကျွှန်းက ငပုတောမြို့ နယ်အပိုင် ခုမှ ဟိုင်းကြီးမြို့ နယ် ဖြစ်သွားတာဆိုတော့ ငပုတောမှာ သွားထုတ်ရမယ်။ မွေးစာရင်းမမြင်ဘူးလို့တူတော်မောင် ဘုန်းသန့် ခေါင်ရဲ့မွေးစာရင်းကို တောင်းကြည့်ရတယ်။ အဖေ ရန်ကုန်ကိုပြန်ရောက်တာနဲ့မနားဘဲ နောက်နေ့ ချက်ချင်း ပုသိမ်ကိုဆင်း ပုသိမ်ကနေ ငပုတောမြို့ ကို ကားထပ်စီး။ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရောက်တော့ မြို့ နယ်ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ တွေ့ ဖို့အကြာကြီးစောင့်ရတယ်။ မွေးစာရင်းထုတ်ပေးဖို့၇ သိန်း ပေးရမယ်၊ ဒါတောင် ချက်ချင်းရဖို့မသေချာဘူး၊ နေပြည်တော်ကို တက်ရမလားမသိ။ ထောင်ကျနိုင်လို့၇ သိန်းပေးရင်တောင် လုပ်ပေးဖို့ အင်တင်တင်။အဖေ့မှာ စတိတ်က ပြန်ရောက်တာနဲ့ချက်ခြင်းနယ်ကိုဆင်း၊ အကြာကြီးစောင့်၊ ဟိုပြေးဒီပြေး သမီးအတွက် ပင်ပန်းရှာတယ်။ အစစ်လုပ်ချင်ပါတယ်ဆိုတာတောင် ခက်လွန်းလို့အတုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဘာလမ်းမှာ အတုလုပ်ပေးတယ် ၅ ထောင်ပဲပေးရတယ် နိုထရီအပါအဝင်။ မွေးစာရင်းက အတုမှန်းမသိအောင် ဟောင်းနွှမ်းစုတ်ပြတ်နေတဲ့ စာရွက်နဲ့ လုပ်ထားတယ်။ တချို့ တွေဆို ဘွဲ့ တောင် အတုလုပ်ကြတာတဲ့။ ဒီဗွီပေါက်လို့သံရုံးဝင်တဲ့အခါ ဘွဲ့ လတ်မှတ်အတုမို့ လို့အငြင်းခံရဖူးတယ် မွေးစာရင်းအတုမှန်းသိပြီး ဂရင်းကဒ်ကို ငြင်းနေမှဒုက္ခ။ မတတ်နိုင်တော့ဘူး မွှေးစာရင်းအတုမို့ လို့ငြင်းတယ်ဆိုလည်း ကံပဲအေ။ မွေးစာရင်းနဲ့နိုထရီကို မြန်မာပြည်လူကြုံနဲ့အမြန်ဆုံးပို့ ။ ရှေ့ နေ့ ကိုပေးတော့ ရှေ့ နေ့ က အေး ဒါမှသူတို့ လိုချင်တာ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနတံဆိပ်၊ မိသားစုသန်းခေါင်စာရင်း အိုကေပြီ Fedex ပို့ ခ ၁၅၀ ထပ်ပေး သြဂုတ်လကုန်ခါနီး USCIS ကို တင်တယ်။
ဖေဖေါ်ဝါရီ ကိုယ် လက်ဗွေသွားနှိပ်တုန်းက ဆူနမ်က လေဘာစာတီဖီကိတ်အဆင့်ပဲ ရှိသေးတယ်။ ခု ဂရင်းကဒ်ရပြီတဲ့ လေဘာစာတီဖီကိတ်အဆင့်ကကြာပြီး ဒုတိယအဆင့် I-140 နဲ့တတိယအဆင့် I-485 က မြန်လိုက်တာ တဒိုင်းဒိုင်းပဲ။ ကိုယ်တို့ အုပ်စုထဲမှာ ဂရင်းကဒ်မရတာ ကိုယ်တယောက်တည်း ကျန်တော့တယ် အားငယ်လိုက်တာ။ H1B တင်ထားတာလည်း ငါးလရှိပြီ ဘာသတင်းမှမကြား H1B အဟောင်းသက်တမ်းက စက်တင်ဘာဆိုကုန်ပြီ ၁ လပဲကျန်တော့တယ်။ ဂရင်းကဒ်လျှောက်နေတုန်း H1B transfer လုပ်ဖူးတဲ့ ဆူနမ်က စန်းစန်း H1B အဟောင်း သက်တမ်းကုန်သွားပေမဲ့ H1B transfer result မသိမချင်း legal ဖြစ်တယ် out of status မဖြစ်ဘူး စိတ်မပူနဲ့ တဲ့။ အွန်လိုင်းဖိုရမ်တွေမှာ ဖတ်ကြည့်တော့ ဘာသတင်းမှမကြား တက်ဆပ်၊ နီဘားစကား၊ ဗာမွန်၊ ကယ်လီဖိုးနီယားရုံးတွေထဲမှာ ကိုယ်လျှောက်တဲ့ နီဘားစကားရုံးက လိပ်နှုန်းနဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်။ Priority Date က current ဖြစ်နေပြီလို့ ပြတယ် ဆိုလိုတာက ကိုယ့်ဟာကို စစ်နေပြီပေါ့။ ဒီအချိန်မှာ ကိုယ်ဘာအလုိုချင်ဆုံးလဲလို့ မေးရင် နိဗ္ဗာန်တွေအသာထား ခုချိန် အလိုချင်ဆုံးက ဂရင်းကဒ်ပဲ။ ဂရင်းကဒ်ရှိရင် အလုပ်ပြုတ်လည်း အေးဆေးပဲ အချိန်ပြည့်အလုပ် မလုပ်ချင်ရင်တောင် အချိန်ပိုင်းအလုပ် လုပ်လို့ ရတယ်။ အချိန်ပိုင်းအလုပ် မလုပ်ချင်ရင်တောင် အလုပ်အကိုင်မဲ့အခွင့်အရေး အစိုးရဆီက တောင်းလို့ ရတယ်။ ဗီဇာအတွက် ရင်တမမ ဘယ်တော့ status မရှိဖြစ်သွားမလဲ illegal ဖြစ်သွားမလဲ ပူစရာမလိုတော့ဘူး။ ကိုယ်လုပ်နိုင်တဲ့ ဆုတောင်းတာ၊ သောက်တော်ရေ၊ ပန်း၊ ဆီမီးကပ်တာကိုတော့ သေသေချာချာ လေးလေးနက်နက် လုပ်တယ်။ ကိုယ်က နိုင်ငံခြားသားဆိုတော့ အလုပ်အရမ်းကြိုးစား အခွန်တွေဆောင် ဘာအခွင့်အရေးမှမရှိ။
လင်မယား ၂ ယောက် အလုပ်လုပ်လို့ဝင်ငွေနည်းတဲ့မိသားစုလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဝင်ငွေကို ကျော်သွားရင် အစိုးရက ထောက်ပံ့နေတဲ့ ကျန်းမာရေးအာမခံ မက်ဒီကိတ် ဆုံးမှာစိုးလို့အလုပ်မလုပ်၊ ကလေး ၄ ယောက်မွေးပြီး အလုပ်လက်မဲ့၊ single mom ဆိုပြီး အစိုးရဆီက ထောက်ပံ့ငွေ တောင်းနေတာတွေ ရှိတယ်။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဆိုတော့ loopwhole ဥပဒေကို အမြတ်ထုတ်တာတွေရှိတယ်။ အောက်တိုဘာ ၅ ရက် ညနေ ၃ နာရီ USCIS က alert မတ်ဆေ့အီးမေးလ်ရတော့ ရီဂျတ်များဖြစ်ပြီလားလို့ရင်တဒိတ်ဒိတ်နဲ့စစ်လိုက်တော့ I485 card production တဲ့။ ဂူဂယ်မှာ ရှာကြည့်တော့ ဂရင်းကဒ် approved ဖြစ်ပြီလို့ ဆိုလိုတာတဲ့။ approved ဖြစ်ပြီဆိုပေမဲ့ H1B transfer လုပ်ထားတာကိုသိသွားလို့ဂရင်းကဒ်မထုတ်ပေးရင် ဒုက္ခပဲနော်လို့စိတ်ပူနေလို့ဝိုင်းက ငါတော့ အဲဒီလိုမထင်ပါဘူးတဲ့။ ဆူနမ်က အဲဒီလိုမရှိပါဘူး approved ဖြစ်ပြီးမှ ဘွာတေးလုပ်လို့ မရဘူး ပူပင်သောကတွေကို ရှာဖွေမတွေးပါနဲ့ တော့ စိတ်ချလက်ချ ပျော်ပါတော့လို့ပြောယူရတယ်။ ရှေ့ နေ ကို လှမ်းမေးတော့ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း ၂ ပတ်ကနေ ၂လကြား စာတိုက်ကနေ ဂရင်းကဒ်ရောက်လာလိမ့်မယ်။ သူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေတွေကို ဖုန်းဆက်၊ မတ်ဆေ့ပို့ထခုန်မတတ် ဝမ်းသာတယ်။ ၆ နှစ် ဒုက္ခခံရတဲ့အကျိုး ခံစားရပြီ။ တချိန်လုံး ထမ်းပိုးထားရတဲ့ အင်မတန်လေးလံလှတဲ့ အထုပ်ကြီး လွှတ်ချလိုက်ရသလို စိတ်နှလုံးပေါ့ပါးသွားတယ်။ ရှေ့ နေ့ ၊ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ကိုယ့်အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ပြီး ကိုယ်ဟာ အင်မတန့် အင်မတန် ကံကောင်းတဲ့သူလို့ပြောကြတယ်။ အလုပ်ပြုတ်ပြီဆိုကတည်းက ဂရင်းကဒ်က ပြီးသွားပြီ အင်မတန်ကံကောင်းလွန်းလို့ သာ ဂရင်းကဒ်ရတာတဲ့။ ကိုယ်ဟာ ဘယ်အရာကိုမှ လွယ်လွယ်နဲ့ မရ သူများထက် ပိုက်ဆံကုန်၊ သူများထက် စိတ်ဆင်းရဲရသူမို့ကံလည်းကောင်းသလို ကံလည်းဆိုးတယ်။ အခက်အခဲ အင်မတန်များပြားလှတဲ့ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းလှတဲ့ ဂျီစီခရီးကြမ်းဟာ ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနဲ့ အတူ မိဘကောင်း၊ သူငယ်ချင်းကောင်း၊ မိတ်ဆွေကောင်းတွေရဲ့အကူအညီနဲ့ချောမွေ့ ခဲ့တယ် ဆိုပါတော့။
ဒီဇင်ဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇။
ချစ်အစ်မများ မခိုင်၊ မမီး
Penang Malaysian Restaurant, Edison, New Jersey
ဂျီစီ ခရီးကြမ်း - ၁၂
အရင်အလုပ်တွေတုန်းကတော့ ခုသောကြာနေ့ ဟာ နောက်ဆုံးနေ့ လို့အကြောင်းကြားသေးတယ်။ ဒီအလုပ်ကတော့ ချက်ချင်းဖြုတ်တာ သူဋ္ဌေးရုံးခန်းက ပြန်လာတာနဲ့အီးမေးလ်က ဝင်လို့ မရတော့ဘူး။ ခရစ်စမတ်ချိန်ဆိုတော့ အလုပ်ရှာလို့ မရမဲ့ အတူတူ ၇ ရက်တရားစခန်း ဝင်လိုက်တယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု worry တွေများလို့ နဲ့တူပါရဲ့နှာသီးဝကိုတောင် မှတ်လို့ မရဘူး။ ဒါပေမဲ့ သီလကုသိုလ်၊ ဝေယျာဝစ္စကုသိုလ်တော့ ရပါတယ်။ စီဗွီကို အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီး အလုပ်ဆိုဒ်တွေမှာတင်။ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်ဆိုတာနဲ့အလုပ်ခေါ်တဲ့ဖုန်းတွေ ဝင်လာပြီ။ မနက် ၉ နာရီကနေ ညနေ ၆ နာရီအထိ အခန်းအောင်းပြီး အလုပ်ရှာ၊ အင်တာဗျူးအတွက် ပြင်ဆင်၊ HackerRack ၊ LeetCode ဆိုဒ်တွေမှာ ပရိုဂရမ်းမင်းလေ့ကျင့်၊ အင်တာဗျူးအမေးအဖြေတွေ ပြန်ဖတ်၊ ကျောင်းမှာသင်တဲ့ FPP course က သင်ခန်းစာတွေ ပြန်လေ့လာ။ ပထမဆုံးဖုန်းအင်တာဗျူးက ကယ်လီဖိုးနီးယားက သူတို့ ကုမ္ဗဏီအကြောင်း ဘာတွေသိလဲမေးတော့ ဟယ် ကုမ္ဗဏီအကြောင်း မလေ့လာထားဘူး။ ဒါဆို ကုမ္ဗဏီကို စိတ်မဝင်စားဘူးပေါ့ ဆောရီးဆိုပြီး ဖုန်းချသွားလို့ပထမဆုံးအင်တာဗျူးမှာ ပထမဆုံးမေးခွန်းနဲ့ တင် ကျတယ်။ အင်တာဗျူးတွေ များများဖြေတော့မှ မဖြေနိုင်ရင် လေ့လာမှတ်သား ဒီလိုနဲ့ တဖြည်းဖြည်း အင်တာဗျူး ကျွှမ်းကျင်လာတယ်။ တချို့ တွေက သဘောကောင်းတယ် တချို့ တွေက ရိုက်ပေါက် အော်ဖာကမ်းရင်တောင် ငြင်းပစ်လိုက်မယ် တကထဲမှပဲ။ Coding Test စာမေးပွဲတွေ ဖြေရတယ်။ လူတွေ့ အင်တာဗျူး ၅ ခုရတယ် ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော့ ဖြေနိုင်တယ်လို့ ထင်တာပဲ။ အရည်အချင်း တူတယ်ဆုိုရင်တောင် ဂရင်းကဒ်၊ စီတီဇင်တို့ ကို ခေါ်မှာပေါ့။
အလုပ်ရှုပ်တဲ့ H1B transfer ဂရင်းကဒ်စပွန်ဆာ လိုချင်တဲ့သူကို ဘယ်ခေါ်ပါ့မလဲ။ ထရန့် လက်ထက်မှာ တင်းကျပ်နေတာတွေ သတင်းမှာလည်း တွေ့ နေရတယ်။ တရားစခန်းမှာ သိခဲ့တဲ့ လူကောင်သေးသလောက် လမ်းလျှောက်ရင် ဒုန်းဒုန်းမြည်အောင် လမ်းလျှောက်လို့ဒေါ်ဒုန်းလို့နာမည်ပြောင်ပေးထားတဲ့ မျက်ခုံးတခြား မျက်ခုံးမွှေးဆွဲခဲတံတခြား ဆွဲတတ်တဲ့ အန်တီကြီးက သူ့ သားမက်ကို ဖုန်းဆက်ခိုင်းတယ်။ အစ်ကိုကြီးက ကွန်ပျူတာနဲ့အလုပ်လုပ်တော့ သူတို့ ရုံးမှာခေါ်နေတဲ့ အလုပ်တွေကို ကိုယ့်ဆီ အီးမေးလ်ပို့ ပေးတယ် ကိုယ်က စီဗွီပို့ တယ်။ အစ်ကိုကြီးက ကိုယ့်လို ကျောင်းသားဗီဇာကနေ H1B သွားတာဆိုတော့ ကိုယ့်အခြေအနေကို နားလည်တယ်။ စီဗွီပို့ ပေးတယ်၊ လမ်းညွှန်ပေးတယ်၊ သင်ပြပေးတယ်ဆိုတာ အင်မတန်သဘောကောင်းပြီး ကူညီတတ်လို့ ။ ၂၀၁၂ ကန်တက်ကီမှာတုန်းက ကိုယ်အလုပ်ရှာနေတယ်ဆိုတာ ဘလော့ဖတ်ပြီးသိလို့HR ကို ပို့ ပေးမယ် စီဗွီပို့ ဆိုပြီး အီးမေးလ်ပို့ ကူညီတဲ့သူ ရှိဖူးတယ်။ စင်္ကာပူအမျိုးသားတက္ကသိုလ်တက်တုန်းက ကိုယ်နဲ့ တဖွဲ့ တည်းကျတဲ့ တရုတ်မက မိုက်ခရိုဆော့မှာ အလုပ်လုပ်နေတယ်။ ၂၀၁၃ အလုပ်ပြုတ်တော့ အဲ့ဒီတရုတ်မကို မိုက်ခရိုဆော့ HR ကို စီဗွီပို့ ပေးပါလားလို့အကူအညီတောင်းတော့ မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးတဲ့။ အမြင်ကပ်လို့ဖေ့ဘွတ်မှာ unfriend လုပ်လိုက်တယ် စိတ်ပုပ်မ။ သူငယ်ချင်းတွေက စိတ်ပူကြတယ် အင်တာဗျူးဘယ်လိုနေလဲလို့မေးကြတယ်။ စီနီယာတယောက်ဆို အလုပ်ရှာနေတာကြာပြီ ဖုန်းအင်တာဗျူးတခုမှတောင် မရဘူးတဲ့။
မကြီးရှိနေလို့တော်သေးတယ် သူကချက်ပြုတ်ပေးတော့ အစားအသောက်အတွက် ပူစရာမလိုဘူး။ အလုပ်ပြုတ်လို့ကျန်းမာရေးအာမခံမရှိတော့ ဆေးခန်းလည်းမပြနိုင်ဘူး။ ကိုယ်သောက်တဲ့ hydroxychloroquine ဆေးက အလုံး ၆၀ တလစာ ကျန်းမာရေးအာမခံနဲ့၁၀ ပေးရပေမဲ့ ကျန်းမာရေးအာမခံမပါရင် ၂၀၀ ပေးရတယ်။ အရင်တုန်းက ကျန်းမာရေးအာမခံ တလကို ကိုယ်က ၂၀၀၊ ကုမ္ဗဏီက ၄၀၀ ပေးတယ်။ ကျန်းမာရေးအာမခံ တလ ၆၀၀ ဆိုတာ ဈေးအပေါဆုံး ကျန်းမာရေးအာမခံ။ ပြည်နယ်ဥပဒေအရ အလုပ်ပြုတ်သွားပေမဲ့လည်း အရင်ကုမ္ဗဏီရဲ့ကျန်းမာရေးအာမခံထဲ ပါဝင်ခွင့်ရှိတာကို CORBA လို့ ခေါ်တယ်။ CORBA နဲ့ ဆိုရင် ကျန်းမာရေးအာမခံ တလ ၆၀၀ ကိုယ်ကပေးရမှာ။ အလုပ်ပြုတ်လို့ဝင်ငွေမရှိချိန် တလ ၆၀၀ ပေးဖို့ ဆိုတာ အတော့်ကိုမလွယ်တာ။ ကုမ္ဗဏီက CORBA ယူမလား မေးပေမဲ့ မယူနိုင်တော့ဘူး။ ဈေးပေါတဲ့ အာမခံဝယ်ပြီး ဆေးဝယ်ရတယ်။ တော်သေးတယ် ဆရာဝန်မက ၆ လစာ ဆေးဝယ်ခွင့် ပေးထားတယ်။ ဆေးခန်းသွားပြရင် ကျန်းမာရေးအာမခံနဲ့ ဆို ၄၀ လောက်ပဲပေးရပေမဲ့ ကျန်းမာရေးအာမခံမရှိရင် ဆရာဝန်ပြခ၊ သွေးစစ်ခ တခါပြရင် ၄၀၀ ကနေ ၆၀၀ လောက်ကုန်တယ်။ အလုပ်ပြုတ်ချိန်မှာ ဆေးခန်းလည်း မပြနိုင်ဘူး။ ဆရာမကြီးဒေါက်တာဒေါ်ခင်နွှယ်ဝင်း ဗွီဒီယိုတွေ နားထောင်ပြီး ဆနွှင်းနဲ့ငါးကြီးဆီ Carlson cod liver oil၊ ပန်းသီးရှလကာရည်၊ ဗီတာမင်ဒီ၊ probiotics ၊ ဇင့်၊ မက်ဂနီဆီယမ်၊ စီလီနီယမ်၊ ဘီ၊ ကေ ၊ ချဉ်ဖတ်၊ အရွက်ပြုတ်ရည်၊ အရိုးပြုတ်ရည်၊ ဂလူတန်ရှောင်တော့ လုပက်စ်ရောဂါ သိသိသာသာ သက်သာလာတယ်။
နာကျင်ကိုက်ခဲတာတွေ လုံးဝမရှိတော့ဘဲ နေလို့ ထိုင်လို့အင်မတန်ကောင်းလာတယ်။ ဆရာမကြီးကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်လို့ရှိခိုးကန်တော့ချင်တယ်။ ဇန်နဝါရီမှာ ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ I-140 approved ဖြစ်တယ်။ ရှေ့ နေ့ က approved ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့မထင်ထားဘူးတဲ့။ နောက်နေ့ဒါရိုက်တာမကို အီးမေးလ်ပို့ တော့ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်း၊ နောက်နေ့withdraw လုပ်မလို့ တဲ့။ ဟေ ... ပျော်တာတွေ တရက်ပဲခံတယ်။ withdraw မလုပ်ပါနဲ့ လားလို့တောင်းပန်တော့ ဂရင်းကဒ်ရသွားလို့အလုပ်မခန့် ရင် အလုပ်ရှင်ကို တရားစွဲပြီး ၆ လစာတောင်းလို့ ရတယ်။ အလုပ်ရှင်က အလုပ်ဖြုတ်ထားတဲ့သူဆီကနေ တရားစွဲမှာကို ကြောက်တာပေါ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကာကွယ်ရမယ်။ ရှေ့ နေ့ ကို မေးကြည့်ပါလား ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတဲ့။ ရှေ့ နေ့ က ဒါရိုက်တာမက ပိုတောင်သိသေးတယ် withdraw မလုပ်ဖို့အလုပ်ရှင်ကိုတောင်းပန် သူတို့ တောင်းဆိုတာကို လုပ်ပေးတဲ့။ ဒါရိုက်တာမက ကိုယ့်အခြေအနေကို နားလည်တယ်။ စန်းစန်း ဇန်နဝါရီ ၂၀ က နောက်ဆုံးနေ့ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ် နှုတ်ထွက်တယ်လို့ရေးပေးရင် ကျန်တဲ့ နစ်နာကြေး ၂ ပတ်စာပေးတယ်။ သူဋ္ဌေးက ဘယ်သူ့ ကိုမှ ပေးတာမဟုတ်ဘူး ကိုယ့်မို့ လို့ပေးတာတဲ့ မောင်မင်းကြီးသား ကျေးဇူးကြီးလှပါပေတယ်။ ကိုယ်သဘောနဲ့ ကိုယ် နှုတ်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့စာရေးပြီး ဒါရိုက်တာမကို အီးမေးလ်ပို့ ။ ဒါရိုက်တာမက အိုကေတယ်ဆိုမှ ပရင့်ထုတ် လက်မှတ်ထိုးပြီး ရုံးကိုပို့ ။ ရုံးက ၂ ပတ်စာ pay check ပို့ ပေးတယ်။ အမှန်က ကိုယ် ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ကတည်းက အလုပ်ပြုတ်တာ။ အခု pay check ကြောင့် ဇန်နဝါရီလကုန်မှာ အလုပ်ပြုတ်တာလို့ပြောလို့ ရသွားတယ်။
Fall foliage hiking at Palisades State Park, New Jersey. November 2014.
pay check အချိန် ၁ လခွဲဆိုတာ H1B transfer လျှောက်တဲ့အချိန်မှာ အရမ်းအရေးပါတယ်။ pay check ၃ လလောက် ကွာနေရင် H1B transfer လျှောက်ဖို့ ခက်တယ်။ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြတော့ ဘာလို့ လတ်မှတ်ထိုးလိုက်ရတာလဲပေါ့။ ကိုယ်အဲ့ဒီလို လက်မှတ်ထိုးလိုက်လို့အလုပ်ရှင်က withdraw မလုပ်သေးတာ။ လတ်မှတ်သာမထိုးလို့ ကတော့ ချက်ချင်း withdraw လုပ်မှာ။ အလုပ်ရှင်က cancel withdraw revoke လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် လွယ်လွယ်လေး။ စပွန်ဆာမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ စာရွက်တရွက် USCIS ကို ပို့ လိုက်ရုံပဲ။ ဖေဖေါ်ဝါရီလကုန်မှာ လက်ဗွေသွားနှိပ်ရတယ်။ မတ်လဆန်းမှာ EAD Card production ဆိုတဲ့ alert မတ်ဆေ့အီးမေးလ်ရပြီး တပတ်အကြာမှာ စာတိုက်ကနေ အီးအေဒီကဒ် ပို့ လာတယ်။ ဂရင်းကဒ်လျှောက်နေတုန်း H1B ဗီဇာကုန်သွားခဲ့ရင် အီးကေဒီကဒ်နဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ ပေးတာ။ အီးအေဒီကဒ်က တစ်နှစ်သက်တမ်းရှိပြီး အကြိမ်ကြိမ် ထပ်တိုးလို့ ရတယ်။ သူများတွေအတွက်ကတော့ အီးအေဒီကဒ်ရတယ်ဆိုတာ ဂရင်းကဒ်ရသလိုမျိုးပဲ။ ဂရင်းကဒ်မရသေးခင် တရားဝင်ကဒ်တခု ထုတ်ပေးထားတဲ့သဘော။ ကိုယ့်မှာတော့ အီးအေဒီကဒ်ရလည်း မပျော်နိုင်ပါဘူး အလုပ်ရှင်က အချိန်မရွေး withdraw လုပ်နိုင်တာကိုး။ ရှေ့ နေ့ က အလုပ်ရရင်တောင် အီးကေဒီကဒ်ကို မသုံးနဲ့H1B transfer လုပ်ရမယ်။ အီးအေဒီကဒ်သုံးပြီးမှ အလုပ်ရှင်က withdraw လုပ်ရင် နင့်မှာ ဘာ status မှမရှိတော့ဘူး illegal ဖြစ်သွားမယ်။ H1B transfer ပေးတဲ့အလုပ်ရှာ transfer လုပ် tri state နယူးယောက်၊ နယူးဂျာဆီ၊ ကွန်နက်တီကပ်ပြည်နယ်တွေမှာ အလုပ်ရရင် ပိုကောင်းမယ်တဲ့။ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ အီးအေဒီကဒ်ရပြီး ကံကောင်းရင် တလနဲ့၃ လကြား ဂရင်းကဒ်ရနိုင်တယ်။ ဂရင်းကဒ်ရပြီးမှ အလုပ်ရှာပါလားတဲ့။
၃ လနဲ့ဂရင်းကဒ်မရရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ဒုတိယအဆင့် I-140 approved ဖြစ်ပြီးလို့ခြောက်လကြာရင် AC21 ဥပဒေအရ ရာထူးတူ၊ လစာတူရင် ကုမ္ဗဏီအသစ်က ဂရင်းကဒ်ကို ဆက်ယူလို့ ရတယ် ဆိုပေမဲ့ အစကနေ ပြန်လျှောက်ရတာပါပဲ။ Priority Date ကိုတော့ ဆက်ယူလို့ ရတယ်။ ကိုယ့်ကိုလျှောက်ပေးတာ EB2 ဆိုတော့ EB1 ထက် လစာများတယ်။ တရုတ်မယန်းဆို EB2 နဲ့ လျှောက်ပြီး EB1 က ပိုမြန်တယ်ထင်ရင် ရှေ့ နေ့ က EB1 နဲ့ပြောင်းလျှောက်ပေးတယ်တဲ့။ ဖေဖေါ်ဝါရီလကုန်မှာ ဝေါစထိနားကကုမ္ဗဏီက လူတွေ့ အင်တာဗျူးပြီး သဘောကျတယ်။ သူတို့ ပေးမဲ့လစာက အရင်လစာထက်နည်းတော့ အင်တာဗျူးတဲ့ တရုတ်မက ခွင့်တလ၊ အလုပ်တနေ့၇ နာရီ၊ ကျန်းမာရေးအာမခံကို အလုပ်ရှင်က ၉၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ အလုပ်သမားက ၁၀ နှုန်းဆိုတော့ ဒေါ်လာ ၂၀ ကျော်ပဲ ပေးရတယ်။ အလုပ်လုပ်တာ အရမ်းဆိုးဝါးလွန်းမှ အလုပ်ဖြုတ်တယ်၊ သူဆို ဒီမှာအလုပ်လုပ်တာ ၁၈ နှစ်၊ ဘော့စ်ဂျင်ဆိုရင်လည်း ၁၈ နှစ် ဒီမှာ အလုပ်လုပ်ရတာ အရမ်းကောင်းတယ် အော်ဖာပေးရင် လက်ခံမလားမေးတော့ လက်ခံမယ်ပေါ့။ နောက်တပတ် အင်တာဗျူးထပ်ခေါ်တယ် database အပိုင်း လုပ်ဖူးလားမေးတယ်။ ဆန်ဖရန်စစ္စကို SFMAT အတွက် ဆာဗာမှာတင်ထားတဲ့ Excel ဖိုင်ကို ဒီနေ့ ဒေတာအဖြစ်ကို database ထည့်၊ ဒီနေ့ ဒေတာနဲ့မနေ့ ဒေတာ ကွာခြားချက်ကို Excel ထဲထည့်တဲ့ C# windows application ရေးဖူးတဲ့အကြောင်း ပြောတာနဲ့ချက်ချင်းအော်ဖာပေးတော့တာပဲ။ ဂရင်းကဒ်တော့ စပွန်စာမပေးနိုင်ဘူး H1B transfer တော့ လုပ်ပေးမယ်တဲ့။ application နဲ့database အလုပ် ၂ ခုရှိတာ ဘယ်အလုပ်ကို လုပ်ချင်လဲတဲ့။ ၂ ခုစလုံးလုပ်နိုင်ပါတယ်ပြောတော့ database management specialist ရာထူးပေးတယ်။
ဌာနရဲ့ အကြီးဆုံးဘော့စ် ဂျင်ဘရောင်းကို မြင်လိုက်တာနဲ့စကားပြောကြည့်လိုက်တာနဲ့စိတ်သဘောထားကောင်းတဲ့လူလို့ခံစားမိတယ်။ မတ်လဆန်းမှာ အော်ဖာပေးတော့ ပြောထားတဲ့လစာထက် ပိုပေးတယ်။ အရင်လစာထက်နည်းတယ်ဆိုပေမဲ့ အခွင့်အရေးတွေပေါင်းလိုက်ရင် အရင်လစာနီးပါးလောက် ပြန်ရတယ်။ ရုံးက ဟိုဖက်ခြမ်းပြောင်းမှာမို့ဧပြီလဆန်းမှာမှ ရုံးတက်စေချင်တယ်တဲ့။ အတော်ပဲ ဒီကလည်း အဲဒီလောက်မှ ရုံးတက်ချင်တာ။ အော်ဖာလတ်မှတ်ထိုးပြီးတာနဲ့အလုပ်ရှာတဲ့ဆိုဒ်တွေမှာရှိတဲ့ စီဗွီကို invisible ၊ inactive လုပ်။ မြန်မာပြည်က ကုမ္ဗဏီတခုက ယူအက်စ်မှာ ကျောင်းပြီးတဲ့သူတွေကို recruit လုပ်နေတာ။ HR က ကိုယ့်ကိုအင်တာဗျူး ကယ်လီဖိုးနီယားမှာနေ့ တဲ့ သူဋ္ဌေးက အင်တာဗျူးတယ်။ အင်တာဗျူးပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုသဘောကျတယ် အော်ဖာကမ်းချင်တယ်။ သူဋ္ဌေးနဲ့ ကျောင်းနေဖက်၊ ကုမ္ဗဏီ အတူထူထောင်သူနဲ့အင်တာဗျူးစေချင်တယ်။ အမ်အိုင်တီမှာ သူဋ္ဌေးနဲ့ကျောင်းအတူတူတက်ခဲ့ပြီး ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်မှာ ကိုယ့်ကိုစာသင်ဖူးတဲ့ ဆရာမဖြစ်နေတယ်။ တီချယ်ကလည်း သဘောကျတော့ အော်ဖာကမ်းတယ်။ လစာက နည်းတဲ့အပြင် ကိုယ်က ဝေါစတိနားက အလုပ်ကို လက်ခံပြီးသားဖြစ်နေပြီလို့အော်ဖာကို ငြင်းလိုက်တယ်။ လစာပေးတာနည်းလို့ လား ထပ်ညှိပေးမယ်လို့ပြောသေးတယ်။ မြန်မာပြည်ကနေ ထွက်လာတာ ၁၀ နှစ်နီးပါး ရှိတော့မယ် မြန်မာပြည်ဈေးကွက်ကို မသိဘူး။ ခုလက်ခံလိုက်တဲ့ အလုပ်က NGO အလုပ် ကိုယ်အရမ်းလုပ်ချင်နေတဲ့အလုပ်လို့ပြောလိုက်ရတယ်။ မြန်မာပြည်က အလုပ်အော်ဖာက လစာပေးတာ နည်းတယ်။ စင်္ကာပူကနေပြန်လာတဲ့ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေဆို ဘယ်လောက်ရတာလို့ဝိုင်းကိုပြောပြတော့ ဗီယက်နမ်မှာဆို နိုင်ငံခြားကနေ ဘယ်လောက်ပဲဘွဲ့ ရခဲ့ ယူအက်စ်ဒေါ်လာ ၅၀၀ ကနေ ၈၀၀ ပဲ ရတာတဲ့။ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာ နောက်ဆုံးအပိုင်းမှ ဆက်ပါဦးမယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၇။
ဂျီစီ ခရီးကြမ်း - ၁၁
၂၀၁၅ မေလမှာ ကလိုင်းရင့်ပီအေရုံးက ကွန်းထရပ်စာချုပ် ထပ်မတိုးတော့ ရုံးချုပ်ကိုပြန်လာရတယ်။ ပီအေရုံး နောက်ဆုံးနေ့ မှာ မငိုဘူးလုို့စိတ်တင်းထားပေမဲ့ မျက်ရည်က အလိုလိုကျလာတယ်။ ကိုယ့်ကို ချစ်တဲ့သူတွေ၊ ကိုယ်က ချစ်တဲ့သူတွေရှိတဲ့ ကိုယ်ချစ်တဲ့ရုံးကို ခွဲခွာရတော့လေ။ ရုံးချုပ်ရောက်တော့ ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ် အက်လန်တာမြို့ ရုံးခွဲအတွက် ကူလုပ်ပေးရတယ်။ ကလိုင်းရင့် ကွန်နက်တီကပ်တက္ကသိုလ်က Oracle Unifier သုံးတော့ လေ့လာရတယ်။ Oracle Unifier နဲ့ရီပို့ တွေလုပ်၊ database အပိုင်းကျွှမ်းတော့ query ၊ stored procedure ရေးတဲ့အပိုင်းကို ကူလုပ်ပေး။ Data Integration အတွက် Web Services သုံးတော့ ကူရေးပေးရတယ်။ စီနီယာကဲလ်ဗင်ဂျီးက ကိုယ်ရေးနိုင်မှန်းသိတော့ ဂျူနီယာတွေ ရေးထားတာတွေကို ပေါင်းခိုင်းတယ်။ ဂျူနီယာတွေက အခုမှကျောင်းပြီးခါစ ကွန်ပျူတာနဲ့ ပြီးတာမဟုတ်တော့ ပရိုဂရမ်းမင်းမကျွှမ်းကျင်။ ရေးချင်သလို ရေးထားတာတွေကို standard နဲ့ ကိုက်ညီအောင် ပေါင်းပေးရတယ်။ တရုတ်ကလေး ဒေးဗစ်ဒူက ကိုယ့်ကို ကျေးဇူးတင်လို့ တဲ့ ဒိန်ချဉ်ဝယ်ကျွှေးတယ်။ အက်လန်တာရုံးက ဂျူနီယာကုလားမလေးက သေချာ testing မလုပ်ဘဲ သူရေးတာမှန်တယ် error မရှိဘူးဆိုပြီး ငြင်းနေလို့နင် testing ဘယ်လိုလုပ်လဲမေးတော့ အဲ့လိုတော့ testing မလုပ်ဘူးတဲ့။ အဲ့ဒါကို စီနီယာကယ်ဗင်ဂျီးကို cc အီးမေးလ်ထည့်ပြီး ငြင်းနေတာ။ စီနီယာကယ်ဗင်ဂျီးက စန်းစန်း သူရေးနိုင်ရဲ့ လားမေးတော့ သူရေးတာ ကြည့်ပြီးပြီ လော့ဂျစ်မှန်တယ် ပေါင်းရေးတာ မှားနေတယ်လို့ကာကွယ်ပြောလိုက်ရတယ်။
အလုပ်ထဲမှာ အငယ်တွေကို ကူညီပေးတာ၊ လုပ်နိုင်တာကို စီနီယာတွေ၊ ဂျူနီယာတွေ သိပေမဲ့ အက်လန်တာရုံး မန်နေဂျာက မသိဘူး။ သူဋ္ဌေးက ကိုယ့်ကိုခေါ်တွေ့ ပြီး ကိုယ့်လုပ်ဆောင်ရွက် မကောင်းဘူး။ သူလည်း ပရိုဂရမ်မာဘဝကလာတာ ဘယ်လိုလေ့လာသင့်ယူရမယ်၊ စီနီယာခဲတန်ဆီက သင်ယူရမယ်။ ပီအေရုံးက ကိုယ့်ကိုမရွေးဘဲ လုပ်သက်၂ နှစ်ပဲရှိတဲ့ ဂျူနီယာကို ရွေးသွားတယ်။ ကိုယ့်လုပ်ဆောင်ချက် မကောင်းလို့ဖြစ်မယ် ကောင်းလို့ ကတော့ ရွေးမှာပေါ့။ အခု ဂျူနီယာလစာပေးမယ်၊ မကြိုက်ရင် အလုပ်ထွက်နိုင်တယ်လို့ ပြောတော့ ခံပြင်းလိုက်တာ။ H1B နဲ့ အလုပ်ထွက်ဖို့ မလွယ်၊ ဂရင်းကဒ်ကလည်း တန်းလည်းဆိုတော့ ဒေါသကို မြိုသိပ်ပြီး စဉ်းစားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အခု ဂရင်းကဒ်က တန်းလန်းမို့ လို့အလုပ်ထွက်ဖို့ အဆင်မပြေဘူး။ အော်ဖာကို လက်ခံပါတယ် ကလိုင်းရင့်က ပရောဂျက်ရရင် အရင်လစာပေးမလားဆိုတော့ ပေးမယ်တဲ့။ ဒေါသထွက်လိုက်တာ ကိုယ်အလုပ်ကြိုးစားတာ ကိုယ်အသိဆုံး။ ဗီဇာကိစ္စ ပူစရာမလိုတဲ့ ဂရင်းကဒ်ရှိလို့ ကတော့ ချက်ချင်းအလုပ်ထွက်မှာ။ သူဋ္ဌေးကလည်းသိတယ် ကိုယ်အလုပ်ထွက်လို့မရဘူးဆိုတာ သက်သက်အနိုင်ကျင့်တာ။ ပြောလိုက်သေးတယ် သူ စီးပွားရေးလုပ်လာတာ အနှစ် ၂၀ ရှိပြီ။ ဘယ်သူ့ ကိုမှ မတရားမလုပ်ဘူးတဲ့။ အယ်မလေးတော် ငပြူးကပဲ ပြဲရတယ်ရှိသေး။ တရုတ်လေးဒေးဗစ်ဒူရဲ့ ရည်းစား တရုတ်မမက်ဂီက အိုင်အိုဝါတက္ကသိုလ်မှာ တက်ခဲ့တာဆိုတော့ အိုင်အိုဝါပြည်နယ်မှာ ကျောင်းတက်ခဲ့တဲ့ ကိုယ်နဲ့ လေပေးဖြောင့်တယ်။
တနေ့ ရထားပေါ်မှာဆုံတုန်း သူဋ္ဌေးအကြောင်း အတင်းတုတ်တော့ သူ့ ရည်းစားဒေးဗစ်ဒူ ကလိုင်းရင့်ပရောဂျက်ပြီးတော့ ကလိုင်းရင့်က အလုပ်တနေရာပဲရှိလို့တခြားတယောက်ကို ဆက်ခေါ်တယ် ဒေးဗစ်ဒူကို မခေါ်ဘူး။ အဲ့ဒါကို သူဋ္ဌေးက မင်း အလုပ်လုပ်တာမကောင်းလို့မခေါ်တာလို့ ပြောတယ်တဲ့။ မက်ဂီ ဘယ်လောက်ပဲ ကြိုးစားလုပ်လုပ် ဘယ်တော့မှ အကောင်းမပြောဘူး။ ရှေးတရုတ်အဘိုးကြီးတွေ စတိုင်နဲ့အုပ်ချုပ်တာ။ အရမ်းတော်တဲ့သူတွေက ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ် တက်တယ်၊ နည်နည်းတော်တဲ့သူက နယူးယောက်တက္ကသို်လ် တက်တယ်၊ ပိုက်ဆံရှိပြီး အရည်းအချင်းမရှိသူတွေက Fordham တက္ကသိုလ်တက်တယ်လို့မက်ဂီကိုပြောတယ်။ သူဋ္ဌေးက မက်ဂီ Fordham တက္ကသိုလ်မှာ တက်ခဲ့မှန်းသိလို့တမင်သက်သက်ပြောတာ အတော်ဆိုးတဲ့သူဋ္ဌေး။ စီနီယာခဲတန်က စန်းစန်း သူဋ္ဌေးက ဘယ်လိုနေလဲ သဘောကောင်းပါတယ် စကားတွေပြောတယ်။ အေး လစာတိုးပေးဖို့ ပြောကြည့် သဘောမကောင်းတော့ဘူး မခေါ်တော့ဘူးလို့ ပြောလို့ရယ်လိုက်ရတာ။ အဲဒီလို သူဋ္ဌေးရဲ့ကောင်းသတင်းက မွှေးတယ်။ ကွန်ပျူတာဘွဲ့ ရမဟုတ်တဲ့ ကျောင်းပြီးခါစ ကလေးတွေကို ဈေးသက်သက်သာသာနဲ့ ခေါ်ခိုင်း။ စီနီယာတွေက ဂျူနီယာတွေကို သင်ပြပြီး အလုပ်ပိုလုပ်ရ။ စနစ်တကျမရှိ ဒါရိုက်တာက ဒါလိုချင်တာပဲသိတယ် ဘယ်လို resource တွေ ပေးရမလဲမသိ။ အဲ့ဒါကြောင့် ဒီတရုတ်ကုမ္ဗဏီမှာ အမေရိကန်တွေ မမြဲဘူး။ ပရောဂျက်ပရိုပိုဆယ်ရာထူးအတွက် နယူးယောက်တိုင်း သတင်းစာကနေ ခေါ်ထားတဲ့ ဂရိကောင်လေးဆို ခြောက်လတောင် မခံဘူး အလုပ်ထွက်ရော။
တရုတ်မယန်းကို မေးကြည့်တော့ ပီအေရုံးက ပရောဂျက်က အသေးစားလေး ဘတ်ဂျက်ကနည်းတော့ ဂျူနီယာကို ခေါ်မှာပေါ့ လစာများတဲ့ ကိုယ့်ကိုခေါ်မလား။ အလုပ်ချက်ချင်း ထွက်ချင်ပေမဲ့ ဂရင်းကဒ်ကတန်းလန်း ခုနေထွက်ရင် ဂရင်းကဒ်ကို အစကနေပြန်လုပ်ရမှာ။ စီနီယာကယ်ဗင်ဂျီးက ကြသပတေးနေ့ညနေစာင်းမှာ ပရောဂျက်တခုပေးပြီး စန်းစန်း ဒီပရောဂျက်က secure မဖြစ်ဘူး secure ဖြစ်အောင်လုပ် တနင်္လာနေ့ပေးရမယ်တဲ့။ ဖတ်ကြည့်တော့ web service က secure မဖြစ်ဘူး secure ဖြစ်အောင် လုပ်လို့ ရတဲ့နည်းတွေ အများကြီး ။ ဘယ်နည်းသုံးလို့ လဲမပြော web service security ကို တခါမှမလုပ်ဖူးဘူး။ သောကြာနေ့စီနီယာကယ်ဗင်ဂျီးကို မေးကြည့်တော့ သူမသိလို့ကိုယ့်ကိုခိုင်းတာတဲ့။ စီနီယာခဲတန်ကို မေးကြည့်တော့ သူလည်းမသိဘူး။ စီနီယာတွေတောင် မသိတာ ကိုယ့်ကိုခိုင်းတယ်။ မကြီးက သူ့ သူငယ်ချင်းအစ်ကိုကြီးကို မေးပေးတာ့ သူက business ပိုင်းလုပ်တာများတယ်။ application လုပ်တဲ့ သူ့ သူငယ်ချင်းတွေ မေးကြည့်မယ်တဲ့။ စင်္ကာပူက ဘကြီးကို မေးကြည့်တော့ သူရေးဖူးတယ် နင်က ဘယ်လိုရေးချင်တာလဲ ဘယ်လိုရေးရမယ်မှန်းကို မသိတာ။ နယူးဇီလန်မှာနေတဲ့ စာတော်တဲ့ကျောင်းနေဖက်ကို မေးကြည့်တော့ သူကရေးဖူးတယ် အစ်မက ဘာလိုရေးချင်တာလဲ အဲဒါကို မသိတာ။ ကိုယ်နဲ့ မကြီးက စနေတနင်္ဂနွေပိတ်ရက် ဗာမွန်ပြည်နယ်ဖက် ဆောင်းဦးရာသီ ရွက်ကြွေချိန်အလှ fall foliage ကိုကြည့်ဖို့တိုးကားပေါ်မှာ။ ဖုန်းနဲ့ မေးမြန်းနေရတာ ခရီးထွက်တာတောင် အလုပ်က အဲဒီလို ဖိစီးလိုက်သေးတယ်။ ဗာမွန်ပြည်နယ် ချန်ပိန်ရေကန်နား ဘာလင်တန်မြို့ မှာနေတဲ့ မိုင်းဖန်က သူ့ ဆီဝင်လည်ဖို့ခေါ်ပေမဲ့ တိုးကားနဲ့ ဆိုတော့ ဝင်လည်လို့ မရဘူး။ ဘာလင်တန်မြို့ ထဲ ဖြတ်တော့ စိတ်ထဲကနေပဲ မိုင်းဖန်ကို နှုတ်ဆက်လိုက်ရတယ်။
Fall foliage hiking at Palisade State Park, New Jersey. November 2014.
တနင်္လာမှာတော့ မသိဘူးဆိုပြီး ပေးလိုက်ရတယ်။ စီနီယာခဲတန်နဲ့ ဆုံရင် သူတောင်မသိတာကို သူများကိုလုပ်ခိုင်းတယ်ဆိုပြီး ကယ်ဗင်ဂျီးအကြောင်း အတင်းတုတ်တယ်။ ကွန်နက်တီကပ်တက္ကသိုလ် ပရောဂျက်ပြီးတော့ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရုံးက ပီးရာ့ကောင်တီ ပရိုပိုဆယ်ပရောဂျက် ဝင်ကူရတယ်။ Open Text ၊ MVC4သုံးတော့ လေ့လာရတယ်။ ဒီရုံးမှာလုပ်ရတာ တကယ်ပင်ပန်းတယ် တအားစိတ်ဖိစီးတယ် အဲ ပညာလည်း အရမ်းတိုးတယ်။ သြဂုတ်လကုန်မှာ ဂရင်းကဒ်ပထမအဆင့်ဖြစ်တဲ့ လေဘာစင်တီဖီကိတ် အတည်ပြုတယ်။ ရှေ့ နေ့ က စန်းစန်း အရမ်းမြန်တယ် ကံကောင်းတယ်တဲ့။ ဒုတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ I-140 Immigration Petition နဲ့တတိယအဆင့်ဖြစ်တဲ့ I-485 Adjustment of Status ကို အောက်တိုဘာလမှာ တပြိုင်တည်း file လုပ်ဖို့စာရွှက်စာတမ်းတွေ အများကြီးဖြည့်ရတယ်။ ဂရင်းကဒ်အတွက် medical examination ကို USCIS က သတ်မှတ်ထားတဲ့ဆေးခန်းမှာ တီဗွီ၊ Syphills ၊ Gonorrhea လိင်ရောဂါတွေ၊ အသည်းရောင်အသားဝါရောဂါ၊ မူးယစ်ဆေးသုံးလား၊ စိတ်ကျန်းမာရေး၊ ခန္ဓာကိုယ်က ပုံမှန်ဆောင်ရွက်နိုင်လားတွေ စစ်တယ်။ MMR (measles, mumps-rubella) ဆုံဆို့ ၊ ကြက်ညှာ၊ မေးခိုင် စစ်ရတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ဆုံဆို့ ၊ ကြက်ညှာ၊ မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေး ထိုးဖူးပေမဲ့ စာရွက်စာတမ်းမရှိ။ ဆုံဆို့ က နည်းနေလို့ဆေးဆိုင်တွေမှာ သွားထိုးခိုင်းတာ prednisone သောက်နေတယ်ဆိုတော့ မထိုးပေးဘူး။ ဆေးဆိုင်က rheumatologist ဆရာဝန်မကို ဖုန်းဆက်တော့ အဲ့ဒီကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးလို့ မရဘူး။ အဲ့ဒါတွေက flu vaccine လို dead virus မဟုတ်ဘူး live virus တွေ။ သာမန်လူဆို ဘာမှမဖြစ်ပေမဲ့ လုပက်စ်ရောဂါအတွက် immune supressive thearphy ယူနေတဲ့သူမို့ထိုးလိုက်ရင် တကိုယ်လုံးပျံ့ ပြီး အသက်အန္တရာယ်တောင် စိုးရိမ်ရတယ် လုံးဝလုံးဝ မထိုးပါနဲ့ တဲ့။
ဆေးခန်းကို သွားပြောတော့ ထောက်ခံစာလိုတယ်တဲ့။ rheumatologist က ရက်ချိန်းရဖို့၂ လလောက်စောင့်ရတာဆိုတော့ Queens က မိသားစုဆရာဝန်ကိုပြောပြပြီး ထောက်ခံစာရေးခိုင်းရတယ်။ ဆေးခန်းက ဆေးစစ်ချက်ကို ချိတ်ပိတ်ပေးလိုက်တာကို ရှေ့ နေ့ ကိုပေး။ သူဋ္ဌေးက ခရီးသွားလို့ ၊ ဒါရိုက်တာမက ခရီးသွားလို့ နဲ့အောက်တုိုဘာမှာ တင်ဖို့ မှန်းထားတဲ့ I-140 နဲ့I-485 ကို နိုဝင်ဘာလကုန်ခါနီးမှ တင်ရတယ်။ ပီးရော့ ကောင်တီပရောဂျက် presentation ပြတော့ ကိုယ်က ခပ်မြန်မြန်လေးလုပ်တတ်လို့စိတ်မချလို့ ဆိုပြီး ကျောင်းပြီးခါစ ဂျူနီယာပရောဂျက်မန်နေဂျာလေး တရုတ်လေးတီနိုက ကိုယ့်ဘေးနားမှာ တချိန်လုံးရပ်စောင့်နေလို့စိတ်တိုလိုက်တာ။ ကိုယ်ဒီလောက်တော့ နားလည်ပါတယ် ကလိုင်းရင့်ကို ပြနေတာ အရေးကြီးမှန်းသိတယ်။ Business Analyst က စန်းစန်း နောက် page တခုကိုပြပါ၊ Submit button လေးကို နှိပ်လိုက်ပါဆိုမှ သူခိုင်းတဲ့အတိုင်း လုပ်တာ။ တရုတ်မလေးကျင်းနဲ့ဂျူနီယာပရောဂျက်မန်နေဂျာတီနိုအကြောင်း အတင်းတုတ်တော့ သူ့ ကိုလည်း အဲ့ဒီလိုတဲ့။ သူဋ္ဌေးက နှိပ်စက်လိုက်၊ မန်နေဂျာတွေက နှိပ်စက်လိုက်၊ စီနီယာတွေက နှိပ်စက်လိုက်၊ ဂျူနီယာတွေက နှိပ်စက်လိုက်နဲ့ ။ ကလိုင်းရင့်က ပရိုပိုဆယ်ပရောဂျက်ကို လက်ခံတော့ MVC framework နဲ့ရေးပေးရတယ်။ စီနီယာအဲလက်ဝမ်က သဘောကောင်းတယ် သင်ပြတယ် ကူညီတယ် စီနီယာပီပီ ကာကွယ်ပေးတယ်။ ပရိုပိုဆယ်ပရောဂျက်ပြီးလို့ကလိုင်းရင့်ဆီက အဖြေကိုစောင့်နေတုန်း ဘာပရောဂျက်မှမရှိတော့ Open Text ကို လေ့လာခိုင်းတယ်။
နိူဝင်ဘာ Thanksgiving ပိတ်ရက် နယူးဂျာဆီပြည်နယ် လောကချမ်းသာ မဟာစည်တရားရိပ်သာမှာ လေးရက်တရားစခန်း ဝင်ဖြစ်တယ်။ ၂၀၀၅ သင်္ကြန် မှော်ဘီဝါးနက်ချောင်း ဗောဓိရိပ်ငြိမ်တောရမှာ ပထမဆုံးတရားစခန်း ဝင်ဖူးတာဆိုတော့ တရားစခန်းမဝင်ဖြစ်တာ ၁၀ နှစ်ကျော်ပြီ။ တရားစခန်းမှာ တွေ့ ကြုံရတဲ့သူတွေကတော့ အမျိုးမျိူးပဲ။ စိတ်ထားသဘောထားကောင်း နှလုံးပြည့်ဝတဲ့သူတွေရှိသလို ကုသိုလ်တပဲငရဲတပိသာလို လူတွေလည်းရှိတယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်း နောက်မှပို့ စ်ရေးဦးမယ်။ ခရစ်စမတ်ကနေ နယူးရီးယားအထိ ၇ ရက်တရားစခန်းရှိပေမဲ့ ခွင့်သိပ်မရှိတော့လို့မဝင်ဖြစ်တော့ဘူး။ ဒီဇင်ဘာ ၁၃ ရက်နေ့နေ့ လည် ၁၁ နာရီ သူဋ္ဌေးက ရုံးခန်းထဲလာခဲ့ဆိုလို့သွားတော့ ဒါရိုက်တာမပါ တွေ့ တယ်။ အလုပ်ဖြုတ်လိုက်ပြီတဲ့ တနေ့ တော့ဖြစ်လာမယ်ဆိုတာ မျှော်လင့်ပြီးသားဆိုတော့ သိပ်ပြီးမအံ့သြဘူး။ ဘယ်နေ့ နောက်ဆုံးလည်းဆိုတော့ ဒီနေ့ နောက်ဆုံးတဲ့။ ပရောဂျက်ရမလားလို့စောင့်နေတာ မရနိုင်တော့ဘူး ပီအေရုံးက ပြန်လာပြီးကတည်းက အလုပ်ဖြုတ်မလို့ ဟာ ဂရင်းကဒ်လျှောက်နေမှန်းသိလို့ဂရင်းကဒ်ကလည်း ကြာလိုက်တာ ဘာမှမထူးဘူးလားတဲ့။ ဒါရိုက်တာမက သူမလုပ်ချင်ဆုံးအလုပ်ကတော့ အလုပ်ဖြုတ်တာပဲတဲ့။ ဘာပရောဂျက်တွေ လုပ်နေလည်း ပရောဂျက်ကပြီးပြီး Open Text လေ့လာနေတာ။ ဘာမှ hand over လုပ်စရာမရှိတော့ ပြီးတာနဲ့ပစ္စည်းသိမ်းပြီးပြန်ပေါ့ ရှေ့ နေ့ ကိုအကြောင်းကြား အလုပ်ရှာ။ ဒီအချိန်က holidays ရာသီ အလုပ်ရှာဖို့ မလွယ်ဘူး။ အကုန်လုံး ခရီးသွားနေကြတာ ဇန်နဝါရီ ၁ ရက်နေ့ မှ စကြလိမ့်မယ်။
ဒီရုံးမှာလုပ်တာ ဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ ၃ နှစ်နဲ့ တလ သူ့ ကို ၂ ပတ်စာပေးလိုက်။ H1B ကို ဘာလုပ်မှာလဲ cancel withdraw လုပ်မှာလား မလုပ်ဘူး withdraw လုပ်ရမှာ အလုပ်ရှုပ်လို့ ။ ဂရင်းကဒ်ကိုရော ဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ ဘယ်လိုမှမလုပ်ဘူး ဒီအတိုင်းသွားနေမှာ။ ဒီစာချုပ်ထဲမှာ ပါတာတွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီး လတ်မှတ်ထိုး။ ဒီနေ့ နောက်ဆုံးနေ့အလုပ်ဖြုတ်တယ်အစား ကွန်းထရပ်ပြီးသွားတယ်လို့ရွေးထားတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ရုံးမှာ ပစ္စည်းလည်း သိပ်မရှိတော့ ပလတ်စတစ်အိတ်တခုတည်း စုထည့်။ ခင်တဲ့သူတွေက ရုံးမှာမရှိကြတော့ ဘယ်သူ့ ကိုမှ မနှုတ်ဆက်ဘဲ ရုံးကထွက်ခဲ့တယ်။ ရှေ့ နေ့ ဆီသွားတော့ I-140 နဲ့I-485 ဂရင်းကဒ်ဒုတိယအဆင့်နဲ့တတိယအဆင့်ကို ရှေ့ အပတ်က တင်လိုက်ပြီ။ USCIS ရုံးက လက်ခံရရှိပြီလို့အကြောင်းကြားတာနဲ့ရပ်လိုက်ရမလား အမြန်လုပ်မလားလို့ မေးတယ်။ အမြန်လုပ်ချင်တယ် အမြန်ခ ၁၅၀၀ ထပ်ပေးရတယ်။ ရှေ့ နေရုံးမှာ ပါလာတဲ့ထမင်းဘူးထဲက ထမင်းစား ညနေ ဝိုင်းနဲ့စန္ဒရားဖျော်ဖြေပွဲကြည့်ဖို့ချိန်းထားတော့ နယူးယောက်ပြည်သူ့ စာကြည့်တိုက်မှာ စောင့်နေလိုက်တယ်။ မကြီးရောက်တဲ့အချိန် ဖုန်းဘထ္ထရီကုန်နေလို့ဖုန်းခေါ်လို့ မရ။ တော်သေးတယ် လေးလွှာမှာဆိုတာ မတ်ဆေ့ပို့ ထားလို့ ။ သူငယ်ချင်းတွေကို အသိပေး အားလုံးက စိတ်ပူကြတာပေါ့ ဒီဇင်ဘာလလယ် အလုပ်ဖြုတ်တော့ အလုပ်ရှာဖို့ အင်မတန်ခက်တဲ့အချိန်။ ထရန့် သမ္မတဖြစ်တော့ H1B တွေ ဂရင်းကဒ်လျှောက်တာတွေကို တင်းကြပ်မယ်လို့ပြောနေတဲ့အချိန်။ အလုပ်ပြုတ်ပြန်ပြီပေါ့ သုံးခါမြောက်။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာတော့ ကိုယ်အလုပ် အပြုတ်ဆုံးပဲ မယ်ပြုတ်လို့ တောင် နာမည်ပြောင်းရမယ်။ ဘယ်လိုဒုက္ခတွေ ဆက်ကြုံရသလဲဆိုတော့ နောက်အပိုင်းမှ ဆက်ပါဦးမယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၁၇။
ဂျီစီ ခရီးကြမ်း - ၁၀
H1B က ၃ နှစ်သက်တမ်းရှိပြီး နောက်ထပ်တကြိမ် ထပ်တိုးခွင့် ရှိပါတယ်။ နှစ်ကြိမ်ပြီးရင်တော့ စတိတ်ပြင်ပကို ပြန်ထွက်ပြီးမှ H1B လျှောက်ခွင့်ရှိတယ်။ H1B တွေက မိသားစုကို စတိတ်ကိုခေါ်လာ ကလေးတွေက စတိတ်မှာကျောင်းတက်။ H1 မှီခိုနဲ့ က ၂၁ နှစ်အထိပဲရတော့ ၂၁ နှစ်ပြည့်လို့မိဘတွေက ဂရင်းကဒ်မရသေးရင် ကလေးတွေက စတိတ်မှာ ဆက်နေချင်ရင် F1 ကျောင်းသားဗီဇာ ပြန်လျှောက်ရတယ်။ အင်တာနေရှင်နယ်ကျောင်းသားရဲ့ကျောင်းလခက ဈေးကြီးတော့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ပြန်မလား စတိတ်မှာဆက်နေမလား။ စတိတ်မှာ ကြီးပြင်းခဲ့တော့ ကလေးတွေက စတိတ်မှာပဲ ဆက်နေချင် ဗီဇာကအဆင်မပြေ ပြသနာတွေ မျိုးစုံပါပဲ။ ယိုးဒယားဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဆုတောင်းလို့ဆုတောင်းပြည့်ရင် ဆင်ရုပ်သွားလှုရတယ်ဆိုလို့တရုတ်တန်းမှာ ဈေးအပေါဆုံးဆင်ရုပ် သွားဝယ်ပြီး လှုတယ်။ သြော် ... ဘုရားလှုဖို့ ကျတော့ ဈေးအပေါဆုံးရှာဝယ်တယ် ကိုယ့်အတွက်ဆို ဈေးကြီးတာ ရှာဝယ်တယ်။ အလုပ်တဖက်၊ တလခွဲတခါ စာမေးပွဲတွေ ဖြေရတာ အရမ်းပင်ပန်းတယ်။ အလုပ်မှာပင်ပန်းလို့စာမကြည့်နိုင်၊ စာမကြည့်ဖြစ်တော့ စာမေးပွဲအတွက် စိတ်ပူ၊ စာမေးပွဲတွေ မဖြေနိုင်လို့စိတ်ဖိစီး လုံးချာလည် လိုက်နေတာပါပဲ။ NC Not Credit ၊ C ၊ B- ၊ B+ ၊ A ရတဲ့ဘာသာတွေလည်း ရှိတယ်။ အရင်တုန်းကတော့ စာမေးပွဲကျမှာကို သိပ်ကြောက်တာ။ စာမေးတွေ ဖြေရတာများလွန်းတော့ မကြောက်တော့ဘူး ဘာလာလာ လာထားပဲ။ ကျရင်နောက်တခေါက်ထပ်ဖြေ ကျောင်းအကြွေးထပ်တိုး credit မရလို့ဘွဲ့ ရဖို့ နောက်ကျရုံပေါ့။
Software Enginnering အတန်းတုန်းက တအုပ်စုထဲကျ ကျောင်းတော်ကရန်စရှိတဲ့ တက်စဖာမိခေးလ်နဲ့ပြန်ဆုံတယ်။ ဟိုင်းလို့ဝတ်ကြေတမ်းကြေ နှုတ်ဆက်ပေမဲ့ စိတ်ထဲအမြင်ကတ်နေတုန်းပဲ။ ဂျူနီယာမွန်ဂိုလီးယားမလေးနဲ့ ဆုံတော့ ကိုယ်တို့ ရုံးတွေကလည်း နီးတော့ တခါတလေ နေ့ လည်စာ အတူထွက်စားကြတယ်။ စီနီယာခဲတန်က ရုံးချုပ်ကိုပြန်သွားပြီး MTA ရုံးမှာ ပတ်ထရီရှာနဲ့ ကိုယ် နှစ်ယောက်တည်း ကျန်ခဲ့တယ်။ ပြီးခါနီး ပရောဂျက် ၄ ခုလောက်ကို တယောက်တည်းလုပ်ရတော့ အရမ်းပင်ပန်းပေမဲ့လည်း ပျော်တယ်။ ဂရမ်းစင်ထရယ်ဘူတာနားက MTA ပရောဂျက်ပြီးတော့ ရုံးချုပ်ကို ပြန်သွားရတယ်။ နယူးယောက်ပြည်နယ် အစိုးရရုံးတခုအတွက် ပရိုပုိုဆယ်ပရောဂျက်ရေးပြီးတော့ presentation ပြခါနီးတရက်အလို P6 database နဲ့ချိတ်ပေးရမယ်ဆိုတော့ ဘယ်ကနေ ဘယ်လိုချိတ်ရမှန်းမသိ။ စီနီယာခဲတန်က Port Authorithy မှာလုပ်နေတဲ့ တွန်မီကိုဖုန်းခေါ် ချိတ်ဆက်ခိုင်းတော့မှ အဆင်ပြေသွားတော့တယ်။ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုရုံးက ဆန်ဖရန်စစ္စကို SFMTA ပရောဂျက်ကို ကူလုပ်ပေးရတယ်။ ဆန်ဖရန်စစ္စကိုနဲ့နယူးယောက်က ၃ နာရီကွာတော့ ကိုယ့်နေ့ လည်ထမင်းစားချိန်က သူတို့ ဆီမှာ ရုံးတက်ချိန် အစည်းအဝေးတွေ ထိုင်ကြတဲ့အချိန် တခါတလေ နေ့ လည်ထမင်းစားဖို့နောက်ကျတယ်။ အစည်းအဝေးတွေမှာ သူတို့ လိုချင်တာတွေနားထောင် စီနီယာခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်။ ဒီနေ့ SFMTA ဆာဗာဆိုဒ်မှာ တင်ထားတဲ့ Excel ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုပ်ချပြီး database ထဲသွင်း။
ဒီနေ့ ဒေတာနဲ့မနေ့ ကဒေတာ မတူတဲ့ဒေတာတွေကို Excel ထဲတည့် C# Windows application ရေးပြီး SFMTA ဆာဗာမှာစမ်းရတာ။ ပရောဂျက်တိုင်း ပညာရတယ်။ Port Authority က ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်ပြီး အင်ဂျင်နီယာဋ္ဌာနက ပရောဂျက်ကိုလုပ်ရတော့ နယူးဂျာဆီပြည်နယ် Newark မှာ အလုပ်ဆင်းရတယ်။ အသွား ၁ နာရီခွဲ အပြန် ၁ နာရီခွဲ တခါတလေ ရထားပေါ်မှာ အိပ်ပျော်သွားတယ်။ အလုပ်နဲ့ နီးတဲ့နေရာကို ပြောင်းမလားလို့အိမ်ရှင်ဂျပန်မကမေးတော့ မပြောင်းဘူးလို့ ။ ပရောဂျက်က ၆ လ တစ်နှစ်ဆိုပြီးပြီ အိမ်ကောင်းကောင်းရဖို့ ဆိုတာ လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ Port Authority မှာ အလုပ်လုပ်ရတာ အင်မတန်ပျော်စရာကောင်းတယ်။ ခန့် မှန်းတွက်ချက်တဲ့ဋ္ဌာနက အင်ဂျင်နီယာတွေက သဘောကောင်းကြတယ်။ ၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာ ကိုယ်လက်တွေနာတော့ ရုံးအသစ်ကဝေးလို့ပင်ပန်းတာနေမှာပါ အနားယူလိုက်ရင် ပျောက်မှာပါ။ လက်ချောင်းအဆစ်တွေ ကြီးလာတော့ ဂေါက်လားမသိ၊ တလောက ဝက်သားနဲ့ မျှစ်ချဉ်တွေ စားလို့ လားမသိ။ ဆရာဝန်က သေသေချာချာ စမ်းသပ်စစ်ဆေးပြီး လုပက်စ်လို့ ထင်တယ် သွေးတွေစစ်ရမယ်တဲ့။ သွေးအဖြေထွက်လာတော့ လုပက်စ်ရောဂါလို့နာမည်ထပ်ပြီး rheumatologist ဆီလွှတ်တယ်။ ဆရာဝန်က mild lupus ဆိုပြီး ဆေးတွေတိုက်ပေမဲ့ တချိန်လုံးကိုယ်လက်တွေ နာနေတာပဲ။ အရင်တုန်းကလို ပိတ်ရက်ဆိုရင် လမ်းလျှောက်ထွက်၊ တောင်တက်ပေမဲ့ ခုတော့ ကုတင်ပေါ်မှာပက်လက်။ တဖြည်းဖြည်းပိန်လာ လမ်းလျှောက်ရင် ကွတတ၊ အထိုင်အထ၊ အတက်အဆင်း နာတယ်။
ရုံးက နယူးယောက်တဖက်ကမ်း Exchange Place ကိုပြောင်းတော့ အိမ်ကနေ ၁ နာရီ ၁၅ မိနစ်စီးရတယ်။ Pantry မှာ နေ့ လည်စာစာရင်း ဂျော်ဒန်ကြီးဂျမားနဲ့ခင်သွားတယ်။ ဂျမားဟာ အင်မတန်ဗဟုသုတနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူ သူနဲ့ အကြောင်းအရာအားလုံး ဆွေးနွေးလို့ ရတယ်။ ကွတတ ထော့နဲ့ နဲ့လမ်းလျှောက်နေတဲ့ ကိုယ့်ကို ငယ်ငယ်လေးနဲ့လေးဖက်နာဖြစ်ရလားလို့ပြောကြတယ်။ လုပက်စ်ဟာ မျိုးရိုးဗီဇ၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ နေထိုင်မှုပုံစံကြောင့် ဖြစ်ရတာ။ မျိုးရိုးထဲမှာ လေးဖက်နာဖြစ်တဲ့သူလို့ မကြားမိ၊ ကချင်၊ ကရင်ပြည်နယ်လို စစ်ဖြစ်တဲ့ဒေသမှာ ကြီးပြင်းခဲ့တာမဟုတ်၊ အစားအသောက်ဆိုရင် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွှတ်တာတွေစား၊ အားကစား ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု လိုက်စားတဲ့သူဆိုတော့ စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့် လုပက်စ်ဖြစ်တယ်လို့ ထင်တယ်။ စိတ်ဖိစီးတာကတော့ မပြောနဲ့ တော့ စတိတ်ရောက်ကတည်းက ဖိစီးလိုက်တဲ့စိတ်ဆိုတာ တချက်ကလေးမှ စိတ်အေးချမ်းသာ နေရတယ်ကို မရှိဘူး။ ၂၀၁၅ ဇူလှိုင် အဖေ၊ အမေ ဘွဲ့ ယူဖုို့လာလည်တော့ ဘာဆိုဘာမှ မစားနိုင်၊ လမ်းမလျှောက်နိုင်၊ ပိန်ညောင်နေတဲ့ ကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီး အဖေက မျက်ရည်ကျတယ်။ ဘော်စတွန်ဟာဘားခရူကို အပေါ်ဆုံးထပ်ကနေစီးလို့ မျက်နှာမှာ butterfly rush ဖြစ်ပြီး မည်းကျန်ခဲ့တာ ၂ နှစ်လောက် ကုယူရတယ်။ အရင်လို တောင်တက်ဖို့ ဝေးစွ လမ်း ၁၀ မိနစ်လောက် လျှာက်တာတောင် မောလို့ ။ ကီမိုသရဖီဆေးတွေကြောင့် အဆုတ်ကိုထိပြီး ညာဖက်ဘယ်ဖက် စောင်းအိပ်လို့ မရ။ လူက တဖြည်းဖြည်း ပိန်ညောင်လာပြီး ပိန် ၂၀ ကျသွားလို့ခန္ဓာကိုယ်က လေတိုက်ရင် လွင့်သွားမတတ် ပါးလှပ်လှပ်ပဲ ကျန်တော့တယ်။
နိုင်အာဂရာ ရေတံခွန် မေ ၂၀၁၃။
အားလုံးက ခွင့်ယူပြီး အိမ်မှာနားလို့ပြောကြပေမဲ့ အိမ်မှာနားရင် ပိုကိုက်တယ်။ ရုံးမှာဆိုရင် တလှုပ်လှုပ်နဲ့အချိန်ကုန်လို့ကုန်မှန်းမသိ နာလို့ နာမှန်းမသိ။ ခြေကျင်းဝတ်တွေ ယောင်လို့ဖိနပ်အမာတွေ မစီးနိုင်ဘူး။ ဟင်းမချက်နိုင်ဘူး မြန်မာဆိုင် ၂ ဆိုင်က ဝယ်စားရတယ်။ မကြီးက ဂျပန်အိမ်မှာ မဖြစ်ဘူး မေ့လဲနေရင်တောင် သိမှာမဟုတ်ဘူး မြန်မာအိမ်ပြောင်းဆိုလို့အခန်းရှာတော့ အသိအစ်မ၊ မွေးစားအမေတုို့နေတဲ့တိုက်က မြန်မာအိမ်မှာ အခန်းရတယ်။ သားအမိသားအဖ ၄ ယောက်ကတခန်း၊ ကိုယ်ကတခန်း။ အဆင်ပြေပေမဲ့ ရုံးကနေပြန်ရောက်ချိန် ည ၇ နာရီဆိုရင် အိမ်ရှင်သားအမိ ၃ ယောက်က တန်းစီရေချိုးခန်းဝင်ကြတဲ့အချိန်ဆိုတော့ အိမ်သာနည်းနည်း ဒုက္ခရောက်တယ်။ ဆရာဝန်အသစ် ပြောင်းပြတာ သက်သာတယ်။ H1B ရတာ ခြောက်လပြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ ဂရင်းကဒ်လျှောက်ပေးဖို့ရုံးကိုပြောတော့ လျှောက်ပေးမယ် ရှေ့ နေခ၊ လျှောက်ခ ကိုယ့်ဘာသာ ပေးရမယ်တဲ့။ H1B လျှောက်တဲ့တရုတ်ရှေ့ နေက ရှေ့ နေခ ခြောက်ထောင်တောင်းတယ်။ ရှေ့ နေမှာတောင်မှ H1B ဦးစားပေးလုပ်တဲ့ရှေ့ နေ၊ အဆိုင်လမ် ဦးစားပေးလုပ်တဲ့ရှေ့ နေ၊ မိသားစု ဦးစားပေးတဲ့ရှေ့ နေ အမျိုးမျိုးရှိသေးတယ်။ ဒုက္ခသည်တွေက ရောက်ပြီးတစ်နှစ်ကြာတာနဲ့ဂရင်းကဒ်ရတယ်။ ဒုက္ခသည်ဆိုတာ နာမည်သာဆိုးတာ ပိုက်ဆံတပြားမှ မကုန်ဘဲ ဂရင်းကဒ်ရတယ်။ အစိုးရက မိသားစုကို ထောက်ပံ့တယ်၊ ကျောင်းတက်ရင် အစိုးရကတောင် ပိုက်ဆံပြန်ပေးသေးတယ်။ အဆိုမ်လမ်က တစ်နှစ်အတွင်း EAD ကဒ်ရပြီး ဂရင်းကဒ်ရမရတာကတော့ case ပေါ်မူတည်တယ်။ ဂရင်းကဒ်ကို လက်ထပ်လို့ ၊ မိသားစုကခေါ်ရင် ၂ နှစ်အတွင်း ဂရင်းကဒ်ရတယ်။
ဂရင်းကဒ်တွေထဲမှာ အလုပ်ကနေလျှောက်တဲ့ ဂရင်းကဒ်က အခက်ဆုံးပဲ။ အဆင့် ၃ ဆင့်ရှိပြီး တရုတ်၊ အိန္ဒိယတွေက အနည်းဆုံး ၆ နှစ်၊ မြန်မာတွေကတော့ ၂ နှစ်ခွဲလောက်ကြာတယ်။ စတိတ်ရောက်တာ ၁၀ နှစ်ရှိပြီ အလုပ်အဆင်မပြေလို့ဂရင်းကဒ်မရသေးတာလည်း ရှိတယ်။ Stage 1 : PERM Labor Certification အဆင့်က ၆ လကနေ တစ်နှစ်လောက်ကြာတယ်။ ဒီအလုပ်အတွက် သင့်တော်တဲ့ စီတီဇင်၊ ဂရင်းကဒ်တွေ မရှိလို့ဂရင်းကဒ်လျှောက်ပေးရတယ်ဆိုတဲ့ သဘော။ ဘယ်ရာထူး၊ လစာဘယ်လောက်ဆိုတာကို HR ၊ ဒါရိုက်တာမက ဆုံးဖြတ်ပြီး job description ကို ရှေ့ နေကရေး၊ ဒါရိုက်တာမနဲ့ ကိုယ်က ထပ်ဖြည့်။ စိတ်တိုင်းကျပြီဆိုမှ အလုပ်သမားဋ္ဌာနကို တင်တယ်။ အဲဒါ 1. Prevailing Wage Request ပထမအဆင့်။ နောက် 2. Recruitment Period ဒုတိယအဆင့်လုပ်ဖို့ အလုပ်ရာထူးကို နယူးယောက်တိုင်းသတင်းစာမှာ ကြေငြာခ ၁၆၀၀ ပေးပြီး ကြေငြာရတယ်။ ဘူတာရုံတွေမှာကမ်းတဲ့ မနက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းမှာ ကမ်းတတ်တဲ့ သတင်းစာမှာ ကြေငြာခက ၂၀၀ ပေးရတယ်။ ရုံးက website မှာ အလုပ်ကြေငြာရတယ်။ ရုံးတွင်း အီးမေးလ်ပို့ ပြီး အလုပ်ရှိတယ် စိတ်ဝင်စားရင် အီးမေးလ်ပို့ ပေးပါလို့ကြေငြာတယ်။ ရုံးက အလုပ်ကြေငြာတဲ့အီးမေးလ်ရတော့ အလုပ်ရှာနေတဲ့ သူငယ်ချင်း ၂ ယောက် စီဗွီတွေ ပို့ ပေးလိုက်တာ နယူးယောက်မှာ နေတဲ့တယောက်ကိုတော့ လူတွေ့ အင်တာဗျူးတယ်။ နယ်မှာနေတဲ့တယောက်ကိုတော့ ဖုန်းနဲ့ ဗျူးတယ်။ ဒါရိုက်တာမက ဖုန်းဆက်ပြီး စီဗွီတွေမပို့ နဲ့ လို့ကြိမ်းမောင်းတော့ ကိုယ့်မှာ နားမလည်နိုင်ဘူး။
အလုပ်ရှိတယ် ကြေငြာပြီး စီဗွီပို့ ပေးတာကို မကြိုက်ရင် မဗျူးနဲ့ ပေါ့ အဲ့ဒါ စိတ်ဆိုးစရားလားဆိုပြီး စိတ်တိုနေတာ။ တရုတ်မယန်းကို ပြောပြတော့မှ ဟဲ့ အဲ့ဒါဂရင်းကဒ်အတွက် ကြေငြာနေတာ။ နင်က စီဗွီတွေပို့ ပေးတော့ သူတို့ မှာ အင်တာဗျူးရတယ်၊ documents တွေ လုပ်ရတယ်၊ ဘာလို့ ရီဂျက်လုပ်ရတယ်ဆိုတာ အလုပ်သမားဋ္ဌာနကို တင်ရတော့ အလုပ်ရှုပ်တာပေါ့။ အဲ့ဒါကြောင့် နင့်ကို စီဗွီတွေ မပို့ ပေးနဲ့ လို့ဆူတာ။ ဒီတော့မှ ဒါရိုက်တာမ ကိုယ့်ကိုဘာလို့စိတ်တိုမှန်းသိတော့တယ်။ ကိုယ်လား အဲဒီလို ဒူပါတယ် တုံးပါတယ် အပါတယ်ဆို။ အလုပ်သမားဋ္ဌာနက လစာပေးတာနည်းလို့ လား၊ သင့်တော့်တဲ့ စီတီဇင်၊ ဂရင်းကဒ်တွေ ရှိရဲ့ သားနဲ့မခေါ်တာလားလို့သံသယရှိလို့Audit ဝင်ရင် သူတို့ ရှေ့ မှာ အင်တာဗျူးပြရတယ်။ စီနီယာ ၂ ယောက် Audit ထိတယ်ကြားတယ်။ ကိုယ့်အတွက် လျှောက်ပေးတဲ့ job description ကို ကြည့်ပြီးတော့ တရုတ်မယန်းက လူတိုင်းလျှောက်နိုင်တဲ့အလုပ်ပဲ။ သူ့ အလုပ်ဆို Cognos ပါတော့ တော်ရုံလူမလျှောက်ဘူးတဲ့။ ကိုယ့်ရာထူးအတွက် လျှောက်တဲ့သူမရှိဘူးဆိုပြီး ဝမ်းသာနေတာ တရုတ်မယန်းက Audit ဝင်နိုင်တယ်လို့သတိပေးတော့ ပျော်တာတွေပျောက်ပြီး စိုးရိမ်မိတယ်။ တတိယအဆင့်က 3. File PERM Application (Priority Date) အလုပ်သမားဋ္ဌာနမှာ လေဘာ certificate လျှောက်ပြီး PD ယူရတယ်။ PD ကအရေးကြီးတယ် လူများတဲ့တရုတ်၊ အိန္ဒိယက PD ရဖို့၂ နှစ်လောက် ထပ်စောင့်ရတယ်။ ဘာတွေဆက်ဖြစ်မှာလဲ ဆိုတာတော့ နောက်အပိုင်းမှ ဆက်ပါဦးမယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၇။
ဂျီစီ ခရီးကြမ်း - ၉
နေစရိတ်၊ စားစရိတ်၊ ဖုန်းဘေလ်၊ ကားအာမခံ၊ ကျန်းမာရေးအားမခံ စရိတ်တွေက တလကို တထောင်ကျော်လောက်ကုန်တော့ အလုပ်ပြုတ်တာ တလကျော်တာနဲ့စိတ်ပူရပြီ။ အလုပ်ဘယ်တော့ရမလဲ၊ ဘယ်ပြည်နယ် ဘယ်မြို့ မှာ အလုပ်ရမလဲ၊ ဘယ်လိုရုန်းကန်ရဦးမလဲ။ အိမ်က ပိုက်ဆံအတွက် လုံးဝစိတ်မပူနဲ့ပို့ ပေးမယ်ဆိုပေမဲ့ ကျောင်းသားဗီဇာက ကုန်တော့မယ်၊ ကျောင်းလခက မကျေသေးဘူး၊ ဘွဲ့ ရဖို့ က ခရက်ဒစ်တွေ လုိုသေးတယ်၊ အလုပ်မရမှာကို စိတ်ပူရတာပါပဲ။ အလုပ်ပြုတ်တာ ဒုတိယအကြိမ်ဆိုတော့ ပထမအကြိမ် ကန်တက်ကီတုန်းကလိုတော့ စိတ်မပူတော့ဘူး။ နေစရိတ်သက်သာအောင် ဒီဇင်ဘာလမှာ ဆူနမ်တို့ အိမ်မှာ ကပ်နေဖို့ ပြောကြည့်တော့ ဆူနမ်က ဆူတော့တာပဲ။ အစ်မ၊ မိဘတွေကိုပဲ အားကိုးနေတယ်၊ ဒီအသက်အရွယ်အထိ မရပ်တည်နိုင်သေးဘူး၊ စိတ်ဆိုးရင်လည်း သူငယ်ချင်း ကောင်းဖို့ အတွက် ပြောရမယ်။ လာနေလို့ ရတယ် အမ်းထရူးကို မေးကြည့်ဦးမယ်၊ သူလည်း ပိုက်ဆံပေးနေတာဆိုတော့။ အဲဒီလို သူငယ်ချင်းအရင်းခေါက်ခေါက်ကပြောတော့ စိတ်ထဲထောင်းခနဲ ဒေါသထွက်တယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း သူပြောတာ မှန်နေတော့ နောက်နောင် ကိုယ့်ဘာသာ ရပ်တည်နိုင်အောင် ကြိုးစားမယ် သူများကို အားမကိုးတော့ဘူး။ ဆူနမ့်ကို စိတ်ဆိုးပေမဲ့ ညီအစ်မလိုခင်တဲ့သူငယ်ချင်းက ကိုယ့်ကိုကောင်းစေချင်လို့ ပြောတာဖြစ်သလို ကိုယ်ကလည်း စိတ်ထဲတေးထား မှတ်ထားတတ်သူမဟုတ်။ အစတုန်းကတော့ စိတ်ထဲတင်းကနဲဖြစ်ပေမဲ့ နောက်တော့ဘယ်လိုမှ မနေတော့ဘူး။
နယူးယောက်အလုပ်က အော်ဖာကို နိုဝင်ဘာလလယ်မှာရ ပြောင်းရွှေ့ ဖို့၂ ပတ်ပဲအချိန်ရတယ်။ ပေးသင့်တာတွေပေး၊ ပစ်သင့်တာတွေပစ်၊ နယူးယောက်ကို USPS နဲ့ပို့ သင့်တာတွေပို့ ။ အားခြင်းစီစဉ်ပြီး နယူးယောက်ကို ၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နေ့ ပြောင်း ၉ ရက်နေ့ရုံးတက်။ CPT အင်တန်းရှစ် ၂ နှစ်ခွဲက ၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာမှာကုန်ပြီ။ H1B လျှောက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်သေးတော့ CPT ကို တစ်နှစ်ထပ်တိုးလို့ ရလားလို့ကျောင်းကိုမေးကြည့်တော့ ရတယ် အဝေးသင် လေးဘာသာဆက်တက် ကျောင်းလခ ၆၀၀၀ သွင်းရင် တိုးပေးမယ်တဲ့။ အလုပ်ပြုတ်ထားလို့၆၀၀၀ မသွင်းနိုင်ဘူး ခွဲပေးလို့ ရလားမေးတော့ တခြားသူဆိုမလုပ်ပေးဘူး ကိုယ့်ကိုတော့ လုပ်ပေးမယ်တဲ့။ ဒီလိုနဲ့သူများတွေက ၃ နှစ်လောက်နဲ့မာစတာဘွဲ့ ရပေမဲ့ ကိုယ်ကတော့ လေးနှစ်တက်ပြီးမှ မာစတာဘွဲ့ ရတယ်။ နယူးယောက်က အလုပ်ရတာနဲ့ကျောင်းက CPT ကို ၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာအထိ တိုးပေးလိုက်တယ်။ မေရီလန်းမှာကြုံတွေ့ ခဲ့ရတဲ့ မိတ်ဆွေတွေအကြောင်းကို နောက်မှပို့ စ်ရေးဦးမယ်။ မြို့ အသစ်၊ အလုပ်အသစ်၊ အိမ်အသစ်၊ ပတ်ဝန်းကျင်အသစ်၊ နေရာဒေသအသစ်မှာ နေသားတကျဖြစ်ဖို့၂ လလောက် အချိန်ယူရတယ်။ အိမ်ရှင်တွေက သဘောကောင်းပေမဲ့ အိမ်ရှင့်သမီး ဆယ်ကျော်သက်မလေးက ညဥ့်နက်သန်းခေါင်အထိ ဧည့်ခန်းထဲမှာ ရုပ်ရှင်ကြည့်တယ်။ နယူးယောက်တိုက်ခန်းတွေက ကျဉ်းတော့ အသံအကုန်ကြားရတယ်။
အလုပ်ကပင်ပန်း အိပ်ရေးကမဝ ခေါင်းတွေ အရမ်းကိုက်တယ်။
တပတ်နေပြီးတာနဲ့ဒီအိမ်နဲ့ ရေရှည်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး အိမ်အသစ်ရှာတော့ နတ်ဆုနဲ့ မိုချီရှိတဲ့ ဂျပန်အိမ်ကိုတွေ့ တယ်။ အိမ်ရှင်ကို တလနို့ တစ်ပေးပြီး ၂ လအကြာမှာ ဂျပန်အိမ်ကို ပြောင်းတယ်။ ကိုယ်ရုံးသွားတဲ့ မနက် ၈ နာရီဆို အိမ်ရှင်တွေက အိပ်ယာက မနိုးသေးဘူး။ ကိုယ်အိပ်တဲ့အချိန် ည ၁၁ နာရီ အိမ်ရှင်တွေက အိမ်ပြန်မရောက်သေးဘူး။ စနေ၊ တနင်္ဂနွေပိတ်ရက်က အိမ်ရှင်တွေ ပိတ်ရက်မဟုတ်တော့ အိမ်ရှင်တွေနဲ့ ကိုယ် တပတ်နေလို့ တခါမှတောင် မတွေ့ ဖြစ်ဘူး။ အစ်မရဲ့ သူငယ်ချင်းအစ်မက ဂျပန်အိမ်ကဈေးကြီးတယ် ဈေးသက်သာတဲ့အိမ်တွေ ရှာပေးပေမဲ့ ဂျပန်အိမ်မှာ အဆင်ပြေနေတော့ မပြောင်းတော့ဘူး။ ဘယ်လောက်ပဲဆူညံနေပါစေ အိပ်ပျော်တတ်တဲ့သူဆိုရင် ကိစ္စမရှိပေမဲ့ အသံကြားရင် အိပ်မပျော်တော့ အိမ်လခဈေးကြီးတယ်ဆိုပေမဲ့ ဂျပန်အိမ်နဲ့ ပဲ အဆင်ပြေတယ်။ ကိုယ် အရင်တုန်းက ဘယ်လောက်ပဲ ဆူညံနေပါစေ အိပ်ပျော်တယ်။ စတိတ်ကိုရောက်တော့ အိပ်မပျော်တော့တာ စိတ်ဖိစီးမှုတွေ များလို့ နဲ့ တူပါရဲ့ ။ ရုံးက ၃၆ လမ်း အင်ပါရာစတိတ် အဆောက်အဦးနောက်လမ်းမှာ တရုတ်ကုမ္ဗဏီဆိုတော့ အလုပ်များတယ်။ ပထမဆုံးလုပ်ရတဲ့ ပရောဂျက်က လဂွါးရီးယားလေဆိပ် ပရောဂျက်ပရိုပိုဆယ် P6 Database ကနေ data တွေကို ဂျူးမကြီးရိုဆာဆီကတောင်း database ဒီဇိုင်းချ။ application ရေးတဲ့တရုတ်က main frame application ပဲရေးဖူးတော့ Sharepoint နဲ့ မရေးတတ်။
ဒေတာတွေကို ခဏခဏပြောင်းတော့ ရိုဆာ၊ တရုတ်ကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာ အင်မတန်စိတ်ပင်ပန်းတယ်။ တလအကြာမှာ ၄၂ လမ်း ဂရမ်းစင်ထရယ်ဘူတာနားက ကလိုင်းရင့် MTA က ပရောဂျက်ကို သွားကူရတယ်။ ကလိုင်းရင့်ဆိုဒ်မှာ အလုပ်လုပ်ရတာ ပိုပျော်တယ်။ ကိုယ့်ကျွှမ်းကျင်တဲ့ ပရုိုဂရမ်းမင်းတွေနဲ့ရေးရတဲ့အပြင် စီနီယာခဲတန်၊ ပရောဂျက်မန်နေဂျာ ပတ်ထရီရှာတို့ နဲ့အလုပ်လုပ်ရတာ အရမ်းအဆင်ပြေတယ်။ H1B လျှောက်ပေးဖို့ဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ ရုံးကိုမေးကြည့်တော့ ဒါရိုက်တာမက ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ခဲတန်နဲ့ ပတ်ထရီရှာတို့ ကို ကိုယ့်အလုပ်လုပ်တာ ဘယ်လိုနေလဲလို့မေးကြည့်တယ်။ နှစ်ယောက်စလုံးက အလုပ်ကြိုးစားတယ် ကလိုင်းရင့်နဲ့ လည်း အဆင်ပြေတယ် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မူလည်း ကောင်းတယ်လို့ထောက်ခံပေးတယ်။ H1B လျှောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေကို ရုံးကပေးပြီး ရှေ့ နေခ၊ appliciation fees တွေကို ကိုယ့်ဘာသာပေးရတယ်။ ဆူနမ့်ကုမ္ဗဏီကျတော့ ရှေ့ နေခ၊ လျှောက်ခတွေကို ရုံးကပေးတယ်။ ရုံးကလူတွေကို မေးကြည့်တော့ ရုံးကတော်တော်များများ တရုတ်ရှေ့ နေနဲ့လုပ်ကြတယ်။ ရှေ့ နေခ ၁၅၀၀၊ application fee ၁၅၀၀ ကို ရုံးက ချက်လက်မှတ်ရေးပေး၊ ရုံးကို ကိုယ်ကပြန်ပေး၊ Fedex ဖိုး ဘာကြေးညာကြေးနဲ့H1B အတွက် ၃၀၀၀ - ၃၅၀၀ လောက်ကုန်တယ်။ ပထမဆုံး H1B ဆိုရင် ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ မှာပဲ လက်ခံတဲ့အတွက် ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ အရောက် အစိုးရကလက်ခံတဲ့ ၈၅၀၀၀ ထဲပါအောင် ပို့ ရတယ်။
ဇှုလှိုင် ၄၊ ၂၀၁၃။
ဧပြီ ၁ ရက်နေ့အမှီပို့ ဖို့အချက်အလက်တွေ မှန်မမှန်၊ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေပါမပါ သေသေချာချာ အထပ်ထပ်စစ်ရတယ်။ အစိုးရကသတ်မှတ်ထားတဲ့ ၈၅၀၀၀ ထက် လျှောက်တဲ့သူအရေအတွက်က ၃ ဆများနေလို့lottery စနစ်နဲ့အရင်စစ်ချတယ်။ lottery အောင်မှ နောက်တဆင့် စဉ်းစားတယ်။ H1B လျှောက်လွှာကို ဧပြီ ၁ မှာ တင်ရပြီး အောက်တိုဘာကို အဖြေသိရပြီ။ အဖြေမသိခင် ကျောင်းသားဗီဇာကုန်သွားခဲ့ရင် ခွင့်ယူ၊ unpaid leave ယူပြီး H1B Approved ဖြစ်ပြီဆိုမှ အလုပ်ပြန်လုပ်လို့ ရတယ်။ ရုံးက H1B လျှောက်တဲ့ ၆ ယောက်ထဲမှာ ၃ ယောက်က ရီဂျက်ဆိုတဲ့သတင်း စီနီယာခဲတန်ဆီက ကြားတော့ နေမကောင်းချင်သလိုတောင်ဖြစ်တယ်။ အိန္ဒိယမလေးက approved ဖြစ်ပြီး ပီအိပ်ခ်ျဒီတက်နေတဲ့ တလောကမှ သမီးလေးမွေးထားတဲ့ တရုတ်ကလေးက ရီဂျက် ။ စန်းစန်း နင့်မှာ ဘာကဒ်ရှိလဲလို့ရှေ့ နေကမေးတော့ SSN (Social Security Number) ကဒ်၊ ဒရိုင်ဘာလိုင်စင်ကဒ်ရှိတယ်။ အီးအေဒီ EAD ကဒ်လိုမျိုးရှိလား ဘာကဒ်မှမရှိဘူး I20 စာရွက်ရဲ့နောက်ဆုံးစာရွက်မှာ ဘယ်ကုမ္ဗဏီ၊ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်လိုရာထူးနဲ့ ၊ ဘယ်နေ့ ဘယ်ရက်အထိ CPT အင်တန်းရှစ် အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ စာရွက်ပဲရှိတယ်။ အဲဒါကို USCIS ဗာမွန်ရုံးက အီးအေဒီကဒ်တင်ပါဆိုတော့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ အရာရှိက ဗီဇာအကြောင်း နားမလည်ဘူး ပြန်တင်ရမယ် ပြန်တင်ခ ၅၀၀ ပေးရမယ်။ ကျောင်းသားဗီဇာကလည်း ကုန်တော့မယ် H1B ကလည်း ရီဂျက်များတယ် ကြားတယ်။
ကျောင်းကို CPT အင်တန်းရှစ် ထပ်တိုးလို့ ရလားမေးကြည့်တော့ ထပ်မတိုးပေးနိုင်တော့ဘူး၊ တခြားကျောင်းကိုရှာ၊ တက္ကသိုလ်၊ NGO အလုပ်မျိုးကိုရှာ၊ သူတို့ က ကိုတာမလိုတော့ H1B ၊ ဂရင်းကဒ် လျှောက်ရင်မြန်တယ်။ အင်ဒီးယားနားပြည်နယ် ဖို့ ဝိန်းမြို့ မှာ ဗော်လန်တီယာလုပ်ဖူးတဲ့ အဖွဲ့ အစည်းကို မေးကြည့်တော့ အလုပ်မရှိဘူး။ ဆူနမ့်ကို မေးကြည့်တော့ ဒယ်လာဝဲယားပြည်နယ်မှာ ကျောင်းတကျောင်းရှိတယ်။ ကိုယ်တို့ လို ဗီဇာအခက်အခဲကြုံတဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ရိုက်စား အဲလေ ခဏကယ်တင်ပေးတဲ့ကျောင်း ဆိုပါတော့။ ပထမဆုံးနေ့ မှာ CPT ထုတ်ခိုင်းတဲ့ ဒီတော့ ငါးရက်အလုပ်လုပ် ပိတ်ရက်မှာ ကျောင်းသွားတက် H1B Approved ဖြစ်ခဲ့ရင် မတက်နဲ့ တော့။ H1B ရီဂျက်ဖြစ်ခဲ့ရင် ကျောင်းဆက်တက် နောက်နှစ် H1B ဆက်လျှောက် ရရင်ကျောင်းမတက်နဲ့ တော့။ ဘွဲ့ ရဖို့ ထက် ဗီဇာ status ကို ထိန်းတဲ့သဘော။ လိုအပ်တဲ့ အလုပ်အော်ဖာစာ၊ လခ ၃ လ၊ ဘဏ်စာရင်း ၃ လ၊ ဘွဲ့ လက်မှတ်၊ အမှတ်စာရင်း၊ grading ၊ transcripts တွေပို့ တော့ ကိုယ့်လျှောက်လွှာကို လက်မခံဘူး grading ၃ အောက် နည်းနေလို့ တဲ့။ ကျောင်းက မပြီးသေးဘူး ကျောင်းပြီးရင်တော့ grading ၃ ကျော်မှာပါ ဆူပါဗိုက်ဆာ၊ ပရော်ဖက်ဆာတွေဆီက ထောက်ခံချက်ယူပေးပါမယ်လို့ပြောတာတောင် လက်မခံဘူး။ အစ်မသူငယ်ချင်းက ယိုးဒယားဘုန်းကြီးကျောင်းက ဆုတောင်းပြည့်တယ်လို့ ပြောလို့သွားဆုတောင်းသေးတယ်။
ကိုယ်ကြိုးစားလို့ ရတာ အကုန်ကြိုးစားပြီးပြီ H1B ရမရကတော့ ကံပဲ။ မရရင် ၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာ CPT ကုန်တဲ့အထိ အလုပ်လုပ် ကျောင်းအကြွေးတွေဆပ်။ နေဖို့ ကံပါရင်တော့ ရလိမ့်မယ် ကိုယ်လုပ်နိုင်တာက ဆုတောင်းတာပဲ လုပ်နိုင်တော့တယ်။ ၂၀၁၃ စက်တင်ဘာ ၁၁ ကျောင်း replacement office က ဂျူလီက စက်တင်ဘာ ၉ ရက်နေ့ မှာ ကိုယ့် status ပြောင်းသွားတဲ့အကြောင်း၊ H1B ရပြီ အောက်တိုဘာ ၁ ရက်နေ့ မှာ effect ဖြစ်မဲ့အကြောင်း၊ ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းလုပ်တဲ့ အီးမေးလ်ရတော့မှ ရှေ့ နေ့ ကိုလှမ်းမေး ရှေ့ နေက အတည်ပြုပေးတော့မှ ပျော်လိုက်တာ။ နောက်ထပ် ၃ နှစ်နေလို့ ရပြီ အလုပ်မပြုတ်ရင်ပေါ့ H1B နဲ့ က အလုပ်ပြောင်းဖို့ မလွယ်ဘူး။ အလုပ်ပြောင်းချင်ရင် အလုပ်အသစ်က H1B Transfer လျှောက် ရတော့မှ အလုပ်သစ်ကို ပြောင်းကြတာများတယ်။ H1 Transfer လို့ခေါ်ကြပေမဲ့ H1 အသစ်တင်တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ပထမဆုံး H1B လျှောက်သလို ဧပြီ ၁ ရက်နေ့ မှ တင်ရတာမဟုတ်ဘူး။ ကြို က်တဲ့အချိန်မှာ ကြိုက်သလောက် H1B Transfer လျှောက်လွှာ တင်လို့ ရတယ်။ H1 Transfer ၂ ခုလျှောက်တယ်ဆိုပါတော့ ၂ ခုစလုံးရရင်တောင် ၁ ခုပဲ အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိတယ်။ H1 Transfer လုပ်ရင် အလုပ်တခုနဲ့ တခုကြား gap ဖြစ်နေရင် စာရွက်စာတမ်းတွေ ထပ်တောင်းခံရ ရီဂျက်ဖြစ်နိုင်တယ် safe မဖြစ်ဘူးဆိုပါတော့။ ဒီရုံးမှာပဲ ဂရင်းကဒ်ရတဲ့အထိနေပြီး ဂရင်းကဒ်ရတာနဲ့အလုပ်ထွက်မယ်လို့စိတ်ကူးထားပေမဲ့ ကြံစည်ထားတဲ့အတိုင်း ဖြစ်မလာတဲ့အခါ ခက်ခဲရှုပ်ထွေးလှတဲ့ employment based ဂရင်းကဒ်လျှောက်တဲ့အခါ ကြုံတွေ့ ရတာတွေကတော့ နောက်အပိုင်းမှ ဆက်ပါဦးမယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၇။
ဂျီစီ ခရီကြမ်း - ၈
အလုပ်ပြုတ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျောင်းကို အရင်ဆုံး အကြောင်းကြားတော့ ကျောင်းက ကျောင်းလခအကြွေး လစဉ်ဆပ်နေတာတွေကို ရပ်ပေးတယ်။ အလုပ်ရပြီဆိုတာနဲ့ကုန်ကျစရိတ်၊ လခတွေပေါ်မူတည်ပြီး ကျောင်းလခအကြွေး တလကိုဘယ်လောက် ဆပ်ရမယ်ဆိုတာ ကျောင်းကဆုံးဖြတ်ပါတယ်။ အလုပ်ဝင်ပြီး ၂ လဆိုတာနဲ့ကျောင်းအကြွေးတွေ စဆပ်ရပြီ။ အတိုးနူန်းက ၉ လား ၁၂ လား မမှတ်မိတော့ဘူး အတိုးနှုန်းများလို့ဆပ်နိုင်သမျှ များများဆပ်နိုင်အောင် ကြိုးစားရတယ်။ ဖယ်ဒရယ်ခွန်၊ စတိတ်ခွန် (ပြည်နယ်ပေါ်မူတည်ပါတယ် တန်နက်ဆီ၊ တက္ကဆပ်ပြည်နယ်တို့ က ပြည်နယ်ခွန် ပေးစရာမလို။ ပြည်နယ်ခွန် ပေးစရာမလိုတော့ လစာလည်း နည်းတယ်။ ကိုယ်နေတဲ့ကန်တက်ကီပြည်နယ်ကတော့ ပြည်နယ်ခွန် ပေးရတယ်) ၊ Social Security (ပင်စင်ခွန်) ပေးရပြီး မက်ဒီကဲလ်ခွန် (ကျန်းမာရေးခွန်) တော့ ပေးစရာမလို။ အခွန်တလ တထောင်ကျော် နှစ်ထောင်နီးပါး ဆောင်ရတယ်။ ဆူရှီလိပ်တဲ့ကောင်လေးတယောက်က သူကတော့ ဆူရှီလိပ်တာ ဘယ်လောက်ရတယ် ဘယ်လောက်ကုန်တယ် ဘယ်လောက်ကျန်တယ် အစ်မလစာ ဘယ်လောက်ရလဲမေးတော့ ရတဲ့လစာထက် အများကြီးလျှော့ပြော ကျောင်းအကြွေး တလကိုဘယ်လောက်ဆပ်ရတယ် လကုန်ပိုက်ဆံကုန် တပြားမှမစုမိဘူးလို့ပြောလိုက်ရဖူးတယ်။ သူ့ လစာက အစိုးရကို ကိုယ်အခွန်ဆောင်နေသလောက်ပဲဆိုတာ သိသွားရင် စိတ်အားငယ်မှာစိုးလို့ ။
စတိတ်ကျောင်းကို ရောက်တာနဲ့ပထမဆုံးသင်ရတာ အမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုသင်ခန်းစာ။ အမေရိကန်မှာ အသက်၊ အိမ်ထောင်ရှိလား၊ ကလေးရှိလား၊ ဘာလုပ်သလဲ၊ လစာဘယ်လောက်ရလဲမေးတာ အင်မတန်ရိုင်းပါတယ်တဲ့။ လစာအနည်းအများဆိုတာ ပညာ၊ အရည်အချင်း၊ ကံတရားပေါ် မူတည်ပါတယ်။ ဆူရှီလိပ်တဲ့သူရဲ့ လစာနဲ့အို်င်တီသမားလစာ အရမ်းကွာသလို အိုင်တီသမားရဲ့တလဝင်ငွေဟာ ကလေးအထူးကုဆရာဝန်တယောက်ရဲ့ တရက်ဝင်ငွေပဲ ရှိတယ်။ ကိုယ့်ထက်တော်တဲ့သူက ကိုယ့်လောက်အလုပ်ကံမကောင်း ကိုယ့်လောက်မတော်တဲ့သူက အလုပ်ကံကောင်းတာတွေ တွေ့ ရတော့ ကံတရားကို ယုံကြည်လာတယ်။ ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာ ခရစ်စမတ်ပိတ်ရက် ၁၀ ရက် မေရီလန်းကို လာလည်တုန်းက ရာဂျတ် အိုင်ဘီအမ်မှာ အလုပ်ရတယ်ဆိုပြီး LinkedIn ဆိုဒ်မှာ တွေ့ လိုက်တဲ့အကြောင်း ဆူနမ်တို့ ကို ပြောပြတော့ ရာမားက အမှတ်မှားတာနေမှာပါလို့ တောင် ပြောသေးတယ်။ မာစတာဘရိမ်းလို့ကိုယ်တို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ မိုင်းဖန် အိုင်ဘီအမ်အင်တာဗျူး ၃ ဆင့်မှာကျ၊ ကန်တက်ကီအလုပ်က ဆူပါဗိုက်ဆာဝီလီယမ်ဂရင်းက အိုင်ဘီအမ်အင်တာဗျူး ၂ ဆင့်မှာကျ။ မိုင်းဖန်ဆီကနေ အိုင်ဘီအမ်အင်တာဗျူး အရမ်းခက်တယ်လို့ကြားဖူးတယ်။
၂၀၁၃ ဖေဖေါ်ဝါရီ မေရီလန်းပြည်နယ်ကိုပြောင်းတော့ တန်နက်စီပြည်နယ်က အမ်းထရူးက ဆူနမ့်အိမ်မှာ ရောက်နှင့်နေပြီ။ ရာဂျတ်နဲ့ အမ်ထရူးက တန်နက်စီပြည်နယ် မန်းဖစ်မြို့ က ယူပီအက်စ်ရုံးမှာ အတူလုပ်ခဲ့တယ်။ သူ သိပ်မလုပ်နိုင်ဘူး သိပ်ခက်တာတွေ မခိုင်းပါနဲ့လွယ်တာတွေပဲ ခိုင်းပါလို့ဆူပါဗိုက်ဆာကို ပြောတဲ့ ရာဂျတ်။ ဆူနမ်၊ ရာမား၊ ဂင်္ဂါ၊ ရာဂျတ်တို့ က နီပေါကနေ ကျောင်းတက်ဖို့စတိတ်ကို အတူလာခဲ့ကြတာ။ ပိတ်ရက်တွေဆို ထရေလာမှာ ထမင်းစုချက်စားရင် ရာဂျတ်က အာလူးသုတ်ကို မဆလာတွေ အများကြီးထည့်လို့သူပဲစားနိုင် ကျန်တဲ့သူတွေ မစားနိုင်။ ကျောင်းသား ၅ ယောက် စုဝယ်ထားတဲ့ကားကို ရာဂျတ်ပဲ မောင်းလွန်းလို့သူငယ်ချင်းတွေ ငြိငြင်တာခံရတဲ့သူ။ ရာဂျတ်ဟာ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်၊ မျှတတဲ့စိတ်မရှိလို့သူ့ ကိုဘယ်သူမှ ရင်းရင်းနှီးနှီး မပေါင်းဘူး။ အိုင်ဘီအမ်မှာလုပ်နေတဲ့ သူ့ သူငယ်ချင်းအိန္ဒိယသားက အလုပ်သွင်းပေးတာဆိုပေမဲ့ အင်မတန်ခက်တဲ့ အင်တာဗျူး ၅ ဆင့်ကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်ခဲ့လဲမသိ။ သူ့ အကြောင်း အမ်းထရူးဆီကနေ သိထားတော့ ရာဂျတ် အိုင်ဘီအမ်မှာ အလုပ်ရတာကို အံ့သြကြတာပေါ့။ ကိုယ်တို့ လေးယောက် ခရီးတွေသွားကြတာကို မြောက်ဘက်အကျဆုံး ကနေဒါနဲ့ ကပ်လျက် မင်နီဆိုးတားပြည်နယ်မှာနေတဲ့ ရာဂျတ်က အားကျတယ်လို့ ပြောရင် ကိုယ်တို့ ကလည်း အိုင်ဘီအမ်မှာ အလုပ်ရစမ်းပါ ဝေးလံခေါင်သီတဲ့နေရာမှာ နေနိုင်ပါတယ်လို့ ။
အိုရှင်းစီးတီး၊ မေရီလန်းပြည်နယ်၊ ဂျူလှိုင် ၇၊ ၂၀၁၃။
စတိတ်မှာ အရင်ဆုံး ဖုန်းအင်တာဗျူး၊ ရေးဖြေစာမေးပွဲအောင်မှ လူတွေ့ အင်တာဗျူး ခေါ်ပါတယ်။ မေရီလန်းကို ရောက်တာနဲ့လူတွေ့ အင်တာဗျူး ၃ ၊ ၄ ခုလောက် ရတယ်။ အလယ်ပိုင်းထက်စာရင် အရှေ့ ၊ အနောက်ကမ်းခြေ၊ တောင်ဖက်ပိုင်းတွေမှာ အလုပ်ပိုပေါတော့ အလုပ်မြန်မြန် ရလွယ်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ကွန်ပျူတာသိပ္ဗံဋ္ဌာန ဒါရုိုက်တာအီလင်းက ကိုယ့်ကို မြို့ ကြီးတွေမှာ အလုပ်သွားရှာလို့အကြံပေးတာ။ ရာမားသွင်းပေးလို့အမ်းထရူးက ရာမားလုပ်နေတဲ့ ကုမ္ဗဏီမှာ အလုပ်ရတယ်။ စတိတ်မှာ networking အဆက်အသွယ်က အရမ်းအရေးပါတယ်။ သူငယ်ချင်း၊ စီနီယာတွေက သွင်းပေးရင်၊ ဆူပါဗိုက်ဆာ၊ ပရော်ဖက်ဆာတွေက ထောက်ခံချက်ရေးပေးရင် မြန်မြန်အလုပ်ရတယ်။ အလုပ်ပြုတ်တာ ၃ လခွဲရှိပြီဆိုတော့ ကျောင်းမှာ ပရောဂျက်စီမံခန့် ခွဲရေး ၁ လသင်တန်း သွားတက်ရတယ်။ လေယာဉ်ခမတတ်နိုင်လို့ဘတ်စ်ကား နေ့ လည် ၂ နာရီ မေရီလန်းပြည်နယ်ကထွက် ပန်ဆယ်ဗေးနီးယားပြည်နယ် ပစ်စဘာ့ဂ်မြို့မှာကားပြောင်း အိုဟိုင်းရိုးပြည်နယ်ကိုဖြတ် အီလီနွိုက်ပြည်နယ် ချီကာဂိုမြို့ မှာ ကားပြောင်း အိုင်အိုဝါပြည်နယ် ဘာလင်တန်မြို့ မှာ ကားပြောင်း နောက်နေ့ ညနေစောင်း ၄ နာရီလောက်မှာ အိုင်အိုဝါပြည်နယ် ဖဲလ်ဖီးမြို့ ကိုရောက်တယ်။ ပစ်စဘာ့ဂ်မြို့ လေးက ကလောမြို့ လေးလို အင်မတန်သာယာတယ်။ ဘတ်စ်ကားဂိတ်ကနေ ကျောင်းကို နာရီဝက်လောက် လမ်းလျှောက်ရတယ်။ ကျောင်းသားရေးရာဋ္ဌာနကို လာကြိုဖို့အကူအညီတောင်းလို့ ရပေမဲ့ လမ်းလျှောက်ချင်လို့ ။ ဒီတခေါက် ကျောင်းပြန်ရတာ ကိုယ့်မြို့ ကိုယ့်ဇာတိကို ရောက်သလို ခံစားရတယ်။
ကျောင်းသားရေးရာဋ္ဌာနကိုသွား စာရင်းသွင်း အခန်းသော့၊ ထမင်းစားလက်မှတ်တောင်း။ ပရောဂျက်စီမံခန့် ခွဲမှုသင်တန်းမှာ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ကလာတဲ့ တရုတ်၊ ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်ကလာတဲ့ မွန်ဂိုလီးယား၊ မေရီလန်းကလာတဲ့ ကိုယ် သုံးယောက်တည်း။ အားလုံးက ၃ လအတွင်း အလုပ်မရလို့ကျောင်းသားဗီဇာ စတေးတပ်ကို ထိန်းတဲ့အနေနဲ့ကျောင်းကိုပြန်လာရတာ။ သူတို့၂ ယောက်မှာ ကားပါလာတယ်။ မွန်ဂိုလီးယားကျောင်းသားက ကားကို shipping နဲ့ ပို့ ၊ တရုတ်ကျောင်းသားက ကားမောင်းလာတာ။ ကန်တက်ကီပြည်နယ်ကနေ မေရီလန်းပြည်နယ်အထိ မိုင် ၆၀၀ မောင်းတဲ့အကြောင်း ပြောပြတော့ နင့်မှာ ချိန်းပါလား၊ ကားတာယာမှာ ရေခဲခွဲတဲ့ဟာတွေပါလား မပါဘူး ကားအကြောင်း နားလည်လား နားမလည်ဘူး။ အဲဒါတွေမပါဘဲ မိန်းကလေးတယောက်တည်းမောင်းတာ တော်တော်မိုက်မဲတာပဲလို့ကောင်းချီးပေးကြတယ်။ သူတို့၂ ယောက်က အာဂျီရိုဆောင်မှာ မနက်နဲ့ နေ့ လည်စာပဲစားတယ် ညနေစာကို အပြင်မှာစားတယ်။ တနှစ်လုံး အာဂျီရိုဆောင်မှာ ဖြစ်ညှစ်စားခဲ့ပြီးပြီ တော်ပါတော့ နောက်ထပ်မစားနိုင်တော့ဘူးတဲ့။ အာဂျီရိုဆောင်က အော်ဂင်းနစ်အသီးအနှံတွေက အင်မတန်ကောင်းတယ်။ ဒါကြောင့် မြို့ ထဲကအငြိမ်းစားတွေ ကျောင်းမှာလာစားကြတာ။ ကိုယ်ရဲ့ မက်ဘုတ်ကွန်ပျူတာထဲကို ကျောင်းကအင်တာနက်ကေဘယ်သွင်းလို့ မရလို့ဆူနမ့်ကုို လှမ်းမေးတော့ အဲ့ဒီအကြောင်း ခုပဲပြောနေကြတာတဲ့။ ဝေါမတ်ဆိုင်မှာ router သွားဝယ်ပြီး အင်တာနက်ကေဘယ်ကို router ထဲထည့်တော့မှ အဆင်ပြေတယ်။ ကျောင်းရောက်ပြီး တပတ်အကြာ အလုပ်အော်ဖာရလို့မေရီလန်းကို ပြန်ခဲ့တယ်။ အဲဒီ router ကို ဝေါမတ်ဆိုင်ပြန်ပို့တပတ်အလကားသုံးလိုက်ရတယ်။
အပြန်ဘတ်စ်ကားမှာ အင်ဒီယားနားပြည်နယ် အင်ဒီယားနားပိုလစ်မြို့ က တက်လာတဲ့ မြန်မာမလေးနဲ့မိတ်ဆွေဖွဲ့သူက နယူးယောက်သွားမှာတဲ့။ အဲဒီလိုနဲ့ချီကာဂိုမြို့ လည်ခေါင်ကို ထရန်စစ်အနေနဲ့ဘတ်စ်ကားနဲ့လေးခေါက်ဖြတ်ဖူးပေမဲ့ ချီကာဂိုမြို့ ထဲ တခါမှမလည်ဖူးခဲ့ဘူး။ အလုပ်က ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ ထဲက ကယ်ပီတယ်ဘေးနားမှာ။ အင်တာဗျုးတဲ့သူက hazel မျက်လုံးအရောင်လှလှနဲ့လူမည်းစပ်တဲ့သူ၊ အလုပ်က အလုပ်သမားဋ္ဌာနကို လုပ်ပေးရမှာဆိုတော့ စီတီဇင်လိုချင်တာ၊ တစ်နှစ်ပြည့်ရင် H1B လျှောက်ပေးမယ်တဲ့။ တရုတ်မ ကလဲယားနဲ့ ကိုယ်က တခန်းတည်း၊ အမေရိကန် ၂ ယောက်၊ အိန္ဒိယတယောက်၊ ပရောဂျက်မန်နေဂျာ၊ business analyst ၊ office staff ၊ HR ဒီစီရုံးမှာ ၁၀ ယောက်လောက်ပဲရှိတယ်။ ဆူနမ်တို့ အိမ်ကနေ ဘူတာရုံကို ငါးမိနစ်မောင်း၊ ကားကိုဘူတာရုံမှာထား၊ ရထား ၁ နာရီ ၂၀ မိနစ်စီး။ အလုပ်ဝင်ပြီး တလမပြည့်ခင် အိမ်ခန်းရှာတယ်။ Rockville က မြန်မာအိမ်၊ အိန္ဒိအိမ် သွားကြည့်တယ်။ မြန်မာအိမ်ရှင်က သဘောကောင်းပေမဲ့ ရေချိုးခန်းကို ယောက်ျားလေး ၂ ယောက်နဲ့ရှယ်သုံးရမယ်။ Silver Springs က townhouse အိမ်ရှင်က အမည်းမ၊ ရေချိုးခန်းအိမ်သာ တယောက်တည်းသုံးရတယ်၊ ဈေးနည်းနည်းကြီးပေမဲ့ အဲဒီအိမ်ပဲ ရွေးဖြစ်တယ်။ အိမ်ကနေ ဘူတာရုံကို ငါးမိနစ်မောင်း၊ ဘူတာရုံမှာ ကားထားခဲ့၊ အနီရောင်လိုင်းအစ Glemont ဘူတာကနေ ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့ ထဲကို နာရီဝက်လောက်စီး။ ဆူနမ်တို့ က အနီရောင်အဆုံး Shady Grove ဘူတာနားမှာနေတာ။ ရထားအစအဆုံးဆိုရင် ၁ နာရီခွဲလောက်ကြာပေမဲ့ အိမ်ကနေ ဆူနမ့်အိမ်ကို မိနစ် ၂၀ လောက်ပဲ မောင်းရတယ်။
ဂရိတ်စမုတ်ကီတောင်၊ တန်နက်ဆီပြည်နယ်၊ စက်တင်ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၃။
ဆူနမ်တို့ နဲ့နိုင်အာဂရာရေတံခွန်၊ နယူးယောက်၊ တန်နက်စီပြည်နယ်က ဂရိတ်စမုတ်ကီးတောင်၊ အိုရှင်းစီးတီး၊ ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ် ခရီးတွေသွားဖြစ်တယ်။ အလုပ်သမားဋ္ဌာနက ငါးနှစ်ကွန်းထရပ်ကို ၃ နှစ်နဲ့ ရပ်ပြီး တခြားကုမ္ဗဏီကို ပေးချင်နေတာဆိုတော့ အလုပ်သိပ်မရှိဘူး။ ကုမ္ဗဏီကလည်း ကွန်းထရပ်မရပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။ သောကြာနေ့ ဆို တရုတ်မ ကလဲယားကွမ်း၊ စင်္ကာပူသူ နီကိုးတို့ နဲ့နေ့ လည်စာစား။ ပိတ်ရက်ဆို နေရှင်နယ်မောလ်က ပြတိုက်တွေသွား။ နေရှင်နယ်မောလ်မှာ ကိုယ်မရောက်ဖူးတဲ့ ပြတိုက် ၂ ခုပဲ ကျန်တော့တယ်။ ကလဲယားကွမ်းနဲ့မေရီလန်း၊ ဗာဂျီးနီးယား၊ အနောက်ဗာဂျီးနီးယား ပြည်နယ် ၃ ခုဆုံတဲ့ ဟာပါးဖယ်ရီမှာ တောင်သွားတက်ကြတယ်။ ၂၀၁၃ အောက်တိုဘာ ၁ ကနေ ၁၆ အထိ အစိုးရပိတ်လိုက်တော့ ရုံးတော်တော်များများ ပိတ်ကြတဲ့အထဲ ကိုယ်တို့ ရုံးလည်းပါတယ်။ ရာမားနဲ့အမ်းထရူးတို့ ရုံး NIH (National Institute of Health) ကတော့ အောက်တိုဘာ ၁၇ မှာ ပြန်ဖွင့်ပေမဲ့ ကိုယ်တို့ ရုံးကတော့ ဖွင့်မလာခဲ့ဘူး။ ကွန်းထရပ်ကို တခြားရုံးက ရသွားပြီမို့အလုပ်ပြုတ်ပြန်ပြီပေါ့ နှစ်ခါ။ ကလဲယား၊ စီနီယာတွေကို ကွန်းထရပ်ရသွားတဲ့ရုံးက ပြန်ခေါ်တယ်။ ကလဲယား၊ ဗီယက်နမ်လေး သက်ငုယင်က ထောက်ခံပေးပေမဲ့ စီတီဇင်မဟုတ်၊ ပရောဂျက်အစကတည်းက ပါခဲ့တဲ့သူမဟုတ်လို့ကိုယ့်ကိုမခေါ်ဘူး။ ကိုယ့် resume ကို monster ဆိုဒ်မှာတွေ့ လို့နယူးယောက်အလုပ်ကို စိတ်ဝင်စားလားတဲ့။
ဖုန်းအင်တာဗျူးအောင်ပြီး နယူးယောက်မှာ ရေးဖြေ၊ လူတွေ့ စာမေးပွဲ လာဖြေဖို့ ခေါ်တယ်။ အိမ်ရှင့်တူမ ဇာရာလည်း နယူးယောက်ကို ရောက်ဖူးချင်တော့ ဘတ်စ်ကားနဲ့နယူးယောက်ကို မနက်သွားညပြန် သွားကြတယ်။ Port Authority Bus Terminal ကနေ မြို့ ထဲလမ်းလျှောက် Bryant Park ဝင်လည် နေ့ လည် ၂ နာရီထိုးတော့ ၃၆ လမ်းရုံးကိုသွား ရေးဖြေလူတွေ့ အင်တာဗျူးဖြေ။ ဂရမ်းစင်ထရမ်နားလျှောက်လည် ညနေ ၅ နာရီထိုးခါနီး ဘတ်စ်ကားဂိတ်ကိုပြေး ညဥ့်နက်မှ ဝါရှင်တန်ဒီစီရောက်တယ်။ ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ် တက္ကသိုလ်တခုက အော်ဖာကမ်းချင်တယ်။ အကြီးအကဲတယောက် ပြန်ရောက်ပြီး ဆုံးဖြတ်တာကို စောင့်နေတာတဲ့။ နယူးယောက်အလုပ်က အော်ဖာကမ်းလားတော့ နယူးယောက်အလုပ်ကို ယူရမလား၊ ကော်လိုရာဒိုအလုပ်ကို စောင့်ရမလား။ ဆူနမ်တို့ ကတော့ နင် တောင်တက်တာ ဝါသနာပါတော့ ကော်လိုရာဒိုပြည်နယ်မှာဆို တက်စရာတောင်တွေမှ အများကြီး။ ဒါပေမဲ့ နင် တယောက်တည်း ဖြစ်နေမှာနော် အာရှသားနည်းလိမ့်မယ် နယူးယောက်ကတော့ ပိုကောင်းမယ်ထင်တယ်။ အိမ်ရှင်ရှယ်ရွန်က နယူးယောက်မှာ ၁၈ နှစ်နေခဲ့ဖူးတော့ နယူးယောက်ကိုရွေးဖို့အားပေးတယ်။ နယူးယောက်က the city that never sleep ၊ if you can make in NYC, you can make it anywhere လို့ ပြောလာတော့ နယူးယောက်က အော်ဖာကို လက်ခံလိုက်တယ်။ အိမ်ရှင်ကို ပီဇာဝယ်ကျွှေးတော့ ဝိုင်တိုက်ပြီး ဂုဏ်ပြုတယ်။ ကန်တက်ကီမှာတုန်းကလို craglist မှာရှာ အီးမေးလ်နဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်၊ သွားမကြည့်ဘဲ တခါတည်းပြောင်းဖို့ တော့ နယူးယောက်မှာ မလုပ်ရဲဘူး။
နယူးယောက်မှာ အသိမိတ်ဆွေတွေ ဘယ်သူရှိလဲလို့ရှာဖွေတော့ ဖို့ ဝိန်းကအစ်မရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ အမျိုး အစ်မမိသားစု နယူးယောက်မှာရှိတယ်။ သူတို့ ကို အကူအညီတောင်းပြီး အခန်းရှာခိုင်းတော့ သူတို့ တိုက်ရှေ့ မှာ အခန်းရတယ်။ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်း၊ အင်္ကျီတွေ ပေးသင့်တာပေး၊ ပစ်သင့်တာပစ်။ ကားကိုသွားရောင်းတော့ dealer တွေက ဒီလောက်အိုဟောင်းတဲ့ကားကို မဝယ်ဘူး CarMax မှာ သွားရောင်းပါတဲ့။ CarMax က ၃၀၀ ပေးတယ် ၄၅၀၀ နဲ့ ဝယ် ပြင်ဆင်ခနဲ့၆၀၀၀ လောက်ကုန်တဲ့ကားကို ၃၀၀ ပဲပေးမယ်ဆိုတော့ ဝမ်းနည်းလိုက်တာ။ ကားကလည်း အပြင်ကသာလှတာ ၁၉၉၆ မိုင်တသိန်းသုံးသောင်း အင်ဂျင်ချက်ဆိုင်းပေါ် အင်ဂျင်ကနေ ဆီတွေယိုကျ ၂ နာရီလောက်မောင်းပြီးရင် အင်ဂျင်ပူလို့လီဗာဖိနင်းရင်တောင် မိုင်မတက် နောက်ဖက်ဘယ်ဖက်တံခါးဖွင့်လို့ မရ နောက်ညာဖက်မှန်ဖွင့်လို့ မရ နောက်ဖုံးဖွင့်လို့ မရတဲ့ကားကို ဘယ်သူက တထောင်ပေးချင်ပါ့မလဲ။ အဲဒီလိုမှ မရောင်းရင် ဘယ်ကိုသွားပစ်ရမလဲ ၃၀၀နဲ့ဝယ်တာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရတယ်။ ဆူနမ်တို့ က ဖို့ ဝိန်းကအစ်မကို ပြန်ရောင်းခုိုင်းတဲ့။ ကိုယ်တို့ ကားတွေအကြောင်း ပြောရရင် ကိုယ့်ရဲ့money eater ကားအကြောင်း ပြောကြပြီး ဟားကြတော့တာပဲ။ ဆူနမ်နဲ့ရာမားကားက ၄၅၀၀ နဲ့ ဝယ်ပြီး ဘာပြသနာမှမဖြစ်သလို ၄၀၀၀ ကျော်နဲ့ပြန်ရောင်းတော့ ဘာမှအရှုံးသိပ်မရှိဘူး။ ကျောင်းမှာတုန်းက ဆူနမ်တို့ ကားဟာ ဆူနမ်တို့ ဆီမှာတုန်းက ပြသနာများသလောက် ကိုယ့်ဆီရောက်တော့ ဘာပြသနာမှမရှိဘူး။ ကိုယ်နဲ့ယန်းဇီ သိပ်မမောင်းတာလည်းပါတယ်။ ဖို့ ဝိန်းအစ်မဆီမှာတုန်းက ဘာပြသနာမှမရှိပေမဲ့ ကိုယ့်ဆီရောက်မှ ပြသနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်ဖြစ်တာ ကိုယ့်ကံပေါ့။
တစ်ထောင်ကျော် ၂ ထောင်လောက်သာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ကားကို ပြင်ဆင်ပြီး ၄၅၀၀ နဲ့ ရောင်းမှန်းသိရက်နဲ့ဝယ်တာ ကိုယ့်အမှား။ ဘတ်စ်ကားနဲ့လက်ကေ့စ်အိတ်တွေအများကြီး သယ်လို့ ရပေမဲ့ ကိုယ်က ၂ အိတ်ပဲသယ်နိုင်တော့ ကျန်တဲ့အိတ်တွေကို USPS နဲ့ ပို့ ။ အိမ်ရှင်က ရထားဂိတ်အထိ လိုက်ပို့ ပေးတယ်။ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာ မလေးတရုတ်မ ပီနန်မြို့ မှာနေတဲ့ အဘွားကြီး ၅ ယောက်ထဲက တယောက်နဲ့စကားလက်ဆုံကြတယ်။ သူတို့ က ကမ္ဘာပတ်နေကြတာ အသံထွက်က ဗြိတိသျှလေသံ။ သူတို့ ဘာသာ ခရီးအစီအစဉ်ဆွဲ ဈေးပေါတဲ့ hostel မှာနေ ဒီစီပြီးတော့ နယူးယောက်၊ ဘော်စတွန်ကို လည်မလို့ တဲ့ အာဂအဘွားကြီးတွေ။ ယူအက်စ်ဗီဇာ ၁၀ နှစ်ရတော့ မနှစ်က အနောက်ဖက်ခြမ်း၊ ဒီနှစ်အရှေ့ ဖက်ခြမ်း လည်တာတဲ့။ ကိုယ့်ကုမ္ဗဏီက တရုတ်ဆိုတော့ တရုတ်တွေမကောင်းဘူး မတရားခိုင်းတယ် ကောင်းတဲ့ကုမ္ဗဏီရှာတဲ့။ နယူးယောက်ကို ၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၇ ရက်နေ့ ပြောင်း ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်မှာ ရုံးတက်။ နယူးယောက်က မေရီလန်းထက် အများကြီးပိုအေးတယ်၊ အင်မတန် ဆူညံတယ်၊ လူနေထူထပ်တယ်၊ မြေအောက်ရထားတွေ ညစ်ပတ်တယ်၊ အစားအသောက် ပေါတယ်။ နယူးယောက်ကအစ်မ မိသားစုက ကိုယ့်ကို ကူညီစောင့်ရှောက်တယ်။ နယူးယောက်မှာ ကြုံတွေ့ ရတာတွေကတော့ နောက်အပိုင်းကျမှ ဆက်ပါဦးမယ်။
ဒီဇင်ဘာ ၆၊ ၂၀၁၇။
နိုင်အာဂရာရေတံခွန် ဇူလှိုင် ၂၀၁၃။
ဂျီစီ ခရီးကြမ်း - ၇
အလုပ်က အချိန်ပြည့်အလုပ် အပတ်တိုင်း အိမ်စာ၊ အဆိုင်းမင့်တင်၊ အဆိုင်းမင့် တင်ရမဲ့အချိန် နီးနေပြီ အဆိုင်းမင့် မပြီးသေးလို့စိတ်ဖီစီး။ တလခွဲတခါ mid exam ၊ final exam တွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ learning center တွေမှာ ဖြေရတယ်။ learning center တွေကို စာမေးပွဲခန်းသုံးခ ၆၀ ပေးရတယ်။ ဆူနမ်က စန်းစန်း ၆၀ သက်သာချင်ရင် စာကြည့်တိုက်တွေမှာ ဖြေလို့ ရတယ်ပြောလို့စာကြည့်တိုက်တွေကို proctor လုပ်ပေးမလားလို့မေးကြည့်တာ တချို့ တလေပဲ လုပ်ပေးတယ်။ စာမေးပွဲမေးခွန်းတွေကို ကျောင်းက စာကြည့်တိုက်ကိုပို့ ပေး စာမေးပွဲဖြေချိန်ကျရင် စာကြည့်တိုက်ကထုတ်ပေး အဖြေလွှာကို ကျောင်းကိုပို့ ပေးတယ်။ အလုပ်နည်းနည်းရှုပ်တော့ စာကြည့်တိုက်ဝန်ထမ်းတွေက ဘယ်လုပ်ပေးချင်ပါ့မလဲ။ ပိုက်ဆံ ၆၀ သက်သာပေမဲ့ စာဖတ်နေသူတွေကြားထဲမှာ ဖြေရတာဆိုတော့ အာရုံသိပ်စုစည်းလို့မရဘူး။ အစတုန်းက စာမေးပွဲကျမှာ သိပ်ကြောက်တာ။ တလခွဲတခါ စာမေးပွဲတွေ ဖြေနေရတော့ စာမေးပွဲကျမှာကို မကြောက်တော့ဘူး။ ဒီတခေါက် မအောင်ရင် နောက်တခေါက် ထပ်ဖြေမယ် သင်တန်းကြေးတွေ ထပ်တိုးလို့ကျောင်းသားအကြွေးတွေတော့ များလာတာပေါ့။ ၃ လတခါ ဘာတွေလုပ်နေပါတယ်၊ ဘာအတွေ့ အကြုံတွေ ရပါတယ်၊ ကျောင်းကသင်တဲ့ TM Transcendental Meditation ကြောင့် စိတ်ဖိစီးတာတွေ လျှော့ပါတယ် (အမှန်က TM ကိုမကြိုက်) ဆိုတဲ့ ရီပို့ ရေးတင်ရတယ်။ အလုပ်တဖက်နဲ့အဝေးသင်တက်ရတာ ပင်ပန်းတယ်။
ချက်ပြုတ်ရတယ် ဝယ်စားဖို့အဆင်မပြေဘူး။ စာမေးပွဲနီးရင် တရုတ်ဆိုင်က ဝယ်စားတယ် တရုတ်စာဆိုပေမဲ့ အမေရိကန်တရုတ်စာဆိုတော့ ချိုတယ် မစားနိုင်ဘူး။ ပိတ်ရက်တွေဆို ကိုရီးယား၊ ဗီယက်နမ်ဆိုင် ဈေးသွားဝယ်။ ဆိုင်မှာတယောက်တည်း ထိုင်မစားချင်လို့အမြဲတမ်း take out လုပ်တယ်။ လူဝီဗီလ်မှာနေတဲ့အချိန်အတွင်း ဘွတ်ဖိနပ်ဝယ်ဖို့ ၊ မျက်မှန်လုပ်ဖို့၂ ခါပဲ လျှော့ပင်းမောလ်ရောက်တယ်။ ရုံးမှာလည်း အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေမရှိ အတော်ပျင်းစရာကောင်းတယ်။ အိမ်ရှင်မန်ဒီက နင် ဘားလည်းမသွားတော့ ဘယ်လိုလုပ်မိတ်ဆွေ ရမလဲတဲ့။ မြို့ တောင်ဖက်ပိုင်းကလူတွေဆိုရင် နို်င်ငံခြားသားတွေကို မကြိုဆိုဘူးတဲ့။ ရုံးက တူရကီလေးမူဆာဖာက မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကို ဘာသာပြန်လုပ်ပေးမဲ့ ဘော်လန်တီယာလူလိုတယ်ဆိုလို့ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းကလူတွေနဲ့မြို့ အနောက်ဖက်ပိုင်းက မွန်၊ ဟိန္ဒူမိသားစုကို ဘာသာပြန်လုပ်ပေးတယ်။ မြို့ အနောက်ဖက်ပိုင်းမှာ ဘော်လန်တီယာလုပ်မယ်ဆိုတော့ မန်ဒီက စိတ်မချဘူး မသွားနဲ့ တဲ့။ မြို့ အနောက်ပိုင်းက ပြည့်တန်ဆာ၊ မူးယစ်ဆေး၊ မူခင်းတွေပေါတဲ့ အမည်းရောင်နယ်မြေ လုံခြုံစိတ်ချမှုမရှိဘူးတဲ့။ ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကသူတွေ ကြိုပို့ လုပ်ပေး၊ သူတို့ နဲ့ အတူတူ ရှိနေမှာဆိုတော့ စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူး။ ယောကျာ်းကဟိန္ဒူ၊ မိန်းမကမွန် မိသားစုက မလေးရှားကမ့်ကနေ ရောက်လာတာ ဗုဒ္ဓသာသာဝင်တွေ။ခရစ်ယာန်လို့ပြောပေမဲ့ ခရစ်ယာန်နဲ့ မတူဘူးလို့ဘုရားကျောင်းကလူတွေက ပြောတယ်။
ဒုက္ခသည်တွေကို အစိုးရက လေယာဉ်လတ်မှတ်ပေး၊ အိမ်ငှားပေးထားတယ်၊ စားဖို့food stamp ပေးတယ်။ ဒုက္ခသည်အစ်ကိုကြီး အလုပ်ရတော့ ဘုရားကျောင်းက ပါတီပွဲလေး လုပ်ပေးတယ်။ ဘုရားကျောင်းကလူတွေက အပတ်တိုင်း ဈေးဝယ်ဖို့လိုက်ပို့ ပေးတယ် မြန်မာ၊ ဆိုမာလီယား၊ အာဖရိကဒုက္ခသည်တွေ လိုအပ်တာတွေ ကူညီတယ်။ ဘုရားကျောင်းကလူတွေ ဒုက္ခသည်တွေကို မေတ္တာစေတနာနဲ့ ကူညီပေးတာ တကယ်ချီးကျူးတယ် ကိုယ်ဆို အဲဒီလိုမလုပ်နိုင်ဘူး။ တလတခါ မိုင် ၁၀၀၊ ၂ နာရီအဝေးက အိုဟိုင်းရိုးပြည်နယ် စင်စင်နာတီမြို့ မှာနေတဲ့ ဆူနမ့်ဆီကို သွားလည်တယ်။ ၂၀၁၂ ဂျူလှိုင် ၄ မှာ ရာမားရှိတဲ့ မန်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် ဘော်စတွန်ကနေ ၁ နာရီအဝေးမှာရှိတဲ့ ဂလော်ချက်စတာမြို့ ကို သွားလည်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ပထမဆုံးပြည်တွင်းခရီးဆိုတော့ မန်ဒီက အဝတ်တစုံအပို၊ ပိုက်ဆံအကြွေ၊ မုန့် နည်းနည်းယူသွားဖို့ ၊ ရာသီဥတုဆိုးလို့လူဝီဗီလ်မြို့ ကို လေယာဉ်မရှိရင် အနီးအနားက လက်ဆင်တန်၊ စင်စင်နာတီမြို့ ကိုသွား ပြီးမှတက္ကဆီနဲ့ လာလို့မှာကြားတယ်။ လေဆိပ်သွားဖို့ရုံးကအထွက်မှာ ကားတစီးကို ပွတ်တိုက်ခဲ့သေးတယ်။ သောကြာနေ့ ည ကန်တက်ကီပြည်နယ် လူဝီဗီလ်ကနေ နယူးဂျာဆီပြည်နယ် Newark ၊ ညဥ့်နက်သန်းခေါင် ဘော်စတွန်ကို ကိုယ်က ချောချောမောမော ရောက်တယ်။ အိုဟိုင်းရိုးပြည်နယ် စင်စင်နာတီမြို့မှာ မိုးသီးတွေကြွေလို့လေယာဉ်နောက်ကျ၊ ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာ လေဆင်နှာမောင်းဝင်တိုက်လို့ဘော်စတွန်သွားမဲ့လေယာဉ်ကိုမမှီ နောက်နေ့ လေယာဉ်အတွက် တညလုံးတန်းစီ စားစရာ၊ သောက်စရာမရှိ။
၄၅ မိနစ်အဝေးမှာရှိတဲ့ ပြည်တွင်းလေဆိပ်ကနေ လေယာဉ်စီးပြီး စနေနေ့နေ့ လည်မှ ဘော်စတွန်ရောက်လာတဲ့ ဆူနမ်ကို ထမင်းဘူးနဲ့ သွားကြိုကြတယ်။ ဘော်စတွန်မှာ ဟားဗတ်၊ အမ်အိုင်တီတက္ကသိုလ်တွေဆီ သွားလည်ကြတယ်။ ဘော်စတွန်ကပြန်ရောက်တော့ ကားမှာစာလာကပ်သွားတယ် ကိုယ်ပွတ်ခဲ့ကားပိုင်ရှင်ဆီက။ သူက ကိုယ်တို့ ရုံးက ကန်တက်ဆိုတဲ့ သာမယ်အင်ဂျင်နီယာမလေး။ သူ့ ကားပြင်နေတုန်းက ရုံးလာဖို့ ကို ကိုယ်ကပေးရမှာ ကန်တက်က ကားပြင်ဆင်ခက ၉၀၀ ပဲတောင်းတယ်။ အာမခံသုံးရင် ၃ နှစ်အထိ record ထဲမှာရှိနေပြီး အာမခံကြေးလည်း တက်မှာဆိုတော့ အားလုံးက အာမခံမသုံးဘဲ အိပ်စိုက်ပေးဖို့ အကြံပေးတယ်။ စန်းစန်း အဲဒီလိုတိုက်မိပြီးရင် ဘယ်ဖုန်းနံပါတ်ကို ဆက်သွယ်ပါဆိုပြီး စာရေးထားခဲ့ရမှာ ဘာမှမပြောဘဲထားခဲ့တာ hit and run ပြစ်မှုမြောက်တယ် ရဲကလိုက်ဖမ်းပြီး ထောင်ချလို့ ရတယ်သိလားလို့ပီတာ ပြောပြတော့မှ ကြောက်လိုက်တာ။ အလုပ်က တနှစ်ကွန်းထရပ်စာချုပ်ပြီးရင် ထပ်မတိုးနိုင်ဘူးဆိုတော့ အလုပ်စရှာရပြီ။ အင်တာဗျူးတွေရှိရင် ခွင့်ယူလို့ ရတယ်။ ၂၀၁၂ စက်တင်ဘာ အမေစု အမေရိကန်ကိုလာတော့ လူဝီဗီလ်မြို့ မှာ မိန့် ခွန်းပြောတယ်။ လတ်မှတ်မရတော့ မြန်မာဝတ်စုံဝတ်ပြီးသွားရင် အထဲကိုဝင်ခွင့်တော့ ရမယ်ထင်တယ်လို့ဆူပါဗိုက်ဆာဂျရတ်က ပြောတယ်။ လူဝီဗီလ်ပြီးရင် ဖို့ ဝိန်းမြို့ က ခန်းမဆောင်မှာ မြန်မာတွေကို မိန့် ခွန်းပြောမှာဆိုတော့ ဖို့ ဝိန်းကအစ်မနဲ့ လည်း တွေ့ ရအောင် ခွင့် ၂ ရက်ယူပြီး မိုင် ၂၃၀၊ ၄ နာရီ မောင်းရတဲ့ ဖို့ ဝိန်းမြို့ ကို ချီတက်တယ်။
ဆူနမ်၊ ရာမား၊ စန်းထွန်း
မန်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ် ဂလော့ချက်စတာမြို့ နားက ပင်လယ်ကမ်းခြေ
၂၀၁၂ ဂျူလှိုင် ၅
ရာမားက လေးအော့ဖ်ဖြစ်ပြီး ဆူနမ့်ဆီရောက်နေလို့လမ်းမှာ စင်စင်နာတီမြို့ ကိုဝင်ပြီး ဆူနမ်၊ ရာမားတို့ နဲ့နေ့ လည်စာစား ရာမားကို စိတ်ဓာတ်မကျ အားမငယ်ဖို့အားပေးရတယ်။ ရာမားက မေရီလန်းပြည်နယ် rockville မြို့ မှာ အလုပ်ရလို့မေရီလန်းပြည်နယ်ကိုပြောင်းတယ်။ မကြာပါဘူး work from home အလုပ်လုပ်လို့ ရလို့ဆူနမ် ရာမားဆီပြောင်းတယ်။ ဆူနမ် မေရီလန်းကိုပြောင်းမယ်ဆိုတော့ ဝမ်းနည်းလိုက်တာ အရေးအကြောင်းဆို ပြေးလာမဲ့ အကောင်းအဆိုး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမဲ့သူ အနီးအနားမှာ မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့လေ။ ဆူနမ်ဖိတ်လို့ခွင့်၃ရက်ယူရုံနဲ့အားလပ်ရက် ၁၀ ရက်လည်းရတော့ ၂၀၁၂ ခရစ်စမတ် မေရီလန်းကို သွားလည်ဖြစ်တယ်။ ဆူနမ်တို့ နဲ့အိမ်ဖြူတော်နား၊ ကယ်ပီတန်နား သွားလည်ကြတယ်။ ခရစ်စမတ်အကြိုနေ့ကိုယ်ကြောင့် ကယ်ပီတန်ရှေ့ က ခရစ်စမတ်သစ်ပင်နားအထိလျှောက် ဘူတာရုံရှာမတွေ့ဖုန်းဘထ္ထရီဒေါင်း ခြေကုန်လက်ပန်းကျ တက္ကစီမတွေ့အနားရပ်လာတဲ့ဘတ်စ်ကားပေါ်တက်ပြီး အနီးဆုံးဘူတာရုံမှာချပေးပါလို့ ပြော သဘောကောင်းတဲ့ဒရိုင်ဘာက ပို်က်ဆံမယူတဲ့အပြင် ဘူတာရုံနားချပေးပြီး အသေအချာ လမ်းညွှန်ပေးသွားသေးတယ်။ အေးလွန်းလို့ စတားဘတ်ဆိုင်ဝင် ကော်ဖီ၊ မုန့် ဝယ်တော့ မကြာခင်ဆိုင်ပိတ်တော့မယ်တဲ့။ နောက်နေ့တကုိုယ်လုံး ကိုင်ရိုက်ထားသလိုနာတာ စန်းစန်းကြောင့် စန်းစန်းကိုနင်းခိုင်းတဲ့။ အဲဒီလို ကိုယ်ခေါင်းမာတဇွတ်ထိုးဆန်တာတွေကို ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေ ခံရတယ်။
နှင်းကျတဲ့နေ့ ၊ ဆူနမ်တို့ နဲ့အပြင်သွားတဲ့နေ့ လောက်သာ အိမ်မှာနေပြီး မနက်ဆိုရာမားက ကိုယ့်ကိုဘူတာရုံမှာချပေး ရထားစီးပြီးဒီစီကိုသွား ကယ်ပီတန်ထဲဝင်လည်၊ ကယ်ပီတယ်မောလ်တလျှောက်က ပြတိုက်တွေ၊ ဝါရှင်တန်နေရှင်နယ်ကသီဒရယ်တွေကိုသွားလည် ညနေစောင်းမှပြန်လာ။ တနှစ်ကွန်းတရပ်စာချုပ်မပြည့်ခင် ၂ လအလို ဒီသောကြာနေ့ က မင်းရဲ့ နောက်ဆုံးနေ့ လို့မန်နေဂျာကပြောလာတော့ ဝမ်းနည်းလိုက်တာ။ မင်း အလုပ်လုပ်တာ မကောင်းလို့ မဟုတ်ဘူး စီးပွားရေးမကောင်းလို့ကွန်းထရပ်ဝန်ထမ်းအားလုံး လေးအော့ဖ်ဖြစ်တာ။ reference letter လိုတယ်ဆိုရင် အချိန်မရွေးပြော။ တလောက ကိုယ်စိတ်ဆိုးလွန်းလို့ ရန်ဖြစ်ထားတဲ့ ဆူပါဗိုက်ဆာဂျရတ်က သတင်းကြားကြားခြင်း စိတ်ပူလို့ပြေးလာတယ်။ နောက်ဆုံးနေ့နှုတ်ဆက်နေ့ လည်စာစား ရုံးနားကရေကန်ဘေးမှာ အတော့်ကိုဝမ်းနည်းပက်လက် ငိုတယ်။ လူဝီဗီလ်မှာ အင်တာဗျုးတခုက သဘောကျပေမဲ့ H1B စပွန်ဆာဆိုတာ တခါမှမကြားဖူးဘူးတဲ့။ ၂ နာရီအဝေးက မြို့ တော်ဖရန့် ဖွတ်က အစိုးရရုံးမှာ အိန္ဒိယသားတွေနဲ့အင်တာဗျုးတာ အော်ဖာကမ်းတောင် မယူဘူးလို့ဒေါသထွက်ရဖူးတယ်။ အင်တာလည်းမဗျူးဘဲ အလုပ်အော်ဖာရတာလည်း ရှိသေးတယ်။ လစာလည်းမဆိုးဘူး သူက ကိုယ်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာသိတော့ ကိုယ့်ကိုအလုပ်အရင်ခန့်သူ့ မှာကွန်းထရပ်အလုပ်ရတော့မှ ကိုယ့်ကိုသွင်း သူက ၂ ဆရ အဲဒီလို။ နောက် ၁ လနေလို့ မှ အလုပ်မရရင် မေရီလန်းကိုပြောင်းခဲ့တော့ အမ်းထရူးလည်း တန်နက်ဆီပြည်နယ်မှာ ကွန်းထရပ်အလုပ်ပြီးလို့ဆူနမ်တို့ ဆီမှာလာနေပြီး အလုပ်ရှာမှာ။
ဆူနမ်တို့ က အမ်းထရူးကို ကိုယ့်ဆီလာခိုင်း ပြီးမှမေရီလန်းကိုမောင်းလာ တန်နက်ဆီပြည်နယ် မန်းဖစ်မြို့ က ကန်တက်ကီပြည်နယ် လူဝီဗီလ်မြို့ အထိလေယာဉ်ခက ဝါရှင်တန်ဒီစီလေယာဉ်ခထက် ဈေးကြီးနေ၊ ကိုယ်နဲ့ အမ်းထရူးကလည်း သိပ်မခင်တော့ အကူအညီမတောင်းတော့ဘူး။ ကားက အင်ဂျင်ဝိုင်ဆီတွေယိုလို့မန်ဒီက တနေရာတည်းမှာ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ရပ်ခိုင်းတယ်။ မိုးရွာတဲ့နေ့ရုံးအဝင်အကွေ့ နားမှာ ကားတပတ်လည်ထွက်သွားလို့ ကားတာယာကို လဲထားတယ်။ ကားအင်ဂျင်အပူချိန်တက်လို့ပြင်ရင်ဘယ်လောက်ကျမလဲမေးတော့ မပြင်တော့နဲ့အသစ်ဝယ်တဲ့။ မေရီလန်းခရီးအတွက် ကားကြံ့ခုိုင်မှုစစ်ဆေး ကားပြင်ဆိုင်ကတော့ ဖောက်သည်ကြီးတယောက် လျော့သွားပြီဆိုပြီး စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမှာ။ ကန်တက်ကီပြည်နယ်ကနေ မေရီလန်းပြည်နယ်အထိ မိုင် ၆၀၀၊ ၉ နာရီမောင်းရတဲ့ခရီးကတော့ တကယ့်ကို အမှတ်တရပဲ။ မနက် ၆ နာရီကနေ မောင်းလာလိုက်တာ ကန်တက်ကီပြည်နယ်ကတော့ မြေပြန့် ဆိုတော့ မောင်းရတာအဆင်ပြေတယ်။ ၂ နာရီမောင်းပြီးရင် ကားရပ်နားနေရာမှာ ကားပြင်ဆိုင်က ပြလိုက်တဲ့အတိုင်း အင်ဂျင်ထဲထည့် ကားလည်းနား လူလည်းနား။ မန်ဒီကမှာတယ် ကားရပ်နားနေရာမှာနားရင် ကားတံခါးကို လော့ချထားတဲ့။ အနောက်ဗာဂျီးနီးယားပြည်နယ်ထဲကို ဝင်တာနဲ့တောင်တန်းတောင်ကုန်းတွေ လမ်းတွေက ကွေ့ ကွေ့ ကောက်ကောက်။ တခါတလေ တောင်ကြောကိုဖြတ်ရင် ကားတစီးတလေတောင် မတွေ့ ဘူး။ ကားကို လီဘာတင်ပြီး အရှိန်မြှင့်တာ မိုင် ၄၀ ကနေ မတက်တော့ဘူး ဟိုင်းဝေး မိုင် ၆၀ နဲ့မောင်းရမှာ။ ဆီကုန်ခါနီးဆိုတော့ အနီးအနားက ဆီဆိုင်မှာဝင်ထည့်တော့ ကားကိုဘယ်လိုရပ်လိုက်လဲမသိဘူး။
ကားက ဘယ်လိုမှ စက်နှိုးလို့ မရတော့ဘူး ခေါင်းနားပန်းကြီးသွားတယ်။ ဆီလာထည့်တဲ့ လူကြီး ၂ ယောက်ကို အကူအညီတောင်းပြီးပြကြည့်တော့ သူတို့ လည်းမသိဘူး။ စိတ်အေးအေးထားပြီး စက်နှိုးကြည့်လို့နှိုးတော့မှ သက်ပြင်းချနိုင်တယ်။ တချို့ နေရာတွေ့ မှာ မြူတွေဝေ့ ဆိုင်း နှင်းတွေကျ ကားကြောပြတ် အင်ဂျင်စက်သံက ခပ်ယဲ့ယဲ့ ကားကလီဘာတင်လို့ မရ ဖုန်းစစ်ကနယ်ကမမိ ကားထိုးရပ်သွားရင်ဒုက္ခ ကားအိုကားဟောင်းကို တယောက်တည်းမောင်းလာမိတာ မှားလေခြင်း။ ဆီဆိုင်ကို ဝင်ထည့်တော့ ဆီဆိုင်မတွေ့လမ်းကတောလမ်းလေး ဘာကားမှမတွေ့အတော်ကြောက်သွားတယ်။ လမ်းမပေါ်ရောက်လို့ကားတွေအများကြီးတွေ့ မှ စိတ်နည်းနည်းအေးတယ် အရေးအကြောင်းဆို အကူအညီတောင်းလို့ ရမှာကိုး။ အရေးပေါ်အချက်ပြစစ်ကနယ်ပြပြီး ဖုန်တွေညစ်ပေနေတဲ့ ကားမှန်ဆင်းသုတ်။ မေရီလန်းပြည်နယ်ထဲဝင်တာနဲ့မြေပြင်ကပြန့် ပြူးနေပြီး ကားတွေက အများကြီး။ ဆူနမ့်အိမ် ညနေစောင်းရောက်တော့ ဆူနမ်တို့ က အံ့သြနေတော လမ်းမှာတညအိပ်ပြီး နောက်နေ့ မှရောက်လာမယ် ထင်နေတာ။ ကိုယ်က မောင်းလို့ ရသမျှမောင်း မမောင်းနိုင်ရင် အနီးအနားကဟိုတယ်မှာအိပ် ဆက်မောင်းမယ်လို့စဉ်းစားထားတာ တနေ့ တည်း ရောက်လာတာပဲ ကောင်းပါတယ်။ ခရီးအဝေးကြီးကို ကားအစုတ်လေးနဲ့ မကြောက်မရွံ့မောင်းလာပြီးတော့မှ လမ်းမှာတခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် မကြောက်မလန့် တော်ဆိုပြီးတော့ ကြောက်နေတော့တာ။ ကားကောင်းလို့ ကတော့ ခရီးအဝေးမောင်းရလည်း မမှုပါဘူး။ နောက်နောင် ဘယ်တော့မှ ကားအစုတ်နဲ့ခရီးအဝေးကို တယောက်တည်း မမောင်းတော့ဘူးလုို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ အဲ အရှေ့ အနောက် အမေရိကန်နိုင်ငံဖြတ်ကျော်ခရီးတော့ မောင်းချင်သေးတယ် ကားအကောင်းနဲ့ ။ မေရီလန်းပြည်နယ်မှာ အလုပ်ရှာဖွေတဲ့အပိုင်းကတော့ နောက်အပိုင်းမှ တင်ပါဦးမယ်။
နိုဝင်ဘာ ၁၉ ၊ ၂၀၁၇။
ဂျီစီ ခရီးကြမ်း - ၆
လူဝီဗီလ်မှာနေတဲ့ စီနီယာကျောင်းသားများရှိလားလို့ကျောင်းကိုမေးကြည့်တော့ နီပေါကျောင်းသားတယောက်ရှိတယ်။ အီးမေးလ်ဆက်သွယ်တော့ စတိတ်ပြင်ပကို ရောက်နေတယ် နောက် ၂ လမှ ပြန်လာမယ်တဲ့။ စီနီယာဆီကနေ အကူအညီမရနိုင်တော့ craiglist ဆိုက်ကနေ အိမ်ခန်းရှာတော့ အိမ်ရှင်က ထောက်ခံပေးမဲ့သူ reference ၂ ယောက်တောင်းတယ်။ အင်ဒီယားနားပြည်နယ် ဖို့ ဝိန်းမြို့ မှာ လုပ်အားပေးလုပ်ခဲ့တဲ့ NGO အဖွဲ့ အစည်းက ဒါရိုက်တာအစ်မနဲ့ပရော်ဖက်ဆာလာမန်တို့ ရဲ့ရာထူး၊ လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်တွေ ပေးလိုက်တယ်။ ကိုယ့်နာမည်က စန်းစန်းဆိုတော့ ဂျပန်လားလို့ မေးတယ်။ ကိုယ့်ဓာတ်ပုံတောင်း သူတို့ မိသားစုဓာတ်ပုံ၊ မြေအောက်ခန်းက ကုတင်၊ မှန်တင်ခုံ၊ အဝတ်ဗွီရို၊ ရေချိုးခန်းဓာတ်ပုံတွေ ပို့ ပေးတယ်။ လာမနေခင် လာကြည့်ပါဆိုပေမဲ့ သွားမကြည့်နိုင်တော့ဘူး။ ကျောင်းကထွက်ခွာပြီး ၁ လ ပြည့်တဲ့နေ့ကန်တက်ကီပြည်နယ် လူဝီဗီလ်မြို့ ကို ပြောင်းတယ်။ အဲဒီအချိန် မိုင်းဖန်က သူ့ ရည်းစားရှိတဲ့ ဗာမွန်ပြည်နယ်ကို သွားလည်နေတော့ ဆူနမ်က မိုင်းဖန်ရဲ့ကားအသစ်စက်စက်ကိုမောင်းပြီး လိုက်မပို့ ရဲ ဘူး။ အိမ်ကထွက်ခွာဖို့၁ နာရီအလို တက္ကစီဘွတ်ကင်လုပ်ထားတာ ပျက်သွားလို့အသည်းအသန် တက္ကစီရှာ ဘတ်စ်ကားကို လက်မတင်လေး မှီတယ်။ ဘတ်စ်ကားမောင်းတဲ့သူကို စောင့်ပေးပါနော် ဒီကားနဲ့ လိုက်ရမှဖြစ်မယ်လို့အကူအညီတောင်းတော့ မြန်မြန်လုပ် စောင့်ပေးမယ်တဲ့။
စတိတ်လာတုန်းက လက်ကေ့အိတ် ၂ အိတ် ဟမ်းကယ်ရီ ၁ အိတ်ပဲပါတယ်။ ခုလည်း အဲဒီအတိုင်းပါပဲ ဒါပေမဲ့ စာအုပ်တွေကြောင့် ပေါင်ချိန်ပိုနေလို့ အပိုကြေး ၉၀ ထပ်ပေးရတယ်။ ကန်တက်ကီပြည်နယ် လူဝီဗီလ်မြို့ လည်ခေါင်က ဘတ်စ်ကားဂိတ်ရောက်တော့ တက္ကစီငှား။ အိမ်ရှင်တွေက လာကြိုပေးနိုင်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်း အားမှန်းမသိမအားမှန်းမသိ အားနာလို့ ။ အိမ်ရှင်တွေက အမေရိကန်မ၊ အမျိုးသားက အိန္ဒိယသား၊ အသက် ၃၅ လောက်ရှိမယ်လို့ခန့် မှန်းရတယ်။ သားကြီးလုကပ်က ၈ နှစ်၊ သမီးငယ် ကေတီက ၅ နှစ်။ လုကပ်က အသားဖြူဖြူမျက်ခုံးထူထူ မျက်လုံးနက်နက်နဲ့ လူချောလေး ယူရေးရန်းရုပ်ပေါက်တယ်။ ကေတီက ဘိုမလေး အာရှစပ်ထားတယ်လို့လုံးဝမထင်ရဘူ။ ဆံပင်ရွှေဝါရောင်နဲ့လိမ္မာသိတတ် သူ့ အမေလို စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်း ရှိတယ်။ မြေအောက်ထပ်မှာ ရေချိူးခန်း၊ အိမ်သာ၊ ကုတင်ပါတယ်။ ကိုယ့်အခန်းရှေ့ မှာ အပြေးစက်၊ home theatre လုပ်ထားတယ်။ မီးဖိုးချောင်ကတော့ အပေါ်ထပ်မှာ။ ဝေါမတ်လိုက်ပို့ ပေးပြီး စားစရာတွေ နည်းနည်းဝယ်။ မိုင်းဖန်ရဲ့ထမင်းပေါင်းအိုးကို သုံးနေတဲ့ဆူနမ်က အမေဇွှန်ကနေ သေသေချာချာ ရွေးဝယ်ထားတဲ့ ထမင်းပေါင်းအိုး သေးသေးလေးကို သူမသုံးဖြစ်တော့ ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ တော်သေးတယ် ဆူနမ်အမြော်အမြင်ကြီးပေလို့အမေရိကန်အိမ်မှာ ထမင်းပေါင်းအုိုးမရှိဘူး။
အဲဒီထမင်းပေါင်းအိုး ခုထိ သုံးနေသေးတယ် ၂၀၁၂ မတ်လ က ပေးလိုက်တာဆိုတော့ ၅ နှစ်တောင်ရှိပြီ။ ၂၀၁၇ လေဘာဒေးပိတ်ရက် ရာမားအိမ် သွားလည်တော့ အဲ့ဒီထမင်းပေါင်းအိုးနဲ့ ဆင်တူ နင်တို့ ကျောင်းမှာသုံးတဲ့ ထမင်းပေါင်းအိုး ရှိသေးလားမေးတော့ မရှိတော့ဘူးတဲ့။ ထမင်းပေါင်းအိုးတခုလုံးကို ရေခဲသေတ္တာထဲထည့်လိုက်လို့ပျက်သွားတယ်တဲ့။ ရာမားက smart people make stupid mistakes ဆိုလို့ရယ်လိုက်ရတာ။ ဆူနမ်က စန်းစန်း နင်သိပ်ကံကောင်းတယ် စာမေးပွဲကျ ငါတို့ ထက် ၃ လနောက်ကျတာ ကံကောင်းခြင်းတမျိုးပဲ။ ငါတို့ အတူတူ ကျောင်းပြီးရင် တောင်မင်းမြောက်မင်း မကယ်နိုင်။ ဟော ခုတော့ နင်ကျောင်းပြီးတဲ့အချိန် မိုင်းဖန် အလုပ်ရနေပြီဆိုတော့ နင့်ကိုခေါ်တယ်။ သိပ်မကြာဘူး မနီးမဝေးမှာ အလုပ်ရ လစာလည်းကောင်း blessing in disguise အဆိုးထဲကအကောင်းပဲ။ ကိုယ့်ကို ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောရင် သိပ်လက်မခံချင်ဘူး မကြိုးစားဘဲနဲ့ တော့ ကံမကောင်းဘူးလို့ခေါင်းမာမာနဲ့ပြောနေတုန်း။ တကယ်တော့ ကိုယ်ဟာ ကံကံရဲ့ အကျိုးတရားကို ယုံကြည်သက်ဝင်သူတယောက်ပါ။ အရင်တုန်းကဆို မိဘတွေဆန္ဒအရ ဘုန်းကြီးကျောင်းလိုက်ပေမဲ့ ယုံကြည်သက်ဝင်သူ မဟုတ်ဘူး။ ၂၀၀၅ သင်္ကြန်တရားစခန်း မှော်ဘီဝါးနက်ချောင်း ဗောဓိရိပ်ငြိမ်ဆရာတော်ကို ဖူးမြော်ရတော့မှ သံဃာကို ကြည်ညိုလာခဲ့သူတယောက်။
နိုင်ငံခြားရောက်တော့ ကိုယ့်ထက်တော်တဲ့သူက ကိုယ့်လောက်အလုပ်ကံမကောင်း၊ ကိုယ့်ထက်ညံ့တဲ့သူက ကုမ္ဗဏီကောင်းကောင်းမှာ လစာကောင်းကောင်းရတာတွေ မြင်ရတော့မှ ကံတရားဆိုတာကို ယုံကြည်လာတယ်။ အခက်အခဲတွေကြုံတော့မှ ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကို ပိုပြီးဆည်းကပ်လာတယ်။ ကန်တက်ကီအိမ်နဲ့ ရုံးက မိုင် ၁၀၊ မိနစ် ၂၀ လောက်မောင်းရတယ်။ တက္ကစီခေါ် တခါစီးရင် ၃၅၊ ၄၀ ပေးရတယ် ပြီးတော့ ချက်ခြင်း မရဘူး။ နယ်မြို့ တွေက အဲဒီအတိုင်းပဲ အများသုံးသယ်ယူပို့ ဆောင်ရေးက နယူးယောက်လို အဆင်မပြေဘူး။ လူဝီဗီလ်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ အတန်းထဲက ဂျော်ဒန်သားမဟာကို မေးကြည့်တယ် ရုံးကိုဘယ်လိုသွားလဲလို့ ။ သူက မြို့ ထဲက တိုက်ခန်းမှာနေတာ ရုံးကလည်း မြို့ ထဲမှာပဲ ဘတ်စ်ကားစီးတယ် တလမှ ၄၀ ပေးရတယ် ကြိုက်သလောက်စီးတဲ့။ ရုံးနားမှာ ဘတ်စ်ကားစောင့်စီးတာ ဘတ်စ်ကားတစီးလုံး ကိုယ်တယောက်တည်း။ တနေရာရပ်လို့ဘာဖြစ်တာလဲမေးတော့ ဂိတ်ဆုံး နောက်ဘတ်စ်ကားလာလိမ့်မယ် နောက်ထပ် နာရီဝက်လောက်မှ ရုံးကနေ မြို့ ထဲကိုပတ်မောင်း အဲဒီကနေမှအိမ်ကို ၁ နာရီ ၄၅ မိနစ်ကြာမှာတဲ့။ ဘတ်စ်ကားဂိတ်မှာ တယောက်တည်း အိမ်ရှင်ကိုဖုန်းဆက် အကူအညီတောင်း လာကြိုခိုင်း။ နောက်တော့ အိမ်ရှင်က ကြိုပို့ လုပ်ပေးတယ် အသွား ၁၀၊ အပြန် ၁၀ ဆိုတော့ တက္ကစီထက် အများကြီးသက်သာတယ်။
Thunder over Louisville Festival. April 24, 2012.
ည ၉ နာရီခွဲမှ မီးရှုးမီးပန်းဖောက်မှာကို ညနေ ၄ နာရီကတည်းက စောင့်နေကြတာ
အိမ်ရှင်အမေရိကန်မမန်ဒီက သဘောမနောကောင်း၊ အပြောကောင်း၊ ဂျပန်မှာ ၂ နှစ်လောက်နေဖူးတယ်။ ဂျပန်က သူ့ မွေးစားမိဘတွေနဲ့ခုထိအဆက်အသွယ်ရှိတုန်း။ အိမ်ရှင်မက်နိက အိန္ဒိယသား လက်ဆီတန်မြို့ က ကန်တက်ကီပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှာ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းပြီးတော့ မန်ဒီနဲ့အိမ်ထောင်ကျနေတာ။ မန်ဒီက အိမ်ကနေ သွင်းကုန်ထုတ်ကုန်လိုင်စင်လုပ်ပြီး မန်နိခ်ျက အေတီအန်တီကုမ္ဗဏီမှာ မန်နေဂျာ။ ကန်တက်ကီပြည်နယ်က ဘတ်စကတ်ဘောခရေစီ လူဝီဗီတက္ကသိုလ်အသင်း UOL နဲ့ ကန်တက်ကီတက္ကသိုလ်အသင်း UK အသင်းက ဗိုလ်လုဖက်။ ဘတ်စကတ်ဘောရာသီဆို UOL ပရိတ်သတ်တွေက အနီရောင်အလံလေးထောင်၊ UK ပရိတ်သတ်တွေက အပြာရောင်အလံလေးထောင်။ အိမ်ရှင်မက်နိက UK ကန်တက်ကီတက္ကသိုလ်ကျောင်းထွက်ဆိုတော့ UK အမာခံပရိတ်သတ်။ မတ်လဆိုရင် လူဝီဗီလ်မြို့ မှာ ကျင်းပတဲ့ ကန်တက်ကီဒါဘီမြင်းပွဲက နာမည်ကြီးတယ်။ ဒါဘီပွဲပြီးရင် Thunder Over Louisville မီးရှုးမီးပန်းပွဲက နှစ်သစ်ကူးချိန် နယူးယောက်က မီးရှုးမီးပန်းပွဲအတိုင်းပဲ။ အနီးအနားက အင်ဒီယားနား၊ အိုဟိုင်းရိုးပြည်နယ်တွေကပါ လာကြည့်တယ်။ ရုံးက လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွေ တည်ဆောက်တဲ့ကုမ္ဗဏီဆိုတော အင်ဂျင်နီယာ ယောက်ျားလေးတွေများတယ်။ အာရှသားက နည်းနည်းလေး ကိုယ့် Central Enginering ဋ္ဌာနကလူတွေက သဘောကောင်းတယ်။
Excel VBA နဲ့ရေးထားတာတွေကို C# Windows ပြန်ပြောင်းရေး၊ အင်ဂျင်နီယာတွေ လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Software Application တွေရေးပေး။ ကိုယ့်လိုကွန်ထရပ်တာ တူရကီလေးမူဆာဖာက နင့်ရှေ့ မှာ သုံးယောက်ဖြုတ်ထားတယ် သတိထားလို့ပြောတဲ့နေ့ က ဖျားချင်ချင်တောင်ဖြစ်တယ်။ ဆူပါဗိုက်ဆာဂျရတ်က မင်း အလုပ်ကြိုးစားတယ် သဘောကျတယ် ၆ လပြည့်ရင် အမြဲတမ်းဝန်ထမ်းဖြစ်ဖို့ပြောပေးတယ်တဲ့။ ၂ ပတ်ကဲနေမယ် တိုက်ခန်းသစ်ရှာမယ်လို့ပြောထားတဲ့အိမ်ရှင်ကို ၆ လလောက်နေပါရစေ အမြဲထမ်းဝန်ထမ်းဖြစ်မှ တိုက်ခန်းရှာတော့မယ်လို့ ပြန်ပြောတော့ ကြိုက်သလောက်နေပါ အေးအေးဆေးဆေးရှာတဲ့။ မန်ဒီက ခင်ဖို့ ကောင်းတယ် ကိုယ့်ကို ညီမလေးလို ဂရုစိုက်တယ်။ ပိတ်ရက်တွေဆို ကိုရီးယားဆိုင် လိုက်ပို့ ပေးတယ် ဖက်ထုပ်လုပ်နည်း သင်ပေးတယ်။ ကိုယ် ဟင်းချက်ရင် ဘာတွေချက်တာလဲမေးပြီး နင့်မိဘတွေကတော့ သိပ်ဂုဏ်ယူမှာပဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ပို့ တဲ့။ အုန်းနို့ ကျောက်ကျောကျွှေးတာ ကြိုက်လို့ တဲ့။ တက္ကဆပ်ပြည်နယ်က သူ့ အမေလာလည်တော့ အုန်းနို့ ကျောက်ကျော လုပ်ပေးရတယ်။ သူ့ မိဘတွေလည်း သဘောကောင်းတယ်။ မန်ဒီက ကြက်သွန်ကြော်ကြိုက်တဲ့ အာရှဆန်တဲ့ အမေရိကန်မ။ ဆူနမ်တို့ က ဒီိလိုချည်းကြိုပို့ စီးနေလို့မဖြစ်ဘူး ကားဝယ် ဆူနမ်၊ ရာမား၊ ဂင်္ဂါ၊ မိုင်းဖန်က တယောက်တထောင်ချေးတယ်။ ကားဝယ်ဖို့လိုက်ရှာတော့ Dealer တွေဆီသွားကြည့် တတ်နိုင်တဲ့ ၄၀၀၀၊ ၅၀၀၀ တန်မတွေ့ ။ တသောင်းတန်လောက် ဝယ်မယ်ဆိုရင် financing လုပ်လို့ ရပေမဲ့ credit scores က မကောင်းလို့အတိုးနှုန်း ၁၂ ပေးရမယ်တဲ့။၊
ဖို့ ဝိန်းမြို့ ကအစ်မက သူ့ ကားကို ၄၅၀၀ နဲ့ ရောင်းမယ်ဆိုတော့ ညီအစ်မလိုခင်တဲ့အစ်မဆိုတော့ ဘယ်နှစ်ခုနှစ်ကထုတ်တဲ့ကားလဲ၊ မိုင်ဘယ်လောက်မောင်းပြီးပြီလဲ၊ ဘာကားလဲဆိုတာလောက်ပဲမေးပြီး ဝယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ အစကတော့ ဖို့ ဝိန်းကအစ်မက လူဝီဗီလ်အထိ မိုင် ၂၅၀၊ ၄ နာရီ မောင်းပြီးလာပို့ မယ်၊ ဆူနမ်နဲ့မိုင်းဖန်က စင်စင်နာတီမြို့ ကနေ ဖို့ ဝိန်းကိုသွားယူ လူဝီဗီလ်အထိ မောင်းလာမယ်လို့ စီစဉ်၊ နောက်ဆုံးတော့ ၃၀၀ ပေးပြီး ထရပ်ကားနဲ့ ပဲ သယ်တော့တယ်။ ထရပ်ကားနဲ့ သယ်တာမှာ အမိုးဖွင့်မဟုတ်ဘဲ ထုတ်ပိုးထားရင် ဈေးပိုပေးရတယ်။ ကားကရောက်တာနဲ့ဘီးပြားနေလို့အိမ်ရှင်မန်ဒီကိုယ်တိုင်လေထိုး ဆိုင်ကိုသွားပို့ သွားယူ။ မန်ဒီကတော့ပြောတယ် ကားမှာအင်ဂျင်ချက်ဆိုင်း ပြနေတယ်တဲ့။ စတိတ်မှာကားမောင်းသက်က ၃ နှစ်အောက်၊ ကန်တက်ကီပြည်နယ်ရဲ့အကြီးဆုံးမြို့ ဖြစ်လို့ကားအားမခံက ဈေးများတယ်။ ကားမှတ်ပုံတင်ဖို့ သွားတာ မီးလုံးမကောင်းလို့ ၊ ကားပြတင်းအောက်ဖက်နားမှာ VIN နံပါတ်ပါပြီး ကားရှေ့ ကဒက်ရ်ှဘုတ်မှာ VIN နံပါတ်မပါလို့ ကန်တက်ကီပြည်နယ်ရဲ့မြို့ တော်ဖရန့် ဖွတ်မြို့ က မော်တော်ကားရုံးကိုလှမ်းတောင်း၊ VIN နံပါတ်မရှိဘူးဆိုတော့ ခိုးခံရတဲ့ကားများလားတဲ့။ လူဝီဗီလ်မြို့ ထဲက မော်တော်ကားရုံးကို ပို့ လိုက်လို့အိမ်ရှင်ကို အကူအညီတောင်း လိုက်ပို့ ခိုင်းပြီး သွားယူ။
အရောင်းအဝယ်စာချုပ်မပါလို့ဖို့ ဝိန်းကအစ်မကို လှမ်းတောင်းတော့ ကားက သူ့ နာမည်ပေါက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ အရင်ရောင်းခဲ့သူနာမည်နဲ့ ပဲ မောင်းနေတာတဲ့။ စန်းစန်း နင် ငါတို့ ကားကိုဝယ်တုန်းက ဂင်္ဂါနဲ့ နင် ဘဏ်မှာ အရောင်းအဝယ်စာချုပ် လက်မှတ်ထိုးတာ မှတ်မိလား။ မှတ်မိတယ် ငါ အီဂျစ်မလေးအာရပ်ကို ကားရောင်းတုန်းကလည်း ဘဏ်မှာပဲ အရောင်းအဝယ်စာချုပ် လက်မှတ်ထုိုးခဲ့တာ။ အရင်ရောင်းခဲ့သူက တခြားပြည်နယ်ကို ပြောင်းသွားခဲ့ရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ ဒုက္ခပါပဲ ဘယ်လို့ သူ့ နာမည်မပြောင်းထားတာလဲ လွယ်လွယ်လေးကို ဘဏ်မှာသွားလုပ်ရင် ပိုက်ဆံပေးရတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ ... အဲဒါတော့ ငါလည်း မသိဘူးဟ။ ကံကောင်းတာက အရင်ရောင်းခဲ့သူက ဖို့ ဝိန်းမြို့ မှာပဲ ရှိနေသေးတော့ စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးခိုင်း အသိဆရာတော်ဘုန်းကြီးက နိုထရီထုပြီး အရင်ရောင်းသူက ကိုယ့်ကိုရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အရောင်းအဝယ်စာချုပ် ရလာတဲ့အကြောင်းကိုတော့ ဆူနမ်တို့ ကို မပြောပြတော့ပါဘူး။ ပြောလိုက်ရင် ပါးစပ်ကလေးဟ မျက်လုံးအပြူးသား အံ့အားသင့်တဲ့မျက်လုံးတွေ what .... why ဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ကိုယ်မဖြေရှင်းနိုင်တော့လို့ ပါဘဲ။ ဒီလိုနဲ့မော်တော်ကားရုံးကို ၅ ခေါက်မြောက်ရောက်ပြီးမှ မှတ်ပုံတင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး အလွန်လွယ်ကူရိုးစင်းတဲ့ ကားမှတ်ပုံတင်တာလေးကိုတောင် ခက်ခဲခက်ဆစ် လုပ်ယူရသူပါ။ ကိုယ့်ကိုလည်း သိပါတယ် ကိုယ်ဟာ ဘယ်အရာကိုမှ လွယ်လင့်တကူ ရရိုးထုံးစံမရှိ၊ သူများထက် နှစ်ဆ၊ သုံးဆပိုကြိုးစားရ၊ ပင်ပန်းမဲ့ဇာတာပါတယ်ဆိုတာ။ ကန်တက်ကီရုံးမှာ လေးအော့ဖြစ်ပြီး မေရီလန်းပြည်နယ်ကို ပြောင်းတဲ့အကြောင်းကိုတော့ နောက်အပိုင်းတွေမှ ဆက်ပါဦးမယ်။
နိုဝင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၇။
ဂျီစီ ခရီးကြမ်း - ၅
ကျောင်းမှာ ၈ လတက် ၂ နှစ်ခွဲ အင်တန်းရှစ်ဆင်း အလုပ်အချိန်ပြည့်လုပ် အဝေးသင်တက်တာကို Ciricular Practical Training CPT လို့ခေါ်ပါတယ်။ ကျောင်း ၂ နှစ်တက် ၂ နှစ် အင်တန်းရှစ်ဆင်းတာကို Optional Practical Training OPT လို့ခေါ်ပါတယ်။ OPT ဆင်းနေတုန်း စာလုပ်စရာမလိုတော့ CPT က OPT ထက် ပိုပင်ပန်းတယ်လို့ ထင်တယ်။ ကိုယ်တို့ ကျောင်းက CPT ၈ လ ကျောင်းတက်ပြီးတာနဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ဖို့သင်တန်းပေးတယ်။ စီဗွီဖောင်ပေးလိုက်ရင် replacement course သင်ကြားတဲ့ဆရာတွေက စာမျက်နှာ ၂ မျက်နှာ စတိတ်ဖောမတ်နဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ စီဗွီဖောင် ပြန်ပေးတယ်။ အမေရိကန် ဓလေ့ထုံးစံတွေကို သင်ကြားပေးတယ်။ လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တဲ့အခါ မနီးမဝေးသင့်တော်တဲ့ အကွာအဝေးကနေ မဖွမညှစ် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်တတ်အောင် ကျောင်းသားတွေ တယောက်ခြင်းအခန်းရှေ့ ထွက် လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ရတယ်။ အင်တာဗျူးသွားတဲ့အခါ ရုံးဝတ်စုံဝတ်ဆင်သင့်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှာ အရောင် ၃ ရောင်ထက် မပိုသင့်ဘူး။ ဟိုင်း ဟောင်းအာယူဆိုတာ ဟိုင်းပါတဲ့။ အမေရိကန်တွေက အနံ့ ကိုသတိထားလို့ဆိုးဝါးတဲ့အနံ့ တွေ မရှိဖို့ လိုတယ်။ အရည်အချင်းတူတဲ့နှစ်ယောက်ဆို လက်မြောက်ခိုင်း အနံ့ ဆိုးမထွက်တဲသူကို ရွေးမယ်ဆိုတဲ့ ကာတွန်းလေးပြတော့ ရယ်လိုက်ကြတာ။ ၁ မိနစ်အတွင်း ကိုယ့်အကြောင်းကို အထိမိဆုံး ပြောနိုင်အောင် လေ့ကျင့်ရတယ်။
အင်တာဗျူးရင် မေးတတ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်းချက်၊ ရည်မှန်းချက်၊ ဘယ်အခက်အခဲက ဂုဏ်အယူရဆုံးလဲ၊ ဘာတွေလေ့လာသင်ယူချင်လဲ၊ အားလပ်ချိန်မှာ ဘာတွေလုပ်သလဲ၊ ဘာဝါသနာပါလဲဆိုတာတွေ ပြင်ဆင်ရတယ်။ အတန်းဖော်တွေ ပြောတဲ့အထဲမှာ ကောင်းတာတွေပါရင် မှတ်ထားပြီး အင်တာဗျူးဖြေတဲ့အခါ ထည့်ပြောတယ်။ စတိတ်မှာ ဘာ visa status နဲ့ နေတာလဲလို့ မေးရင် F1 ကျောင်းသားဗီဇာလို့မဖြေနဲ့ ။ ကျောင်းသားဗီဇာလို့ဖြေလိုက်လို့ ကတော့ တခါတည်းဖုန်းချသွားရော။ တရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့် work authorization ၂ နှစ်ခွဲ ရှိပါတယ် ကျောင်းသားဗီဇာနဲ့ လို့ဖြေရတယ်လို့သင်တယ်။ ဒီလောက်အတန်တန် သင်နေတဲ့ကြားထဲက ဘာဗီဇာနဲ့နေတာလဲလို့လျှပ်တပြတ်မေးလိုက်တဲ့အခါ အီသီယိုးပီးယားကျောင်းသားယေဒီက ကျောင်းသားဗီဇာနဲ့ ပါလို့မဆိုင်းမတွဖြေလိုက်တဲ့အခါ တတန်းလုံး ပွဲကျတော့တာပဲ။ အာဂျီရိုထမင်းစားဆောင်မှာတွေ့ တဲ့ ယေဒီကို ဘာဗီဇာနဲ့ နေတာလဲလို့ နောက်တော့ တရားဝင်အလုပ်လုပ်ခွင့်ရှိတဲ့ ကျောင်းသားဗီဇာပါလို့အရွှန်းသံလေးနဲ့ပြန်ဖြေတယ်။ အင်တာဗျူးမှာမေးတတ်တဲ့ ပုစ္ဆာတွေ၊ ပြသနာဖြေရှင်းနည်းတွေ လေ့လာပြီး အင်တာဗျူးကောင်းကောင်း ဖြေနိုင်ဖို့ပြင်ဆင်ရတယ်။ အလုပ်အော်ဖာရတဲ့အခါ ချက်ချင်းလက်မှတ်မထိုးဘဲ ကျောင်းကိုအရင်ပြ ကျောင်းမှအိုကေဆိုမှ လက်မှတ်ထိုးသင့်ပါတယ်တဲ့။
ကိုယ်တွေက စတိတ်အတွေ့ အကြုံမရှိသေးတော့ စာချုပ်ထဲက လှည့်ကွက်တွေကို မသိနိုင်ဘူးလေ။ ရိုက်စားအိန္ဒိယကုမ္ဗဏီတွေ အထူးသဖြင့် နယူးဂျာဆီပြည်နယ်ဖက်ကဟာတွေက ကျောင်းသားတွေ အလုပ်အရမ်းလိုချင်နေမှန်းသိတော့ သူတို့ ဆီမှာ သင်တန်းလာတက် ၃ လပြီးရင် အလုပ်သွင်းပေးမယ် ၆ လလုပ်ပေးရမယ်ဆိုပြီး မက်လုံးပေး။ နောက်တော့ သူတို့ ပရောဂျက်တွေမှာ လစာနည်းနည်းနဲ့မတန်မရာလုပ်ခိုင်း။ ဒီထက်ကောင်းတဲ့အလုပ်အော်ဖာရတော့ ထွက်လို့ လည်းမရ ထွက်ရင် ၆ လစာပေးရမယ်ဆိုလို့ကျောင်းက ကူညီဖြေးရှင်းပေးရတာတွေ ရှိတယ်။ အလုပ်ရရင်၊ အလုပ်ပြောင်းရင်၊ လေးအော့ဖ်ဖြစ်ရင်၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရင်ဆုံးကျောင်းကို အကြောင်းကြောင်းရမယ်တဲ့။ စတိတ်မှာ SSN Social Security Number က အရေးကြီးတယ်။ အင်တာဗျူးတွေမှာ background check လုပ်ချင်လို့SSN နံပါတ်တောင်းရင် နောက်ဆုံးဂဏ္ဏန်း ၄ လုံးကိုသာ ပေးပါတဲ့။ SSN ကဒ်ဆိုတာ ဂဏ္ဏန်း ၉ လုံး နာမည်ပါတဲ့ စာရွှက်သေးသေးလေးတခု။ နာမည်နဲ့SSN နံပါတ်သိရင် identity theft လုပ်နိုင်တယ်တဲ့။ ကျောင်းရောက်ပြီး ၂ လအကြာ ကွန်ပျူတာအခန်းစောင့် ၅ နာရီလားမသိ လုပ်ရတယ်။ ကျောင်းက ပိုက်ဆံနည်းနည်းပေးတယ် SSN ရအောင်လို့ ။ သိလား စန်းစန်း SSN က အရေးကြီးတယ် အမ်းထရူးဂူရုန်းက နီဘာစကားပြည်နယ်က တက္ကသိုလ်တခုမှာ တက်နေတာ ၆ လ ကြာတဲ့အထိ SSN မရလို့ဒီကျောင်းကိုပြောင်းလာတာ။
စတိတ်မှာ credit scores လည်း အရေးကြီးတယ် ခရက်ဒစ်ကဒ်သုံးပြီး ပိုက်ဆံဆပ်နိုင်မှ ခရက်ဒစ်စကိုးတက်မှာ။ ကယ်ပီတန်ဝမ်းဘဏ်က ကျောင်းသားခရက်ဒစ်ကဒ်ကို အရင်ဆုံးရတာက မိုင်းဖန်။ ခရက်ဒစ်စကိုး များများတက်အောင်ဆိုပြီး pizza ranch ကြက်ကြော်ဆိုင်ကို ခဏခဏချီတက်ကြတယ်။ မိုင်းဖန်ခမျာ ကိုယ်တို့ညှင်းဆဲသမျှ ခံရတယ်။ ခရက်ဒစ်စကိုးက တက်ဖို့ ခက်သလောက် ကျဖို့ တော့ အင်မတန်လွယ်တာ။ အချိန်မှီမဆပ်ရင် နောက်ကြကြေးများတယ်။ ခရက်ဒစ်ကဒ်တွေ အများကြီးလျှောက်ဖွင့်ရင်၊ JCrew ၊ Banana Republic တို့ လို အဝတ်အထည်ကုမ္ဗဏီတွေက ခရက်ဒစ်ကဒ်တွေဖွင့်ရင်၊ အချိန်မှီအကြွေးမဆပ်ရင် ခရက်ဒစ်စကိုးကျတယ်။ ကန်တက်ကီရုံးမှာ PNC ဘဏ်က ဘဏ်ကဒ်တွေအကြောင်း လာရှင်းပြတော့ debit card ပေမဲ့ ခရက်ဒစ်စတိုးတွေ တိုးအောင်လုပ်တဲ့ကဒ်ရှိတယ်လို့ ပြောတယ်။ ကျောင်းမှာ recruiting လာလုပ်တဲ့ Micro Retails ကုမ္ဗဏီကနေ ပထမဆုံးအင်တာဗျူးနဲ့အင်တန်းရှစ်အလုပ်ရသွားတဲ့ ယန်းဇီနဲ့ဘော်ဒါပေါင် အိုဟိုင်းရိုးပြည်နယ် ကလီဗီလန်းမြို့ နားကို ပြောင်းသွားကြတယ်။ ယန်းဇီကျောင်းက ထွက်ခါပြီးမကြာခင် ကိုယ်တို့ ကားကို ဘေးခန်းကဂျူနီယာ အီဂျစ်မလေးက ၅၀၀ နဲ့ ဝယ်သွားတယ်။ ၆၀၀ နဲ့ ဝယ် ၅၀၀ နဲ့ ရောင်း ကားမောင်းလိုင်စင်လည်းရ ပိုက်ဆံလည်း မရှုံးတဲ့ ကောင်းကျိုးပေးတဲ့ကားဆိုပါတော့။ Algorithms ဘာသာရပ်မှာ B- ရပေမဲ့ တက္ကဆပ်ပြည်နယ်မှာ အလုပ်ရလို့ အဝေးသင်ကျမှ Alogrithms ထပ်တက်ဆိုပြီး ကမ္ဘောဒီးယားလေး ချန်ဒရီယာကို ကျောင်းကနေ ထွက်ခွာခွင့်ပေးလိုက်တယ်။
ဆူနမ်၊ စန်းထွန်း၊ မိုင်းဖန်
ဧပြီ ၆၊ ၂၀၁၂။ Good Friday အိုဟိုင်းရိုးပြည်နယ် စင်စင်နာတီမြို့ လည်က ဗီယက်နမ်စားသောက်ဆိုင်
Alogrithms မှာ A Hons ရတဲ့ တရုတ်နဲ့ နီပေါကျောင်းသား ၂ ယောက် ပရော်ဖက်ဆာရူဘီ ထောက်ခံပေးလို့အမေဇွန်ကို အင်တာဗျူးသွားရတယ်။ အနောက်ဖက် ဝါရှင်တန်ပြည်နယ် ဆီရေတယ်မြို့ အထိ လေယာဉ်လတ်မှတ်၊ ဟိုတယ်ခတွေကို အမေဇွန်ကပေးတယ်။ ဘာတွေမေးလဲဆိုတော့ အစုံပဲ မေးသမျှကို ဝိုက်ဘုတ်ပေါ်မှာရှင်းပြရတာ တနေကုန်ပဲတဲ့။ အမေဇွန်အင်တာဗျူး အင်မတန်ခက်သလို အမေဇွန်ကုမ္ဗဏီက တကယ်ကောင်းတယ်။ နင် သိပ်တော်တာပဲလို့ချီးမွမ်းတော့ ငါလား တချို့ ဘာသာတွေမှာ B- ရတယ် တချို့ ဘာသာတွေမှာ အောင်ရုံ တချို့ ဘာသာတွေကျတော့ စိတ်ဝင်စားလို့အမှတ်နည်းနည်းကောင်းတယ် အေကျောင်းသားမဟုတ်ဘူးတဲ့။ မိုင်းဖန်က ဘာသာတိုင်း အေရတဲ့ အေကျောင်းသူ။ ကိုယ့်မှာလည်း အလုပ်မရသေးတော့ ဘယ်သွားမှန်းမသိ။ ကမ္ဘောဒီယားလေး ဆမ်နမ်ချန်လို သွားနေစရာအစ်မအိမ်၊ အသိမိတ်ဆွေ၊ အမျိုးအိမ်မရှိ။ ကျောင်းမှာဆက်နေလို့ တော့ရတယ် အပြင်ဆောင်မှာနေ ချက်ပြုတ်စားရင် စရိတ်သက်သာတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြို့ ကြီးတွေမှာ အလုပ်ရဖို့ လွယ်ကူတော့ မြို့ ကြီးတွေဆီ သွားသင့်တယ်လို့ဒါရိုက်တာဒီလိန်းက အကြံပေးတယ်။ ကိုယ်သွားစရာမရှိ ဖြစ်နေတာကို ဆူနမ်သိသွားတော့ မိုင်းဖန်ကိုပြော မိုင်းဖန်က သူ့ ဆီမှာလာနေပြီး အလုပ်ရှာဖို့ ပြောတယ်။ ကျောင်းကနေ အိုဟိုင်းရိုးပြည်နယ် စင်စင်နာတီမြို့ အထိ ဘတ်စ်ကားလတ်မှတ်ကို မိုင်းဖန် ဝယ်ပို့ ပေးတယ်။
အလုပ်ရှာတာ ၃ လရှိနေပြီ အလုပ်မရသေးတဲ့ဆူနမ်ကို မိုင်းဖန်ကပြောပေးလို့မိုင်းဖန်ကုမ္ဗဏီက ဆူနမ့်ကို အင်တာဗျူး အလုပ်အော်ဖာရလို့ ကိုယ်ရောက်ပြီး နောက်တနေ့ဆူနမ် ရောက်လာတယ်။ ကိုယ့်နေစားစရိတ်ကို မိုင်းဖန်နဲ့ ဆူနမ် တာဝန်ယူတယ်။ တယောက်ချက်တာ တယောက်မစားနိုင် ကိုယ့်အစားအစာ ကိုယ့်ဘာသာချက်စား သုံးယောက်လုံး အချက်အပြုတ်မကျွှမ်း။ မိုင်းဖန်နဲ့ ကိုယ်က ငါးပေါင်းစားရင် ဆူနမ်က ညှီလို့ တဲ့။ မိုင်းဖန်က ပရိုဂရမ်းမင်းမကျွှမ်းတဲ့ဆူနမ်ကို ညနေတိုင်း စာသင်တယ်။ သူ အလုပ်သွင်းပေးထားတာဆိုတော့ ဆူနမ်မလုပ်နိုင်မှာကို မိုင်းဖန်က စိတ်ပူ။ ဆူနမ်ကလည်း မိုင်းဖန် မျက်နှာပျက်ရမှာစိုးလို့စိတ်ဖိစီး။ အလုပ်ရှာတဲ့ဆိုဒ်တွေမှာ စီဗွီဖောင်တွေ တင်ပြီးတာနဲ့ဘဝဟာ သနားစရာ။ အိပ်ယာကတောင် မနိုးသေးဘူး ဖုန်းခေါ်နေပြီ။ တနေ့ တနေ့အင်တာနက်ဆိုဒ်မှာ စီဗွီဖောင်ပစ်တင်၊ ဖုန်းလာရင်ဖြေ၊ အင်တာဗျူးဖြေဖို့ ပြင်ဆင်၊ အင်တာဗျူးဖြေ၊ လေ့လာသင်ယူနဲ့ယားလို့ တောင် မကုတ်အား။ အလုပ်ရှာတဲ့သူက အလုပ်လုပ်တဲ့သူထက် ပင်ပန်းတယ်။ ဘယ်ဆီဘယ်ဝယ် ဘယ်တော့မှ အလုပ်ရမယ်မှန်းမသိ။ ၄၅ မိနစ်အဝေးက စင်စင်နာတီမြို့ မှာ ရေးဖြေလာဖြေဆိုတော့ တက္ကစီငှားရင် ပိုက်ဆံအများကြီးကုန်မယ် မိုင်းဖန်နဲ့ ဆူနမ်က ရုံးမသွားခင် ကိုယ့်ကိုလိုက်ပို့ ၊ ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေ၊ အဖြေလွှာကို မိုင် ၁၀၀ အဝေးက ကန်တက်ကီပြည်နယ် လူဝီဗီလ်မြို့ ကရုံးကို ဖတ်စ်နဲ့ ပို့ ၊ လူ ၄ ယောက်နဲ့ဖုန်းအင်တာဗျူး ၁ နာရီလောက်ဖြေ။ နေ့ လည်ထမင်းစားချိန်မှာ မိုင်းဖန်နဲ့ ဆူနမ်လာခေါ်။
ရေးဖြေ၊ ဖုန်းအင်တာဗျူးအောင်တော့ လူတွေ့ အင်တာဗျူး face to face လာဖြေခိုင်းတယ်။ မနက် ၉ နာရီရုံးမတက်ခင် စင်စင်နာတီမြို့ လည်ကောင်မှာရှိတဲ့ ဘတ်စ်ကားဂိတ်မှာ ချပေးခဲ့တယ်။ မိုင်းဖန်က အင်တာဗျူးသွားဖြေတဲ့အခါသုံးဖို့ပိုက်ဆံ ၁၀၀ ပေးတယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်းက စမတ်ဖုန်းမရှိ တလ ၄၀ ပေးရတဲ့ prepaid ဖုန်းဆိုတော့ အင်တာနက်ပွတ်လို့ မရဘူး စာအုပ်သယ်ရတယ်။ နေ့ လည် ၁၁ နာရီ ဘတ်စ်ကားစီး နေ့ လည် ၁ နာရီ ကန်တက်ကီပြည်နယ် လူဝီဗီလ်မြို့ လည်ကောင်ရောက်။ တက္ကစီ နာရီဝက်စီး လူ ၄ ယောက်နဲ့အင်တာဗျူး ၂ နာရီဖြေ၊ အပြန်တက္ကစီလာခေါ်၊ ည ၆ နာရီ ခွဲ ဘတ်စ်ကားနဲ့ ပြန်။ ဘတ်စ်ကားစောင့်ရင်း မြို့ လည်ကောင်တဝိုက် ပတ်လျှောက်ပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်။၊ ည ၉ နာရီခွဲ မိုင်းဖန်တို့ လာကြို နေ့ လည်စာလွတ်။ မိုင်းဖန်တို့ လည်း လမ်းတွေမှားလို့အတော်ကြီးကြာမှ ရောက်လာတယ်။ အင်တာဗျူးတဲ့ ဝီလီယမ်ဂရင်းက ကိုယ် recursive နဲ့ ဖြေထားတာကို သဘောကျလို့ တဲ့။ ဟင်း ဟင်း FPP အတန်းကို နှစ်ခေါက်တက် ထုံးလိုခြေ ရေလိုနှောက် ထောင်းလမောင်းကြေထားတဲ့ တန်ဖိုးတွေ ခံစားရပြီ။ ပရိုဂရမ်းမင်း ဖြေထားတာကိုကြည့်ပြီး ဖြေသူရဲ့ပြသနာဖြေရှင်းနည်း problem solving skill ၊ စဉ်းစားနည်း၊ ဖြတ်ထိုးညဏ်၊ IQ ကို ခန့် မှန်းလို့ ရတယ်ထင်တယ်။ အင်တာဗျုးပြီး တပတ်အကြာ အော်ဖာရတော့ နှစ်ပတ်အတွင်း ကန်တက်ကီပြည်နယ် လူဝီဗီလ်မြို့ ကို ပြောင်းရတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့money eater ကား၊ လူဝီဗီလ်မြို့ က အတွေ့ အကြေုံတွေအကြောင်းကတော့ နောက်အပိုင်းကျမှ ဆက်ပါဦးမယ်။
နိုဝင်ဘာ ၁၁ ၊ ၂၀၁၇။
Michelle Obama ရဲ့Becoming ဖတ်နေပါတယ်...